जुन 28, 2019 स्पिन महल समाचार र कैसीनो बोनस
विम्बल्डन टेनिस प्रशंसकहरुलाई विश्व को आकर्षित गर्दछ जो सबै एक चीज को जानना चाहते हो: 2019 महिला विंबलडन चैंपियन कौन हो? घास कोर्ट र स्ट्राबेरी र क्रीम को बारे मा परंपरागत छ किनकि तपाईं ब्रिटिश गर्मी को समयमा टेनिस को पारंपरिक घर मा प्राप्त गर्न सक्छन्। तर यो वर्षको शीर्षक एटीपी सर्किटमा परिचित नाम जान्छ? वा हामी एक प्रतिभाशाली बहिष्कारबाट चुनौतीको लागी हो? के अनलाइन स्पोर्ट्स बेइडिङले स्थापित स्थापित महिला खेलाडीलाई समर्थन गर्नेछ, वा सम्भवतः कसैले पन्डितहरू विश्वास स्थापित अर्डर परेशान गर्न योग्य छन्?
त्यसोभए, पाँच प्रमुख दाबीकर्ताहरूको संभावनालाई समीक्षा गरौं, विशेषज्ञहरूले यस वर्षको विम्बलेसन देवियर्सका एकल कार्यक्रममा चांदीका सामानहरूमा लेखिएका नामहरू पाउने मौका पाउनेछन्।
एक दाहिने हात अमेरिकी टेनिस खेलाडीले 1999 मा उनको पहिलो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने पछि खेलमा प्रभुत्व गरेको छ, सेरेना विलियम्स अब सावधानीपूर्वक आफ्नो उत्कृष्ट करियरको नजिक आउँदैछ। यद्यपि, 37 उमेरको उमेरमा पनि Serena अझै पनि मिल्ने म्याद बन्द गर्न र अनुभव छ भने यदि चीजहरू उनको बाटो जान्छ। विम्बल्डनमा कुनै अजनबी, उनले अन्तिम पटक दुई पटक जितेकी थिईन् 2015 र 2016 मा।
सेरेना विलियम्स ले कुल 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब को दावा गरेको छ, जो सबैभन्दा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत को लागि वर्तमान रेकर्ड छ। तर मातृभाषाको लागि खेलबाट समय सकियो, यो छिटो देखिरहेको छ कि यदि सेरेना र शीर्ष-स्तरीय टेनिस अब अन्ततः विभिन्न दिशाहरूमा सार्न सक्दछ।
2) पेट्रा किवावावा
A चेक पेशेवर टेनिस खेलाडी जसको प्रतिष्ठा बलियो ग्राउस्ट्रोकर्स द्वारा समर्थित विभिन्न खेल को आसपास बनाइयो छ, पेट्रा किभवावा को एक क्रूर चाकू हमला को शिकार को रूप मा टेनिस प्रशंसकहरुलाई पनि जाना जाता छ। यो घटना उनको घर मा 2016 मा भयो र उसलाई उनको रैकेट हात को गंभीर चोट को कारण केहि महीनों को लागि टेनिस खेल्न असमर्थ भयो। उनको खेलकुद वापसी अब राम्रो तरिकाले देखि बाहिर छ, किवावावा अहिले विश्व मा नम्बर6स्थान मा छ। दुवै 2011 र 2014 मा विम्बल्डन खिताब जीतने को बावजूद, उनको तब देखि उनको प्रमुख शीर्षकहरु को सूची मा शामिल नहीं गरेको छ। तथापि, 2019 मा अष्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम फाइनलमा पुगिसकेको छ, जहाँ त्यो हराएको नाओमी ओसाका सम्म, उनी अब उनको उत्कृष्ट रूप मा फर्कने केहि केहि आनंद उठा रहे हो। सिडनी र स्टटगार्टमा WTA टूर घटनाहरू सफलतापूर्वक सम्भवतः यो गर्मीमा अर्को विन्डोजमा विम्बल्डन शीर्षकमा अर्को वास्तविक झुकावको लागि सेट अप गरेको छ।
वर्तमान महिलाको संख्या 1 को रूपमा दर्जा दिइएको छ, नाओमी ओसाकाले अब सम्म दुई ग्रैंड स्लैम खिताबहरू जितेको छ: 2018 मा यूएस ओपनले पछि 2019 मा ओस्ट्रेलियन ओपन। एक आक्रामक आधारभूत खेलाडी, ओसाका एक बलियो सेवा र एक राम्रो फोहरहोर छ। तर विशेषज्ञहरूले तिनको क्षमता र स्थिरताको कुरा गर्छन् जसले उनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा लामो राहुलहरू नियन्त्रण गर्न सक्षम बनाएको छ जसले अहिले उनीहरूलाई नयाँ स्तरमा खेल ल्याएको छ। यस बर्षको फ्रान्सेली ओपनमा राम्रो प्रदर्शन गर्न छोडेपछि तेस्रो राउन्डमा अयोग्य खेलाडीले सीधा सेटमा हराएको नाईमी (जस्तै अमेरिकी सेरेना विलियम्स)। सायद यस निराशा वास्तव मा उनको अभियान योजनाहरु को दोश्रो मा मदद गर्न सक्छ र उनको बल को कोशिश गर्न को लागि र उनको ग्रैंड स्लैम खिताब को वर्तमान सूची मा एक विम्बल्डन च्याम्पियनशिप जोडने को लागि सक्षम गर्न सक्छन्।
4) अंगूठी कार्बर
अहिले विश्वमा संख्या5क्रमबद्ध गरिएको छ, जर्मनीएन्जेलिक केबरले 2018 विम्बल्डन विजेता हो जसले सीधा सेटहरूमा 'देवेज फाइनलमा' सेरेना विलियम्सलाई पराजित गर्यो। 1 मा एक पूर्व संख्या 2016, केरबर आफ्नो क्यारियर मा अब सम्म तीन ग्रैंड स्लैम खिताब को सुरक्षित छ: 2016 मा यूएस ओपन, XNumX मा अष्ट्रेलिया ओपन, र बेशक उनको पछिल्लो विम्बडन सफलता। 2016 मा उनको दुई प्रमुख खिताब को अतिरिक्त, एङ्गलीक केरबर ले साल को ओलंपिक मा प्रतिस्पर्धा गर्दा एक चांदी पदक जीता। अब रूप मा एक पुनरुत्थान को केहि आनंद ले, केरबरसँग एक अलर्ट खेल मा संलग्न हुन को कौशल छ जो एक मजबूत काउंटर पंच रणनीति द्वारा विशेषता छ।
स्पेनGarbine Muguruza एक अर्को पूर्व विम्बलडन विजेता हो जसले एक्सन विलियम्सलाई 2017 फाइनलमा दुई सेटमा हरायो। 2016 मा फ्रांसीसी ओपन खिताब पहिले नै जित्नु भएको छ, मुगुजुज अहिले दुई-पटक ग्रैंड स्लैम विजेता हुन्। यद्यपि उनी अहिले विश्वमा मात्र संख्या संख्या 19 स्थानमा रहेका छन्, गारबिन मुकुजुजुआलाई सेप्टेम्बर 1 मा वास्तवमा संख्या 2017 फिर्ता गरिएको थियो। अदालतको दुवै पक्षमा आफ्नो बलियो ग्राउण्डस्ट्रोकहरूको लागि प्रसिद्ध, मुकुजुजुआ अक्सर रालियहरुको तयारी गर्न सक्षम छन्। अनि जब उनको शक्तिशाली सेवा राम्रो तरिकाले प्रवाह हुन्छ, त्यो एक फराकिलो प्रतिद्वंद्वी हुन सक्छ।
त्यसोभए क्षेत्रको नेतृत्व कसले गर्छ?
विशेषज्ञहरू बताउँछन् कि गत वर्षको विम्बल्डनले क्वार्टर फाइनल चरणहरू अघि सबै शीर्ष 10 बीउहरू दौडिरहेका थिए। वास्तवमा, पछिल्लो अठारह बर्ष भन्दा माथि, विन्डोज विम्बन्डन ​​विजेता को 50% भन्दा बढी खेलाडीहरू शीर्ष चार बाहिर स्थानमा छन्। त्यस्ता तथ्याङ्कहरूले यो प्रतियोगिता अब बनी बृद्धि र भविष्यवाणी गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिन्छ। यद्यपि महिला महिला फाइनान्सिस्टहरूको नाम (उनीहरूको वास्तविक रैंकिङ बिना) देखाउँछ कि केही खेलाडीहरू (सेरेना विलियम्स, पेट्रा किभोभा, गारबीनी मुकुजुजुएला र एजेलीक केरबर सहित) हाल लगातार विम्बलडन च्याम्पियनशिपमा अन्तिम फाइनलमा हराए। ती आधारहरूमा मात्र, यसले यो वर्तमान सूचीलाई कम्तीमा केही सावधान परीक्षणको लायक सुझाव दिन्छ।
प्रविधि र विमानपट्टीको उपभोक्ताको समीक्षा
गेमिंगमा मोबाइलको रूपान्तरणीय प्रभाव
बैटम्यानले के कुरा सुन्नेछ?
के आभासी वास्तविकतालाई अगाडि बढाउने खेलहरू?
अब वोट गर्नुहोस् !!!5कारण कैसीनो मा ग्रीन, रातो र नीलो जाने को कारणहरु
जुन 25, 2019 जैकपोट सिटी समाचार र कैसीनो बोनस
यो क्रिसमस समय हो, र यसैले सर्वोत्तम समय जीत को लागी चाहान्छ। JackpotCity कैसीनो मा देखि चुनने को लागि धेरै गेमहरु संग, सूचित निर्णय गर्न को लागि यो एकदम गाह्रो हुन सक्छ। यो अनौपचारिक विशेषताहरू दुईवटा लोकप्रिय गेमहरू हुन् र बताउँछन् किन खेलाडीहरूले पनि खेल्न चाहन्छन् dragonz या जंगल जिम - एल डोराडो। प्रत्येक खेलको विजेता अवसरहरूको बारे बढि जान्नुहोस्, चाहे तपाइँको पीसी वा मोबाइलमा राम्रो र राम्रो खेलहरू र प्रत्येक खेलमा वास्तवमा कति शर्तहरू राखिने हो भने राम्रो छ। उत्सव रमाइलो यो छुट्टीको मौसम JackpotCity कैसीनोमा कुनै सजिलो हुन सकेन।
आगमन - मिश्रित वास्तविकता हेडसेट
स्लॉट्स शब्दावली पूरा गर्नुहोस्
डिसेम्बर 10, 2018 / समाचार
सोलो जाँदैछ - सबैभन्दा नयाँ यात्रा प्रवृत्ति
जुलाई 7, 2019 / जैकपोट सिटी समाचार र कैसीनो बोनस
हाम्रो दिन: जहाँ भूत र वर्तमान कोलेन्डर
अनलाइन कैसीनो सुरक्षा
WhatsApp अग्रेषित ट्याग थप्छ
अजीब साक्षात्कार प्रश्नहरूको प्रायः 10
परम्परागत क्यासिनो गेमहरूको मजा लिनका लागि एकपटक तपाईंले भूमिमा आधारित क्यानाडा क्यासिनो खेल स्थल भ्रमण गर्न थाल्नुभयो, अब तपाईले त्यहि अनुभव दिनको लागि केहि शानदार अनलाइन क्यासिनो खेलहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा, तपाईंको आनन्द अब सान्त्वना र सुविधाको कारण अझ ठूलो छ - उदाहरणका लागि, तपाईंलाई ड्रेस अप वा ड्रेस गर्न व्यवस्था छैन। यसको अतिरिक्त, तपाईं धेरै प्रकारको खेल खेल्न सक्नुहुन्छ ब्लेक, रूले र नौसिस बाट पेशेवरलाई कुनै पनि तहमा धेरै अन्य खेलहरू। र यदि तपाइँ नयाँ अनुभवको लागि उठ्नुहुन्छ र कौशल र उत्तेजनाको स्तर बढाउँनुहुन्छ भने क्यानाडामा अनलाइन क्यासिनो गेमहरूले लाइभ डीलरको साथ बहु-पहिया रूले वा पोकर जस्तै खेल खेल्ने मौका प्रदान गर्न सक्छ।
तपाईलाई सम्झनु पर्ने एउटा चीज हो कि, वास्तविक संसारको जस्तै, अनलाइन संसारको आफ्नै खतराहरू छन्। तर तपाइँले सचेत सावधानीहरू प्रदान गर्दछन्, तपाइँ सुरक्षित रहन र आफ्नो मनपर्ने इन्टरनेट गेम क्यासिनोमा गेम प्लेको मज्जा लिनु पर्छ। त्यसैले यहाँ सामान्य ज्ञान जाँचको एक द्रुत भित्ता हो जुन तपाइँ सधैँ सुरक्षित रहन र तपाईंको अनलाइन मजालाई बिर्सनु हुँदैन।
के क्यासिनो अनलाइन अनलाईन बैंकिंग विधिहरू प्रदान गर्दछ?
अनलाइन गेमिंग खरिद गर्ने शर्तहरू, खरिद भुक्तानीहरू र यस्तै वित्तीय लेनदेनहरू एकत्रित गर्दछ, त्यसैले यो जाँच गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको चुनेको जुआ अपरेटरले क्यानाडामा विश्वसनीय अनलाइन बैंकिंग विधिहरूको चयनको प्रयोग गर्दछ। क्यानाडामा, तपाइँले तपाइँको अनलाइन क्यासिनोलाई विश्वव्यापी भिसा, मास्टरकार्ड, भिसा इलेक्ट्रोन, मेस्ट्रो, पेपैल, पेन्ससेफेकार्ड, नेटेलेल, इन्स्टाबर्ट, इन्ट्यान्ट बैंकिंग र इन्टर्रोपको रूपमा उपलब्ध परिचित नामहरू मार्फत विश्वसनीय भरोसेमंद भुक्तानी विकल्पहरूको पहुँच प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ।
यदि तपाईं कुनै अपरिचित ब्रान्डहरू हाल्नुभयो भने, समझदार प्रक्रिया 'अब खेल्नुहोस' वा कुनै पनि क्यासिनो कारोबारमा संलग्न गर्नु अघि तपाइँको आफ्नै बैंकरबाट सल्लाह खोज्न हो। र यदि तपाइँसँग कुनै शंकाजनक संदेह छ भने, अर्को बैंकिंग विकल्प वा अन्य कैसीनो छनौट गर्नुहोस्।
के अनलाइन क्यासिनो अडिट र लाइसेन्स छ?
जब तपाईं खुसी हुनुहुन्छ कि क्यानाडा क्यासिनो खेलहरूको छनौट गरिएको अनलाइन प्रदायकले वास्तविक भुक्तानी गेटवे प्रयोग गर्दछ भने, तपाईले आफैलाई सन्तुष्ट पार्नु हुन्छ उनीहरूले ठीकसँग इजाजत पत्र सञ्चालन गर्ने। कानून भित्र काम गर्ने सबै साइटहरू उनीहरूको वेबसाइटमा उनीहरूको वेबसाइटमा प्रकाशित हुनेछन् जहाँ विवरणहरू देख्न सकिन्छ वा सजिलै भेट्टाउन प्रकाशित हुनेछन्।
क्यानाडाको आफ्नै Kahnawake गेमिङ आयोग (केजीसी), माल्टा गेमिंग प्राधिकरण (एमजीए) र अन्यलाई उपयुक्त गेमिङ प्रदायकहरूको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्दछ जुन एक निष्पक्ष र वैध व्यवसाय सञ्चालन गर्दछ। त्यसैले तपाईंको पहिलो चरण नोट गर्न र त्यसपछि प्रकाशित कुनै पनि प्रकाशित इजाजतपत्र जानकारी जाँच गर्नु पर्दछ। इजाजतपत्र एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, तर ईसीओआरआरए जस्तै ईसीओजीआर को रूपमा इजाजतपत्र साइटहरूको नियमित लेखा परीक्षण गर्दा उनीहरूको गेमलाई राम्ररी निष्कर्षमा पुर्याएको प्रमाण हो। UK-बेटेड ईकोग्रा एक परीक्षण एजेन्सी हो जसले अनलाइन गेमिंग सफ्टवेयर र सफ्टवेयर प्रणालीहरू सम्पूर्ण संसारमा निगरानी गर्दछ। यो, निस्सन्देह, क्यानडामा र अन्य महत्त्वपूर्ण अनलाइन गेमिङ क्षेत्रहरूमा पहिचान गरिएको छ।
क्या क्यासिनो साइट भाषा सेवाको साथ ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ?
एक अनलाइन क्यासिनो यो राम्रो तरिकाले सेवा गर्ने क्षेत्रलाई सेवा गर्दछ जुन यसले कुनै पनि नागरिकलाई उचित र समान आधारमा ग्राहकको हेरविचार सुविधाहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। क्यानाडामा, उदाहरणको लागि, जुन स्पष्ट रूपमा दोहोरो-भाषा क्षेत्राधिकार हो, कुनै पनि जिम्मेवार क्यासिनो साइटले ग्राहकहरूको लागि दुईवटा फ्रान्सेली र अंग्रेजी भाषाको प्रस्ताव प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यस्तो समर्थन सबै चोटि उपलब्ध हुनुपर्छ ताकि समुदायको कुनै क्षेत्र कहिल्यै सहयोग पुर्याउँदैन जब उनीहरूलाई समर्थन चाहिन्छ।
केही सुरक्षा सुझावहरू:
अनलाइन क्यासिनो खेल खेल्दा केही विशिष्ट कार्यहरू तपाईं आफैं सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ:
- तपाइँको पीसीमा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न नदिनुहोस्। धेरै अनलाइन क्यासिनोहरूले आफ्नो साइटबाट सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सुविधाहरू प्रस्ताव गर्नेछन्। जब यो एक सुविधाजनक विकल्प लाग्न सक्छ, तपाईंको कम्प्यूटरमा कुनै तेस्रो-पक्ष सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नाले संधै एक निश्चित जोखिम पाउँछ। र तपाईंको गेमिंग कार्यले वित्तीय लेनदेन कहाँ छ, कुनै पनि दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयरले तपाईंलाई धेरै कमजोर स्थितिमा राख्छ। ह्याकरहरू तपाईंको विश्वासयोग्य स्वभावबाट फाइदा लिन खोज्न सक्छ कि संदिग्ध जुआ सफ्टवेयर भित्र कीड़े र भाइरस लुकाउन सक्छ। यी विशेषताहरू त्यसपछि तपाइँको व्यक्तिगत र वित्तीय डेटा चोरी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, तपाईंको सुरक्षा पासवर्ड सहित।
- केवल https सुरक्षा प्रोटोकॉलहरू रोजगारी क्यासिनोमा प्ले गर्नुहोस्। जबसम्म तपाइँ संवेदनशील व्यक्तिगत र वित्तीय डेटा अनलाइनमा जानुहुन्छ, तपाईले पहिला प्रमाणित गर्नु पर्छ कि तपाइँको चुनेको वेबसाइटले सुरक्षित इन्क्रिप्सन प्रयोग गर्दछ। यो एक प्रमुख ताला चिन्ह द्वारा देखाइएको छ जुन कुनै URL ठेगाना जानकारीको छेउमा देखिन्छ। SSL (सुरक्षित सकेट तह) एन्क्रिप्सनको रूपमा चिनियो, यो प्रविधिले तपाईंको सबै सन्देशहरू (र व्यक्तिगत डाटा समावेश गर्दछ) लाई अन्त-टु-अन्त्य कोडिङद्वारा सुरक्षित गर्दछ जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई जानकारी प्रदान गर्दछ जुन तपाइँको जडानलाई इन्टरनेटमा सफल हुन्छ। यदि एक वेबसाइटले ताला चिन्ह देखाउँछ भने तपाइँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। यदि कुनै पैडल लोगो छैन भने तपाई सुरक्षित हुनुहुन्न - चाहे साइटले दावी गर्न सक्दछ वाहेक।
- आश्चर्य देखि बचाउन वेबसाइट नियम र सर्तहरू सावधानीपूर्वक जाँच गर्नुहोस्। तपाइँलाई स्वीकार गर्नु अघि जुआ हुँदै वेबसाइटको सर्तहरू र सर्तहरू पढ्न साहसिक लाग्न सक्छ। तर यदि तपाईं राम्रो मुद्रण जाँच गर्नुहुन्न भने, तपाईं लुकेको शुल्क र अनुचित र / वा गैरकानूनी नियमहरूसँग सहमत हुन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको विरुद्ध कुनैपनि समयमा प्रयोग गरिनेछ। अपमानजनक अपरेटरहरू तपाईंको लापरवाहीको फाइदा उठाउन संकोच गर्ने छैनन्। त्यसैले तिनीहरूलाई मौका नदिनुहोस्!
- कसैको साथ व्यक्तिगत विवरण साझा नगर्नुहोस्। सोशल मिडियामा गेमप्ले छलफल गर्दा तपाइँको गेममा एक मजाक एक्सटेन्सन हुन सक्छ। तर सधैँ तपाईंलाई कहिल्यै साझेदारी नगर्न निश्चित छैन, वा अनैतिक रूपमा व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी पनि खुलासा गर्नुहोस्। यो स्थानले तपाइँलाई सम्भावित ह्याकर्सबाट खतरामा मात्र गर्दैन, यदि यो साबित हुन सक्छ कि तपाईंले जानकारीलाई अझ ठूलो हानिमा राख्नुहुनेछ भनेर जानकारी साझा गर्न सहमत हुनुभयो। उदाहरणका लागि, तपाइँको बैंकले तपाईंलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्न सक्दछ।
विल ट्रम्पले आफ्नो कार्डहरू सही खेल्छन्?
के जुलले ठूलो तंबाकूलाई बेचेको छ?
क्यासिनो उमेर चुनौती - तपाईं यो लागि हुनुहुन्छ?
प्रविधि र दूरस्थ कार्य को उपभोक्ता
Smartwatch गेमिंग मोबाइल गेमिङलाई हराउन सक्नुहुन्छ?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो र फुटबलहरू जसले एक झलकलाई प्रेम गर्छ
क्यानाडामा सबैभन्दा नयाँ स्लॉटहरू: ब्रेक हिँड्ने डिलक्स
आकर्षण फुटबल प्रशंसकहरू अंग्रेजी र जर्मन क्लब बीचको सम्बन्धमा छ
जुन 25, 2019 स्पिन महल समाचार र कैसीनो बोनस
Baccarat संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय कार्ड आधारित कैसीनो खेलहरू मध्ये एक हो। यो बुझ्न सजिलो छ किनकि तपाईलाई विचार गर्नुहोला कि घरको फाईदा यसको साथमा अन्य तालिका गेम भन्दा कम छ। यो निश्चित रूपमा यो मामला हो पन्टो बान्को, अंग्रेजी भाषा बोल्ने दुनिया भर मा क्यासिनोहरुमा बाककाट को सबै भन्दा व्यापक रूप देखि उपयोग वाला संस्करण। निस्सन्देह, खेलको अपेक्षाकृत कम घर फ्यादा फाइदामा पहिलो स्थानमा एक राम्रो रणनीति हो। यद्यपि त्यहाँ धेरै अन्य खेलहरू छन् जुन तपाइँले आफ्नो किस्मतको प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, बेकरकाटले तपाईंलाई समयको साथमा एक उचित फिर्ती प्रदान गर्नेछ भन्ने अर्थ छ भने यो एक राम्रो खेल हो यदि तपाईं केवल मनोरञ्जनको लागि खेल्दै हुनुहुन्छ।
यद्यपि, जुटाउनेहरूले आफ्नो शर्तलाई अझ बढी गम्भीर रूपमा लिने तरिकामा खेल्न चाहान्छन भन्ने अर्थ छ कि उनीहरूले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छन्। बाकका नियमहरू, विशेष गरी पन्टो बान्कोको कारणले, यस सन्दर्भमा मद्दत गर्ने रणनीतिहरू विकास गर्न सम्भव छ। निस्सन्देह, अनलाइन बेकरकोटले तपाईलाई एक ईटाई र मोर्टार क्यासिनोमा पत्ता लगाउँदा केवल एउटै नियमहरू प्रयोग गर्दछ, त्यसैले यी रणनीतिहरू तपाइँसँग व्यक्तिमा जुआ स्थापनामा भाग लिन वा इन्टरनेटमा खेल खेल्न जान्नुपर्दछ। केहि उत्तम बेकरका रणनीतिहरू जुन तपाइँले प्राय: जित्न मद्दत गर्नेछ?
यद्यपि त्यहाँ धेरै उन्नत रणनीतिहरू छन् जसले खेलाडीहरूले खेललाई सुधार गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्, तथाकथित आधारभूत रणनीति कार्यमा लागी सबै भन्दा सरलको बीचमा छ। यो विधि अन्तर्गत, तपाईं आफ्नो ध्यान बैंकर शर्तमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ किनकि यो जहाँ सबै भन्दा कम घरको फाइदा हुन्छ। आखिर, फायदा यहाँ एक कम 1.06 प्रतिशत हो जुन एक शर्त शर्त भन्दा बढी आकर्षक छ जुन 1.24 प्रतिशतमा खडा हुन्छ। वास्तवमा, टाई शर्तको लागि सम्बद्ध आंकडा धेरै अधिक छ, 14 प्रतिशत भन्दा अधिक छ, किनकि बैंकर शर्तमा तपाइँको रणनीतिलाई सीमित पार्नुमा फ्याँकिएको कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट तरीका भनेको जुआ माथीको छ।
अनिवार्य रूपले, आधारभूत रणनीति भनेको समान दायाँ राख्नुको अर्थ हो, वा ब्रेकरमा जान सकिन्छ भने यो कमान्ड शर्तमा। जस्तै, यो स्थानमा राख्न को लागी एक अविश्वसनीय सरल रणनीति हो र तपाईंलाई जटिल गणित गर्न वा यसलाई तपाईंको काम गर्नको लागि कुनै पनि कार्ड गणना गर्न आवश्यक छैन। तथापि, यस रणनीतिले दीर्घकालीन अवधिमा सीमित सफलता पाएको छ। तपाईं केहि छोटो अवधि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो काम गर्न राम्रो तरिका हो यदि तपाईंसँग खेल्नको लागि सीमित समय छ वा खेलमा नयाँ हुनुहुन्छ।
कार्ड गिनती रणनीति
यद्यपि - सख्ती बोल्दै - यो कैसीनोहरूमा अनुमति छैन, यो सम्भावित कार्डहरू गणना गर्नको लागि सम्भव छ कि तपाईको जित्नको मौका अनुकूलन गर्न। जस्तै अन्य क्यासिनो कार्ड खेलहरू जस्तै, जस्तै ब्लेक, कार्ड गिनतीले तपाईंलाई काम गर्ने सबै भन्दा फायदेमंद हुँदा काम गर्न अनुमति दिन्छ। पन्टो बान्कोमा, कार्ड गिनती रणनीतिले तपाईंलाई काम गर्न मद्दत पुर्याउछ जब सबै भन्दा राम्रो खेलाडीको लागि छनौट गर्न वा जब बेगर बेगरको लागि जाने सबै भन्दा राम्रो हो। आदर्श रूपमा, तपाईंसँग गिनती सुरु गर्न ताजा जूता हुनेछ। प्रायजसो जूताहरू तिनीहरूमा छान्छन् वा आठ डेक कार्डहरू छन् र यो रणनीति मात्र यो काम गर्नेछ यदि। यदि जूता परिवर्तन भयो भने, तपाईंले फेरि गिनती सुरु गर्नुपर्छ।
शून्यमा सुरू गर्दै, यदि एकस, एक दुई वा तीन देखिन्छ भने तपाईले तपाइँको गणनामा एक थप्नुहुन्छ। दुई जोड्नुहोस् यदि चार अनुहार देखा पर्दछ। बरु, तपाईं आफ्नो गिनतीबाट घटाउनुहोस् यदि पाँच, सात वा आठ उकालो हुन्छ। यदि छ छ देखिन्छ भने तपाईंले गणनाबाट दुई टाढा लिनुभयो। अन्य सबै कार्डहरू गिनती रणनीतिमा कुनै असर पर्दैन। यस प्रणालीको साथ, यदि तपाईं गिनती 16 वा निस्क्रिय हुनुहुन्छ भने तपाइँ बैंकरमा दावी गर्नुहुन्छ। यस तरिकामा, यो मूल रणनीति भन्दा धेरै फरक छैन। तथापि, जब तपाईंको गणनाले 17 वा बढी पुग्छ, तपाइँलाई खेलाडीमा स्विच र शर्त हुनुपर्छ। तपाईं जित्नको लागि ग्यारेन्टी हुने छैन तर यो विधि जुआले काम गर्न मद्दत गर्दछ जब खेलाडी शर्त अधिक अनुकूल हुन सक्दछ।
दुई पंक्ति एक रणनीतिमा
बेकरको खेल गर्दा अर्को अपेक्षाकृत सजिलो ब्याटिङ रणनीतिको प्रयोग गर्न चाहने खेलाडीहरूले एक रणनीतिको फाइदा उठाउन सक्छन् जुन जब एक पङ्क्तिमा दुई गोल हुन्छ। खेलाडी वा बैंकरको सफल जीतले यो रणनीतिलाई खेलिरहेको हुन सक्छ त्यसैले तपाईले अघिल्लो दुई कञ्चहरूको नतिजा सम्झनु पर्दछ। यो दाँत चलाउने रणनीतिले तपाइँलाई आफ्नो शर्त केहि गर्न सक्दछ जुन पहिले अजीब लाग्न सक्छ।
एक पंक्ति मा दुई को रणनीति संग, तपाईं एक शर्त दांव छ कि दुई पंक्ति मा दोश्रो दो कप्तानहरु को परिणाम एकै ओर को लागि तेस्रो जीत संग जारी नहीं हुनेछ। यसले काम गर्दछ कि तपाइँ अघिल्लो दो कुप्पको बिरुद्ध प्लेयर वा बैंकरको लागि पहिले शर्त छ। यद्यपि यो तपाईंको प्रारम्भिक भावनाको विपरीत हुन सक्छ, तपाईले शर्त दाबी गर्नु पर्छ र यस तथ्यमा जुवा गर्नु पर्छ कि दुई पंक्तिको परिणाममा तीन पटक पङ्क्तिबद्ध हुने छैन। ठीक छ, यो निश्चित रूपमा सम्भव छ कि खेलाडीलाई तीन पटक जित्न सकिन्छ, वा त्यसका लागि बैंकर, तर यो रणनीतिको आधार हो जुन सांख्यिकीय कम संभावना हो। यदि तपाईं अनैतिक हुनुहुन्छ र अन्तिम तीन कुप्पहरूको परिणाम वा खेलाडी वा बैंकर शर्तको लागि टोपी-ट्रिक हो भने, त्यस परिणाम पछि आगामी कप्तानमा परिवर्तन हुन्छ।
क्यासिनोस मा धोखा - सजिलो या नहीं?
5 पायनियरहरूले खेल्ने र वोन (भाग #1)
Multiplayer कैसीनो खेलहरु को वर्णन
3 पुस्तकहरू तपाईलाई सफल 2019 प्राप्त गर्न अनिवार्य छ
किन डिजिटल सहायकहरू सधैं महिला छन्?
अविश्वसनीय क्यासिनो कार दिनेवा
कैसीनो उत्साहका लागि अन्तिम पढाई सूची
जुन 22, 2019 जैकपोट सिटी समाचार र कैसीनो बोनस
पोकर खेल्नका लागि चलचित्रहरू हेर्न सक्दछ व्यक्तिलाई गलत विचार दिनुहोस् जुन पोकर केही प्रकारको रहस्यमय कला जस्तो खेलिएको हुन सक्छ। मूवी क्यारेक्टरहरू सधैं जादुई चित्रकारी शानदार हातहरू द्वारा प्रतिद्वंद्वीलाई नष्ट गर्न लगाउँछन्, जस्तै कि केवल कार्डहरू खराब गर्दा उनीहरूलाई कुनै पनि तरिकाले भौतिक बनाउनेछ। यो निस्सन्देह, सही छैन, र यदि व्यक्तिले अनलाइन पोकरमा अधिक बारम्बार जित्न चाहानुहुन्छ भने, उनीहरूले मात्र अद्भुत हातहरू प्राप्त गर्न अपेक्षा भन्दा धेरै काम गर्नु पर्छ।
राम्रो पोकरमा प्राप्त गर्न निकै सजिलो र चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, साच्चिकै र अभ्यासका सँगी दशकहरू पनि एक पोकर मालिकको लागि सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ केही सरल, सजिलै कार्यान्वयन गरिएका सुझावहरू छन् जुन एक खेलाडीलाई शौकिया हुन, पेशेवरलाई लिन सक्छ। केही सरल पोकर सुझावहरू हेर्नको लागि आउनुहोस् जुन खेलाडीले धेरै पटक जित्न मद्दत गर्दछ:
धेरै शौकिया खेलाडिहरूले यस्तो अनुभव पाउँछन् कि यदि उनीहरूले शर्त नगर्ने र अर्को खेलाडीको दाबीलाई बुझेका छन् भने उनीहरूलाई खराब खेल, वा निष्क्रिय र उकालो खेलाडीको रूपमा देखा पर्नेछन्। पोकरको खेलको बारेमा यो गलत रवैया हो। यद्यपि पोकर रमाइलो हुन खेल हो, खेलको भाग हुन सक्रिय मात्र सक्रिय हुँदै एक अप्ठ्यारो टिकट होईन।
धैर्य पोकरको एक महत्वपूर्ण पहलू हो, र अनुकूल हातको साथ उच्च हुँदा बैंक ब्यालेन्स राख्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ बारम्बार तहको साथ केहि गलत छैन, र दाहिने हातमा हड्ताल गर्दा हड्तालको साथ आउँछ।
कठिन पहलू यो हो कि यदि एक खेलाडीले मात्र दावी गर्दछ र केवल जब उनीहरूको ठूलो हात छ भने कल गर्दछ, कि उनीहरूको ढाँचा चाँडै भविष्यवाणी हुने गर्दछ। तर यो आफैमा एक फाइदा हुन सक्छ। यदि अन्य खेलाडीहरूले प्रभाव पाउछन् कि एक खेलाडीले उनीहरूको ठूलो हात हुँदा मात्र दाबी गर्दछ, यसले हत्यारा ब्लाफको लागि सही अवसर सिर्जना गर्दछ।
अरू खेलाडीहरू ब्यालेन्स बन्द गरिदिन्छन्, र अनुमान लगाउँछन्, के सबै ब्लाफिङ भनेको हो। ध्यान राख्नुहोस् कि खेलाडीले केवल क्यालेन्डर द्वारा लिईएका कार्यहरू द्वारा के गर्ने निर्णय गर्न सक्छ। यदि एक खेलाडीले पाँच पङ्क्तिको लागि पङ्क्तिबद्ध गर्दछ, र त्यसपछि एउटा ठूलो, अचानक शर्तलाई तल दिईन्छ, यो धारणा हो कि खेलाडीले अद्भुत हात आकर्षित गर्न सकेको छ। तर यदि एक खेलाडीले पाँच हातका लागि पङ्क्तिमा ढाल्छ, र एक मध्यम शर्तलाई बहिष्कार गर्छ भने, यो धारणाले खेलाडीलाई कम मूल्य हात पुर्याएको छ।
यी धारणाहरूसँग खेल्दै बन्धन गर्ने कुञ्जी हो, र एक रणनीतिको लागि कहिल्यै चल्दैन, सधैं अन्य खेलाडी अनुमान गर्दछन्। साथै ध्यान राख्नुहोस् कि5र7कार्ड ड्रा पोकरमा कार्डहरूको संख्या ड्र्याग गरिएको हातको मानको संकेत हो। यदि एक खेलाडीले2कार्डहरू मात्र खिचेको छ भने, यो धारणा हुनेछ कि अन्य3कार्डहरूसँग मूल्य थियो। यो एक मात्र कार्ड आकर्षित गर्न पेशेवर पोकर खेलाडीहरूको लागि असामान्य छैन, जब पनि यो अर्थ छैन, भित्री लागि अन्य खेलाडीहरू फेंक गर्न।
माछाहरु मा लाइटिंग
पोकरमा एक ठूलो हात प्राप्त गर्दै केवल चारैतिर हरेक पटक आउँछ, त्यसैले यसको पूर्ण लाभ लिनु राम्रो पोकर खेलाडीको एक बिल्कुल आवश्यक भाग हो। तर, ठूलो पोकर हात ह्यान्डल गर्ने सही तरिका एक ठूलो खुल्ला शर्त तल फेंकिरहेको छ? जरूरी छैन। यदि यो एक ब्लेफिंग प्रविधीमा काम गर्यो, र आशा छ कि अन्य खेलाडिहरूले सोचेको थियो कि यो एक ब्लाफ थियो, त्यसपछि हाँ। तर ठूलो हातको प्रयोग गर्न थप सामान्य तरिकामा खेलाडीहरू आकर्षित गर्न हो।
एक सानो शर्तलाई तल राख्नु एक खेलाडीले प्रवाहको साथ जाने तयारी गर्ने विचार पाउनेछ। सानो शर्त बोल्ने कुनै पनि खेलाडीहरू अब मध्यम रूपमा महसुस गर्नेछन्, र त्यसैले अर्को सानो शर्त राम्रो विचार हो। यदि खेलाडीले दोस्रो सानो शर्त बोलाएमा, ठूलो शर्त अब राख्न सकिन्छ। यदि तिनीहरू ठूलो शर्तको लागि खेलाडी भए तापनि, एक सभ्य बत्ती अझै पनि लिनको लागी हुनेछ। यदि कुनै पनि खेलाडीले ठूलो शर्त बोल्छ भने, केवल आशा प्राप्त गर्न सक्दछ कि हात प्राप्त हुने भए पनि भन्दा राम्रो छ।
यो के हो जुन पोकर यस्तो उत्कृष्ट खेल बनाउँछ।
तपाईं अगाडि हुनुहुन्छ छोड्नुहोस्
यो एक क्लिच छ, तर धेरै राम्रो कारणको लागि। यदि लक्ष्य अनलाइन पैसा पोकर खेल्ने पैसा हो भने, बैंक ब्यालेन्स उच्च हुन सक्छ जबकि छोडेर पनि नियम संख्या एक हुन सक्छ। एकपटक ठूलो विजय प्राप्त भएपछि, त्यो नकदमा फाँट गर्नु खेलको बाहिर नगद सजिलो छ, र पैसा बैंकिंग गर्न सजिलो छ।
विजेता रेखाहरु को अवधारणा एक भ्रम हो, र संभावना को कुनै तार्किक दुनिया मा केहि पनि छैन कि भन्छन् कि एक ठूलो जीत एक ठूलो जीत को बराबर छ। केवल नकद लिने र खेल बाहिर निस्कने अन्तिम पोकर चाल हो, र जसले जो सफल खेलाडीहरू असफल भएका छन।
Le Kaffee Bar व्यापारको लागि खुला छ!
मलाई पैसा देखाउनुहोस्!5अपमानजनक हस्टहरु कि स्टुन्टेड पट्टी
Google Cryptocurrency Ads Ban गर्न को लागी
मेनु-अन्डरहरू: नयाँ प्रवृति मनपर्छ
मैनचेस्टर संयुक्त: व्यावसायिक राजाहरु
चाँद: यो को मालिक छ?
विषाक्त नरसंहार भनेको के हो?
अनलाइन क्यासिनो संसार उभरिरहेको छ, यसबाट त्यहाँ कुनै प्रश्न छैन। नयाँ वेबसाइटहरू लगभग दैनिक आधारमा खोल्दै छन्, र दैनिक हजारौं प्रयोगकर्ताहरू लगइन गर्दै छन्। यदि केहि छ भने, यो कसरी ठूलो छ, र अनलाइन कैसीनो बजार कसरी बढ्न सक्ने कतिको अन्त्य छैन। यो अनलाइन क्यासिनोहरू, र अद्भुत सौदाहरू द्वारा प्रस्तावित विशाल सुविधा दिइएका खेलाडीहरूका लागि सुसमाचार हो।
अनलाइन क्यासिनो उद्योगको विकासले अनलाइन क्यासिनो विश्व ईटा र मोर्टार क्यासिनो संसारलाई मारिरहेको छ भने धेरै प्रश्न गर्न आग्रह गरेको छ। यो तार्किक लाग्न सक्छ, दुई उद्योगहरूले केही व्यापार राजस्वमा भरोसा लगाउन लगाउनु भएको थियो। तर के यो तथ्य हो कि एक उद्योगले अर्कोलाई मारिरहेको छ? गरौं एक नजिकको नजर।
बस कैसीनो खेलहरू भन्दा बढी
यो कन्सोन्डम छलफल गर्दा कति धेरै ध्यान दिदैन, यो वास्तविक संसार क्यासिनो सजिलै कैसीनो खेल भन्दा धेरै छन्। वास्तव मा परिसर मा कैसीनो खेलहरु मौजूद छन्, तर वहाँ एक महान सौदा र मनोरंजन को पेशकश पनि छ। धेरै कैसीनो आफैले गर्वमा गर्व देखाउँछन् कि उनि प्रस्ताव गर्छन, खडा हास्य कलाकारहरू, ज्ञात जादूगरहरू र सेलिब्रेटी संगीतकारहरू समेत। वास्तवमा, कैसीनो खेल खेल्न को लागी अन्य कारणहरु को लागी धेरै मान्छे जो क्यासिनोहरूमा जान्छन्।
अर्कोतर्फ एक अनलाइन क्यासिनो, केवल क्यासिनो खेलहरूसँग ग्राहकहरू ड्राइंग गर्न धेरै अधिक सीमित छ, र अरु धेरै छैन। यसले अनलाइन क्यासिनोहरू कम अप्ठ्यारो गर्दैन, तर यसको अर्थ भनेको वास्तविक विश्व क्यासिनोहरू मनोरञ्जन विकल्पहरूको मार्गमा धेरै बढी छन्। त्यसोभए, यस सन्दर्भमा अनलाइन क्यासिनोहरू वास्तविक विश्व क्यासिनो भइरहेका छन्, र प्रतियोगिताको बाटोमा धेरै छैन।
अनलाइन क्यासिनो वास्तविक मद्दत गर्न सक्छ
त्यहाँ पनि यो लिने विरोधको रूपमा, अनलाइन विश्व क्यासिनोहरू वास्तविक संसार क्यासिनोहरूको लागि व्यवसाय उत्पन्न गर्दै आएका सुझावहरू पनि छन्। धेरै पटक अनलाइन क्यासिनोमा पहिलो पटक क्यासिनो गेमहरू अनुभव गर्दैछन्, पहिले कहिल्यै वास्तविक संसार क्यासिनोमा गएनन्। र, अनलाइन क्यासिनोमा क्यासिनो गेमहरूको लागि स्वाद प्राप्त गर्दा यी नयाँ ग्राहकहरूले वास्तविक विश्व क्यासिनोलाई भेट्न निर्णय गर्छन्।
सम्पूर्ण रूपमा, अनलाइन क्यासिनोहरू निश्चित रूपमा क्यासिनो गेमहरूमा रुचि बढ्दै जान्छन्, यो धेरै निश्चित छ, र विश्वभर विश्वव्यापी कैसीनो गेमहरू लोकप्रियतामा ठूलो वृद्धि देखिरहेका छन्। पोकर, उदाहरणका लागि, भर्खरै हालै टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न पर्याप्त लोकप्रिय भएको छ, र यो पूर्ण रूपमा पोकर लोकप्रियता अनलाइन पोकर खेलहरू द्वारा उत्पन्न लोकप्रियता मा वृद्धि हुन्छ। यदि अनलाइन संसारको लागि होइन भने, पोकर लगभग हालै लोकप्रिय हुने छैन किनकि यो हाल हो।
त्यहाँ कुनै प्रमाण वा साइन पनि छैन कि वास्तविक संसार क्यासिनोहरू लोकप्रियता हराउने जोखिममा छन्। लास वेगास जस्तो लोकप्रिय क्यासिनो गन्तव्यहरू व्यवसायमा गिरावट देख्न सकिँदैन, र वास्तवमा वेगास सामान्यतया व्यवसायको एकै मात्रामा देख्न सकिन्छ, यदि सामान्यतया केहि छैन। यसलाई फेरि राख्नु पर्छ कि वेगास शायद नै एक क्यासिनो गेम गन्तव्य हो जुन प्रत्यक्ष शो, पेटू खाना, र अन्य मनोरञ्जन विकल्पहरूको होस्टमा।
र त्यसोभए, त्यहाँ सानो क्यासिनो अनलाइन क्यासिनोबाट कुनै चोरीको कारोबार भइरहेको छ भनेर सुझाव दिन्छ। अन्य लोकप्रिय वास्तविक संसार क्यासिनोहरूमा त्यहि भनिएको छ, कुनैपनि व्यक्तिहरूले आगामी वा राजस्व उत्पादनमा कुनै कमी देखाउँदैनन्। वास्तविक संसार क्यासिनोहरू केवल लोकप्रिय छन्, नयाँ क्यासिनो रिसोर्ट्स खोल्छन्, र कुनै पनि बन्दको कुनै पनि संकेत देखाउँदैन।
अनलाइन क्यासिनो एउटा नयाँ उद्योग हो
धेरै मामलाहरुमा धारणा यो छ कि अनलाइन क्यासिनो संसारको छिटो वृद्धि वास्तविक संसार क्यासिनोबाट आउँदै हुनुपर्दछ, तर यसलाई आवश्यक पर्दैन। लोकप्रिय नयाँ उद्योग जो चाँडो विस्तार देख्छ, तर व्यवसायलाई पहिले नै अवस्थित उद्योगबाट आउँदैन। अनलाइन अनलाइन क्यासिनो टेक्नोलोजीको आधारमा आधारित छन्, यो पूर्णतया आशा गरिएको छ कि धेरै व्यवसाय नियमित रूपमा अनलाइन मनोरञ्जनमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट आउनेछ।
त्यसैले, अनलाइन क्यासिनो द्वारा देखी धेरै व्यवसायहरू अनलाइन भिडियो गेम विश्वसँग साझेदारी गरिएको छ। अनलाइन क्यासिनो गेम धेरै भिडीयो गेमहरूमा अलग छैन, र यसैले यो अर्थ लगाउँदछ कि दुई उद्योगहरू ओवरलैप हुनेछ। अनलाइन भिडीयो खेलहरू विकासमा छिटो विस्तार पनि देखिरहेका हुन्छन्, इलेक्ट्रोनिक खेलहरू चाँडो प्रमुख उद्योग बनेको छ।
वास्तविक संसार क्यासिनो सुरक्षित छन्
र त्यसोभए, निष्कर्षमा, त्यहाँ केही विश्व क्यासिनोहरू अनलाइन क्यासिनोको विकासबाट पीडित हुन सुझाव दिन्छ कि केही छैन। यदि केहि छ भने, दुई उद्योगहरू एकअर्का सँगसँगै बढ्दै जान्छ, त्यो वृद्धिलाई बढाउने, अर्कोबाट एक चोरी व्यवसायको विरोध।
साथै, खेलाडीहरू दुवैको प्रतिबद्धता बिना कैसीनो खेलहरूको आनन्द लिने पूर्णतया सक्षम छन्। जब एक असली दुनिया क्यासिनो बकर कैसीनो मा, र यसको विपरीत बडा केहि अनलाइन मजा को आनंद ले सकते हो।
उत्तम अनलाइन कैसीनो र मोबाइल पोकियहरुको छनौट कसरी गर्ने
विश्वको बाँकी अंशको तुलनामा अफगानिस्तानमा कति ठूलो छ?
हालको केकेक्यासिइनले2मुख्य सम्बन्धित भाषाहरूमा यसको सफ्टवेयर प्रदान गर्दछ
जनवरी 22, 2019 / समाचार
Microgaming स्लॉट्स मा सबै भन्दा कामुक महिलाहरु
इतिहासमा3प्रतीक जुआ चित्रहरू
जुलाई 1, 2019 / स्पिन महल समाचार र कैसीनो बोनस
रोबोटिक्स र कामको अन्त
शीर्ष टिप्स तपाईंलाई मद्दत मा मदद गर्न को लागी वेगास मा घर मा महसूस गर्नुहोस
म तपाईंलाई केहि गीत फिड्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् कि तिनीहरू तिनीहरूसँग परिचित छन्: "हरेक व्यक्ति एक मंगो मानिस हुन चाहन्छ / बिहानको शरीरमा सधै प्रकारको माग / जुगिनमा राख्न चाहन्छ, मानिसलाई जान्छ / स्वास्थ्य स्पामा कार्यरतहरू, मांसपेशिहरु बढ्छ।" यो गाँउ एक व्यक्ति आफ्नो सबै भन्दा बाहिरल्लो माचो-र धेरै लोकप्रिय-गीतहरूसँग। त्यो गीत र धेरै अन्य यो गर्मीमा फर्च्यून फैक्ट्री स्टुडियोबाट अनलाइन स्लटमा उडाइनेछ। चाँडै, माचो पुरुषले हामीलाई सबैको चाखलाग्दो चालको लागी परिचय दिनेछ र जैक्सपोटकैटमा तपाईलाई पैसा जित्न मद्दत पुर्याउनेछ।
डान्स फ्लोरको लागि तयार हुनुहोस्
जून 25, 2019, जब तपाइँ यो खेल खोल्नुहुन्छ, तपाई आफैलाई सामना गर्न सक्नुहुनेछ6X3स्पार्कलिंग, कताई रिल्स आफैलाई "macho पुरुष" संग टाँसिएको छ: एक निर्माण कार्यकर्ता, चरवाहा, प्रतिलिपि, मूल अमेरिकी, biker, र नाविक। प्रत्येक पुरुष को नृत्य को लागि एक व्यक्ति को चमकदार चरण संग आफ्नो रील छ। तपाईं डिस्को फ्लोरिङ हिड्नु हुन्थ्यो जुन जुकबक्सले YMCA, नौसेना र माचो म्यान सहित सबैभन्दा लोकप्रिय ग्रामीण जन गीतहरु को पाँच खेल्छ।
खेलले 15 फरक निश्चित पेनलाइनहरू सुविधा गर्दछ, त्यसैले तपाइँसँग जित्न धेरै तरिकाहरू छन्। गाँउका मानिसहरू प्रदर्शन र स्लट गर्दा डिजिटल को लागी मेकानिक भए पछि, खेलहरू रिलेका बीचमा मिल्दो चिन्हहरूको प्रत्येक सिधा तेर्सो पङ्क्ति रहेको थियो। सौभाग्य देखि हाम्रो लागि, त्यो दिन लामो समय बित्यो। यस खेलमा6फरक नि: शुल्क स्पिन विशेषताहरू, जंगली विस्तारहरू, गतिशील स्केलिंग, र नि: शुल्क खेलहरू समावेश छन्। के सम्भावनाहरूले तपाईंलाई अझै डराउनुभएको छ?
किन Macho चाल?
यो खेलको नाम कुञ्जी माथि उल्लेख गरिएको छ नि: शुल्क स्पिन विशेषताहरू छ। तिनीहरू प्रत्येक गाँउका मानिसहरू र तिनीहरूका व्यक्तिगत रीलहरूमध्ये प्रत्येकसँग मिल्दछन्। तिनीहरूको मकाउ चालहरू पहुँच गर्न, तपाईंले आफ्नो आँखा प्रत्येक पुरुषको चरणहरूमा राख्न र VP जंगली टोकनहरू ट्रयाक गर्ने हरियो मीटर राख्नु पर्दछ। यो भाग जटिल हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर यो कसरी महत्त्वपूर्ण छ कि खेल कसरी काम गर्दछ, त्यसैले बाक्लो।
वीपी जंगली, नि: शुल्क स्पिन, र माच चाल
बुझ्न पहिलो कुरा यो हो कि VP जंगली नियमित जंगली देखि अलग हो। जब एक वीपी जंगली डिस्को बल एक रील मा जमीन मा, दो दोश्रो रीलों मा प्रतीक पनि जंगली मा बदल जान्छ। त्यो सबै होइन! वीपी जंगलीले यसको रील माथिको मीटरमा टोकन पनि थप्छ। जब मिटर भरिएको हुन्छ, यो नि: शुल्क स्पिन प्राप्त गर्ने समय हो। यस खेलमा नि: शुल्क स्पिनहरू व्यक्तिगत रिल्स र उनीहरूको व्यक्तिगत टोकन मेट र क्यारेक्टरसँग मिल्दछ। Macho Moves मध्ये प्रत्येक समावेश गर्दछ पाँच नि: शुल्क स्पिनहरूमा विभिन्न विशेष सुविधाहरू र बहुलिपिहरू
निर्माण कार्यकर्ता रीलमा, प्रत्येक नि: शुल्क स्पिनको लागि 2x र 20x बीचमा रमाइलो बहुलिपिहरूसँग पाँच नि: शुल्क स्पिनहरूको लागि टोकन मेटर भर्नुहोस्। काउओबी रीलमा, तपाइँले2र 12 वाइल्ड्स बीचमा अनियमित रूपमा प्रत्येक नि: शुल्क स्पिनहरूसँग रिल्समा राख्नुहुनेछ। सिपाहीको चाल समावेश गर्दछ 1 र3पूर्ण जंगली रील्स नि: शुल्क स्पिन अघि अनियमित रूपमा राखिएको। निवासीले तपाईंलाई दुईवटा जंगली रेजिन्स प्रदान गर्दछन् जुन तपाइँले प्रत्येक नि: शुल्क स्पिनहरू अघि बढ्नुहुन्छ। अन्तिमको लागि, बाइकरले सबै कम भुक्तानी प्रतीकहरू प्रत्येक स्पिनमा उच्च भुक्तानी प्रतीकहरूलाई अपग्रेड गर्छ। तपाईंको अण्डा, हीरा, क्लब, र हार्टहरू डिस्को बिक्रेता, माइक्रोफोन, र रेकर्ड प्लेयरहरूसँग प्रतिस्थापित हुनेछन्। अन्तमा, नाविक प्रत्येक स्पिन गर्नुअघि रिलिजमा 1 र3लकिएका जंगलीहरू बीच स्थानहरू हुन्छन्, र ती जंगलीहरू जहाँ तिनीहरूका सबै नि: शुल्क स्पिनहरूका लागि छन्।
आह! त्यो धेरै संयोजनहरू र रोमाञ्चक सुविधाहरूको भार हो। म तपाईंलाई दोष पुर्याउन चाहन्छु यदि तपाईलाई नक्सामा तान्नु आवश्यक छ वा उनीहरूको सम्झना गर्न एकचोटि नृत्य बनाइदिनु पर्दछ - यद्यपि YMCA काम गर्न सक्दछ!
अब हामीसँग राम्रो सुविधाहरू पाएका छौं, यहाँ तपाइँ के तपाइँ खेल गर्नु अघि अरू के जान्नुपर्छ। तपाइँ $ बीचमा दावी गर्न सक्नुहुन्छ0.20 र $ 25, र पूर्वनिर्धारित शर्त $ 1 हो। ग्रामीण जनताको पेआउट: मकोओ लेन्स 96% हो, मध्य उच्च अस्थिरता संग। खेल 23.9% मा हिट हुन्छ, र जब तपाईं VP जंगली टोकनहरू समावेश गर्दछ भने 27.25% मा जान्छ।
ज्याकपोटसिटीमा चाँडै बजाउनुहोस्
यदि तपाईं अहिले सम्म JackpotCity मा सदस्य हुनुहुन्न भने, समय सही छ। को लागी सबै भन्दा अधिक पैसा सम्भव छ आगमन गाँउहरु मान्छे: मको चाल। यदि खेल आफैले तपाईंलाई विश्वस्त गर्न पर्याप्त छैन भने, यो मनमा राख्नुहोस्। अहिले, जैकपोटसिटीसँग एउटा प्रारम्भिक प्रस्ताव छ जुन तपाईले तपाइँको पैसाको 100% लाई तपाईंको पहिलो चार जम्मामा $ 400 सम्म प्रत्येकमा फिर्ता दिनुहुनेछ। यसको मतलब तपाईंसँग $ 1600 सँग प्ले गर्न निःशुल्क खेल्न सक्नुहुन्छ। र जब Macho पुरुष आफैले आफ्नो फैंसी पैदल कार्य संग भूमि, तपाईं तिनीहरूलाई सामेल हुन तयार हुनेछ।
बाहिर निस्कनुहोस् - कैसीनोहरूको लागि 10 क्रयाजिक ठाउँहरू
तपाईंको iWatch संग गेमबल - भविष्य तपाईंको कलाईमा छ
तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ कि एक प्रहरी
जुन 4, 2019 / समाचार
फेब्रुअरी 12, 2019 / समाचार
3 कैसीनो किंग्स जो जुआ र वोन
भविष्य के कलम स्मिथको लागि के हो?
अनलाइन क्यासिनो उद्योग अवकाश क्षेत्रको एक उच्च प्रतिस्पर्धी भाग हो। यो मुख्यतः किनकि अनलाइन वातावरणले जुआबलहरूको लागि क्यानडामा एक अनलाइन क्यासिनो बाट छिटो छिटो छिटो छिटो बनाउँछ। त्यस्ता परिस्थितिहरूमा, वास्तवमा पाठ र भिजुअल सामग्रीको लागि कुनैपनि अनलाइन क्यासिनो साइटमा उपयोगी र अप्ठ्यारोमा लाग्नको लागी - नयाँ आगन्तुकहरू र फर्काउने ग्राहकहरू दुवैको लागि।
यसबाहेक, सबै अनलाइन क्यासिनोहरू र सम्बद्ध साइटहरू वेब ब्राउजिंग पोर्टलहरूको खोजीमा ती ब्राउजिङहरूमा पनि हेर्न मिल्छ। अनिवार्य रूपमा, यसको अर्थ क्यानाडामा सबै अनलाइन क्यासिनोहरू Google खोजी सूचीमा उच्च स्थितिमा पुग्न प्रयास गर्नुपर्छ। आजको अनलाइन बजारमा, यो केवल ती प्रशासकहरूले उपयोगी, प्रयोगकर्ता-अनुकूल सामग्री प्रदान गर्न सक्दछ र उनीहरूको वेबसाइट ठीकसँग एसईओ अप्टिमाइजेसन गर्न सजिलो बनाउँदछ SEO अनुकूलित, ताकि यसको सामग्री सजिलै फेला पार्न सकिन्छ, खोज इन्जिनहरू द्वारा देखाइएको र मूल्याङ्कन गरिएको हुन सक्छ। गुगलको रूपमा।
अनलाइन क्यासिनो प्रशंसकहरूको लागि एक समुदाय सिर्जना गर्दै
अनलाइन जुआ संसारमा धेरै क्यानाडा क्यासिनो वेबसाइटहरू अनलाइन क्यासिनो प्रशंसकहरूको लागि समुदाय विकसित गर्न आवश्यक बुझ्न थाले। रणनीति आफै सरल छ: आफ्नो लक्षित दर्शकहरू खिच्नुहोस्, आफ्नो संलग्नता कायम राख्नमा कडा मेहनत गर्नुहोस्, खेल खेल्न उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउनुहोस्, र तपाईंले वफादार अनुयायीहरूको अनन्त रेट प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर यदि यो राम्रो सिद्धान्त हो भने योजनाको कार्यान्वयन एकदम कम कठिन हुन सक्छ।
खेलकुदहरूमा निर्भर रहँदा ती साइटहरू प्रायः आफ्नो दर्शकहरूलाई नयाँ खेलको नवीनता पछाडि टार्न उत्प्रेरित गर्दै छन्। उत्तम व्यवहारले सुझाव दिन्छ कि समुदायको निर्माण सबै चीजहरू हो जसले अनलाइन समर्थन गर्दछ र अनलाइन क्यासिनो खेलहरूको सन्दर्भलाई प्रदान गर्दछ। यो महान क्यासिनो लेखकहरूले सामरिक सामग्री मार्केट टुक्राहरूको अर्थ बुझ्न सक्छन्, जुन खेल पृष्ठभूमि र तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको सामान्य रुचिहरूको साथसाथै केही तरिकामा सम्बद्ध छन्।
यो पनि मानक क्यासिनो पसंदीदा मनपर्ने सम्बन्धमा अनलाइन कैसीनो गाइडहरू, सुझावहरू र अन्य गहिराई अन्तर्दृष्टिको रूपमा सामग्री प्रदान गर्न पनि हो ब्लेक, रूले र अन्य खेलहरू। यस्तो सामाग्रीको थप फाइदा भनेको हो कि यो विभिन्न स्तरहरूमा खेलाडीहरूको अनुभव प्रमाणीकरण गर्ने अर्को राम्रो तरिका हो, र यसरी तिनीहरू सबै समुदायमा रहेका छन् भनेर देखाउँछ। नोभेम्बरले आधार गेम रणनीति (जस्तै JackpotCity Casino मा फेला परेकाहरूलाई एक साधारण परिचयको सराहना गर्नेछन्), जबकि उत्सुक खेलाडिहरूले शीर्ष लाइन खेलाडीहरूको बारेमा थप टेक्निकल सामान र रायहरूको बारेमा सुन्नु पर्छ। तर सबै भन्दा बढी दोहोरो दोहोरो आगन्तुक हुने सम्भावना हुनेछ।
Google सूचीहरूमा शीर्ष स्थानहरूको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै
अरु धेरै खोज ईञ्जिनहरू जस्तै, Google लाई सधैं खोजी गर्नेहरूको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको लागि साँच्चै उपयोगी सामाग्री प्रदान गर्ने उद्देश्य छ। र किनभने यो वेबसाइटको सामग्री स्क्यान गर्न मेशिन-प्रविधि प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ, यो सही छ कि खोजी इन्जिन अनुकूलन (एसईओ) मा विशेषज्ञहरूले ती विशेषज्ञहरूले तपाईको अनलाइन क्यासिनो पोर्टललाई प्राय: तपाइँ खोज परिणामहरूको Google सूचीमा देख्न सक्दछन्। तर सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन तपाईंको साइट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको साइटको सामाग्री द्वारा माथिको प्रभाव पार्नेछ।
त्यसैले यदि तपाईंको साइट आगन्तुकहरूमा अपील गर्दछ, धेरै सान्दर्भिक जानकारी समावेश गर्दछ जुन तिनीहरू उपयोगी पाउन सक्नेछन् र सामान्यतया एक सुखद अनुभव प्रदान गर्दछ जुन तिनीहरूले दोहोर्याउन चाहन्छन्, त्यसपछि गुगलले तपाइँको साइटलाई पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ। वास्तवमा, एक साइट अपरेटरको रूपमा, तपाइँ सधैँ तपाइँका साइटको प्रयोगकर्ताहरूमा ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ, र कहिले पनि Google मा। उदाहरणका लागि, तपाईको साइट प्रयोगकर्ताहरूलाई नेविगेट गर्न सजिलो छ? यदि त्यसो भए, यसले तपाईंको ल्यान्डिङ पृष्ठमा पुग्ने हरेक व्यक्तिको अनुभवलाई सुधार गर्नेछ। र Google, बारीमा, तपाइँका प्रयासहरूको लागि इनाम दिनुहुनेछ, तर केवल किनभने बढि नेभिगेशन दर्शकहरूको लागि राम्रो छ।
कैसीनो खेलाडीहरूको लागि अनन्य र उपयोगी सामग्रीको महत्व
तपाईंको पहिलो कार्यले तपाईंको दर्शकहरूले हेर्न मनपर्ने र प्रयोग गर्ने सामग्रीको पहिचान गर्दैछ। यो शायद नैतिक रूपमा सिधै जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ। तर यदि तपाईको ठेक्का प्रयोगकर्ताको बारेमा जानकारी सङ्कलन गरिसकेको छ भने कार्य सजिलो हुन्छ - कुन सामग्री मार्केट ग्राहक व्यक्तिको रूपमा उल्लेख गर्दछ।
एक ग्राहक व्यक्ति को अनुसार इमेजिगरेसन डाटा स्थापित गर्न को मतलब छ। यसमा समावेश हुनेछ: तपाईंको आगन्तुकहरू र उनीहरूको लिङ्गको औसत उमेर साथै तिनीहरूको आयको स्तर र तिनीहरूको वैवाहिक अवस्थाको बारे जानकारी। र यदि तपाईं शौक र साधारण मनपर्ने र नापसंद मा डेटा एकत्र गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंसँग पनि एक स्पष्ट तस्वीर हुनेछ। धेरै जुआ साइटहरूको लागि यो जानकारीले एक 'ठेठ' ग्राहक उत्पादन गर्नेछ, र तपाईंको सामग्री त्यस्ता गुण साझा गर्न अपील गर्न डिजाइन गर्न डिजाइन गरिएको छ भने यस प्रकारको सामग्री धेरै प्रभावकारी हुनेछ।
अनन्य सामग्री जुन अधिकांश अनलाइन ग्यामरहरूमा अपील गर्दछ त्यहाँ केहि थप सामान्य विशेषताहरू छन्। उदाहरणको लागि, धेरै खेलाडीहरूले गेमप्ले रणनीतिहरूको बारेमा सुन्न चाहन्छन् र उनीहरूले इन-गेम निर्णय गर्न समर्थन गर्न सक्ने कुनै पनि डेटाको बारेमा जान्न पनि चाहन्छन्। नयाँ खेलको पूर्वावलोकन, जैकपोटक्यासि क्यासिनो द्वारा प्रदान गरिएका व्यक्ति जस्तै, साथसाथै स्थापित खिताबको अन्तरदृष्टि समीक्षा पनि यो श्रेणीमा पर्नेछ।
अन्य शीर्षकहरू प्रायजसो खेलकूदहरू, हास्य, लोकप्रिय संस्कृति र चलचित्र लेखहरू समावेश हुनेछन्। धेरैले प्रश्नोत्तरी प्रकारका सामग्रीको चुनौती पनि मन पराउँछन्।
गेमिङ गेम उद्योगमा
अनलाइनमा स्लॉट र गेमिङको व्याकरण सामान्यतया क्यासिनो उद्योग भित्रको तातो विषय हो। अनलाइन अपरेटरहरू ग्राहकहरूको लागि थप इमर्सिभ अनुभव सिर्जना गर्नका लागि उनीहरूको आनन्दको विस्तार गर्न र यसरी तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिन प्रोत्साहन दिन्छन्।
उदाहरण को लागी हजारौं पीढी, खेल वातावरणमा धेरै प्रयोग गरिन्छ, जहाँ प्रत्येक कार्यले केही प्रकारको इनाम, पुरस्कार वा सजायलाई उत्प्रेरित गर्दछ। त्यसैले क्यासिनो खेलहरू र क्यासिनो वातावरणहरू जसले यो मानसिकता पूरा गर्दछ अधिक वफादार ग्राहकहरू खिच्न सक्नेछन्। एक विस्तृत सन्दर्भमा, यसले ग्राहकहरू क्रमशः निश्चित कार्यहरू वा उपलब्धिहरूको फर्कमा अधिेक्षात्मक वीआईपी पहुँच र स्थिति प्राप्त गर्न सक्छ।
मोबाइल उपकरणहरूमा कैसीनो सामग्री समायोजन
धेरै अनलाइन ग्यामरहरूले अब क्यासिनो साइटहरूमा पहुँच गर्न मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गर्दछ, वा त वा पीसी र कन्सोल प्लेटफर्मको सट्टामा, अनलाइन अनलाइन क्यासिनो यो खपतलाई बेवास्ता गर्न सक्दछन्। तथापि, सबै क्यासिनो मोबाइल अनुप्रयोगहरू समान उस्तै राम्रो देख्न वा समान रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। त्यसैले सबै क्यासिनो पोर्टलहरूले बहु प्लेटफर्महरूका लागि मोबाइल अनुकूलन सुनिश्चित गर्न अनि सबै ह्यान्डहेल्ड उपकरणहरू वास्तवमा उच्च प्राथमिकता हो।
प्राविधिक सर्तमा, यसले लोड गति र सजिलो नेभिगेसन साथै साथै सुव्यवस्थित सफ्टवेयर र विभिन्न पर्दा आकारहरूको छिटो आवास जस्ता पहलहरू समावेश गर्दछ।
मोबाइल प्लेको लागि उत्तम खेलहरू
के प्रकारको क्यासिनो तपाईं हो?
1st eSport एरेना लास वेगास स्ट्रिपमा आउँदैछ
शीर्ष 10 अनलाइन जुआ सुझाव
शीर्ष टिभी-थेमेड स्लट्स
माछा पार्टी स्लॉटमा एक बन्दुक हेर्नुहोस्
मोबाइल गेमिंग को AZ
सर्वश्रेष्ठ अनलाइन स्लॉट सफ्टवेयर प्रदायकहरू
विनिल गिनतीको लागि तयार हुनुहोस्!
जुन 22, 2019 स्पिन महल समाचार र कैसीनो बोनस
सबै ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विशेष अवसर हो, तर विम्बलडन एक छ जो बराबर उपाय मा शुद्धता र उत्सुक टेनिस प्रशंसकहरु लाई आकर्षित गर्दछ। अझै पनि टेनिस पारंपरिक घर मा घास खेले, विम्बल्डन ले जुन बेलायत र जुलाई को दिशा मा जान्छ तब सम्म संसार को आँखा छ। तर 2019 मा प्रतिष्ठित पुरुषहरूको शीर्षक जित्ने सम्भव छ? के अनलाइन खेल बेटिंगले ट्राफीमा लेखिएको परिचित नाम हेर्नको आशा गर्दछ, वा स्थापित स्थापित पदानुक्रमको प्रभुत्वलाई अप्ठ्यारो छ कि?
चलो अगाडि धावकहरूको पाँचौं को लागी हेर्न को लागी विशेषज्ञहरूले विश्वास गर्न सक्थे कि सामान्यतया सबैको सबै भन्दा ठूलो घाँस-टूर्नामेंट टूर्नामेंटलाई जित्न पछि कप लिने को राम्रो मौका हुन सक्छ।
रोजर फेडररको उपस्थिति बिना कुनै विम्बल्डन पूरा हुनेछैन। धेरै वर्षको लागि व्यावसायिक टेनिस सर्किटमा एक प्रमुख व्यक्ति, शांत स्वभाव र रेशमी कौशलको सराहना गरिन्छ र सबै साँचो टेनिसका प्रशंसकहरूले प्रशंसा गर्छन्। बिग चार को एक अधिक या कम स्थायी सदस्य जोकोभिक, मुरेय र नडल संग, रोजर फेडरर यस साल एक पुनर्जागरण को केहि पछि पछि आश्वस्त हुनु पर्छ। उहाँ सधैं घाँसमा एक फराकिलो प्रतिद्वंद्वी हुनुहुन्छ, जुन निस्सन्देह उहाँको एक शक्तिशाली क्षेत्र हो। पहिले नै विम्बलडन जीत को एक अद्भुत संख्या सुरक्षित छ - त्यो अब सम्म आठ सम्म सम्म छ - 2019 ले उसलाई त्यो कुल मा जोडें देख्न सक्छ।
37 को उमेर मा त्यो फीचर्स को प्राप्त गर्न को लागि, त्यो नै नडल र Djokovic जस्तै नैनियल प्रतिद्वंद्वियों को जीत न केवल, तर आज पनि विंबलडन चैंपियन को आज को फसल देखि चुनौतिहरु लाई पनि देख्न को लागी हुनेछ। त्यसोभए अवसरबाट प्रेरित ती उभरिएका प्रतिभाहरू पनि छन् जुन सँधै राम्रो मन पराउने मनपर्ने मनपर्ने व्यभिचार गर्न सक्षम छन्। तर कसैको लागि जसले धेरै लामो समयका लागि क्यारियरको आनन्द उठाउदियो, सम्भवतः फेडररको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण हो कि उनी सबै टूर्नामेंटमा चोट पुर्याउन सक्छन् कि भनेर, र के उसले अझै पनि ती क्षणहरू जुनसुकै पछाडि ती क्षणहरूमा देख्न सकिन्छ। कुनै पनि विजेता विम्बल्डन चैंपियन अर्को उल्लेखनीय क्राउन हुनेछ भन्ने बाटोमा।
पाँच सेट ढाँचामा मिट्टी कोर्टमा सधैँ उत्कृष्ट विशेषज्ञ खेलाडीको रूपमा सँधै प्रशंसा गरिएको छ, जसले गर्दा उनको उत्कृष्ट रेकर्ड फ्रान्स ओपन च्याम्पियनशिप जस्ता घटनाहरूमा बताउछ, राफेल नडाल पनि कुनै पनि सतह र कुनै प्रतिद्वन्द्वीमा शक्तिशाली शक्ति हो। दुर्भाग्यवश यो उत्कृष्टता प्रतिभाशाली टेनिस स्टारको लागि, आफ्नो क्यारियरको दौडान, उनीहरूले चोटका साथ ठूलो भाग्य छैन। वास्तवमा, उनको चाचा र पूर्व कोच टोनीले उनलाई भनेका छन् कि कहिलेकाहीँ कहिल्यै टेनिस खेलाडीको रूपमा सोच्न सक्छ तर 'टेनिस खेल्ने एक घायल व्यक्ति' जस्तो। त्यसैले यो सम्भव छ भन्दा धेरै छ भने स्पान्डर्ड यस वर्षको विम्बल्डनमा कुनै प्रकारको शारीरिक दुखाइको प्रबन्ध गर्न सक्दछ।
एक दुई-पटक विम्बल्डन चैंपियन, राफाको अन्तिम विजय फिर्ता 2010 मा भएको थियो जब उनले उनलाई हराए चेक रनर अप अप टॉम ब्रेडिच। उनको ऊर्जावान शैली र संयोजन प्रकृति को लागी धन्यवाद, नडाल भीड संग एक उत्कृष्ट पसंदीदा हो र यो टूर्नामेंट मा सामान्यतया राम्रो तरिकाले गर्छ। केही हद सम्म कि भाग्यहरू आफ्नो प्रारम्भिक मौसमको अंशले निर्धारण गर्न सक्छ किनकि एक पटक फेरि माई अदालतको संसारमा हावी गर्न खोज्छ।
वर्तमान राजमार्ग विम्बल्डन च्याम्पियन र 2019 अष्ट्रेलिया ओपनको विजेता, नोभेक जोकोभिकले यस वर्षको टूर्नामेंटको लागि एक राम्रो मनपर्दो मानिन्छ। यो दाहिने सरुवा सर्बेरले आफ्नो क्यारियरको समयमा 74 प्रमुख शीर्षकहरू जितेको छ, जसमा कुल चार विम्बलेन च्याम्पियनशिप र ओस्ट्रेलियन ओपनमा सफल भएका छन्, जसमा उनले सात चोटि जितेको छ), र फ्रांसीसी र यूएस खुल्यो। अहिले विश्वमा संख्या 1 क्रमबद्ध गरिएको छ, Djokovic राम्रो तरिकाले अर्को विम्बल्डन फाइनलमा पुग्न सक्छ। यद्यपि, यदि उसले आफ्नो श्रेष्ठतालाई पाँचौं विम्बलडनको खिताबमा बदलिदिन्छ, उसको लागि आवश्यक हुनेछ कि उनी आफ्नो एकाग्रतालाई निरन्तरता दिन सक्दछन्।
यो वर्षको पुरुष च्याम्पियन पाउन्ड 2.35 मिलियन प्राप्त गर्न सेट गरिएको छ, 100,000 पुरस्कार पोष्टमा पाउन्ड 2018 को वृद्धि, Djokovic धेरै बारह महिना पहिले आफ्नो सफलता दोहोर्याउन प्रोत्साहन हुनेछ। पछि उसले दक्षिण अफ़्रीकी केविन एन्डर्ससनलाई तीन सेटमा अचम्म लाग्यो भने एक आश्चर्यजनक एटीपी एक प्रमुख शीर्षक जितेर बिना एक वर्ष भन्दा बढी दौड्यो। तथ्य यह है कि Djokovic हमेशा एक ठूलो अवसर खेलाडी ले उसलाई राम्रो ठाँउ मा खडा हुनु पर्छ।
क्रोएशन् मारिन Čilić, 2017 च्याम्पियनशिप मा एक विम्बल्डन धावक अप, वर्तमान मा दुनिया मा संख्या 13 को स्थान मा छ। त्यसैले 2014 मा अमेरिकी ओपन ओपन च्याम्पियन भए तापनि, उनी एक बाहिरको कुरा लाग्न थाल्छन्। यद्यपि, उनीसँग ग्रैंड स्लैम घटनाका पछिल्ला चरणहरूमा पुग्न नराम्रो आनन्द छ। र एक छिटो सेवा र groundstrokes को एक शक्तिशाली सरणी संग, यदि ड्र आकर्षित आफ्नो बाटो गिरने शुरू हुन्छ भने उसले कहिल्यै शासन गर्न सक्दैन।
जर्मन अलेक्जेंडर जेवरव भविष्य भविष्य संख्या संख्या 1 को रूपमा मानिन्छ, तर उसले विम्बलडनको स्थान बनाउन सक्छ जहाँ उनी आफ्नो पहिलो ग्रैंड स्लैम जित्न सक्छिन्? सम्भवतः उनको पक्षमा होइन कि Zverev अझै सम्म घास अदालतको शीर्षक जितेको छैन। यद्यपि, उनको पास घासमा सफल हुन खेल छ र एक खेलाडिमा विकास हुँदैछ जुन पाँच-सेट वातावरणमा घर छ। जब जेभरवले फेडरर वा जोकोभिकमाथि विजय हासिल गरे भने यो एक निराश हुनेछ, यो वास्तवमा एक आश्चर्य हुनेछैन।
त्यसैले कसलाई जित्न खडा छ?
धेरै विशेषज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि यो वर्षको शीर्षक नोवक जोकोभिक वा रोजर फेडरर जान्छन्। तर त्यहाँ एक बलियो भावना पनि छ कि यो वर्ष पनि हुन सक्छ जब अलेक्जेंडर जेभरभले उनीहरूको दावीलाई दावी गर्नेछन्। यो तथ्याङ्कको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दै, तपाईंलाई बिग चार बाहिरको खेलाडीलाई अन्तिम पटक फेला पार्न 2002 मा फर्किनु पर्छ विम्बल्डन विजेता थियो। तर के मतलब छ स्मार्ट पैसा पहिले नै सही ठाउँमा छ? वा जेभरभले राम्रोसँग सुझाव दिन्छन्
क्यासिनो अनुप्रयोगहरूको फाइदा
लक्ष्य लिनुहोस् र खजानाको लागि गोली माराउनुहोस्
ईएसएड्स सडक मा प्रमुख बनाउन
3D - 24 घण्टामा गृह छाप्नुहोस्
जुन 19, 2019 जैकपोट सिटी समाचार र कैसीनो बोनस
त्यसोभए हामी चीजहरू अनुहारमा लाग्दछौँ र मान्दछौं कि चीजहरू सधैं तिनीहरू जस्तै छन्। यो के छ र यो कसरी छ, निश्चित छ! तर, के तपाई कहिल्यै सोचेको छ जुआ कहाँ सुरु हुन सक्छ? यो कहाँ भयो? खेल्ने पहिलो को थिए ब्लेक? फिर्ता लिनुहोस् र यो इन्फ्रोग्राफिकको साथ JackpotCity बाट अझ बढी सिक्नुहोस्। बाट केने पासाको आविष्कारमा पर्दा, हामी कति टाढा छौ? बाट चीन लाई इटाली, समय मार्फत यात्रा लिनुहोस् र हेर्नुहोस् जहाँ यो सबै सुरू भयो र आफैलाई आश्चर्य गर्न अनुमति दिनुहुन्छ ... अर्को के हो भने! चलो जानुहोस्!
ब्लैकज्याक प्रो जस्तो सोच्न कसरी
के उच्च र कम अस्थिरता अनलाइन स्लॉट को बीच अंतर के छ?
कैसीनो खेलहरू सहित सर्वश्रेष्ठ भिडियो खेलहरू
लाइभ डेलर क्यासिनो खेल के हो
कसरी JackpotCity मा प्रत्यक्ष मद्दत पहुँच
किन आईओएस बनाइयो Android बहस रेजहरू
तपाईंको क्यासिनो जैकपोट कसरी खर्च गर्ने?
4 विदेशी पशु मानिसहरू वास्तवमा राख्नुहोस्
हरेक मानिस आफैंको घरमा एक ठाउँको आवश्यकता पर्दछ। यो तपाईंको तहखाने, तपाईंको गेराज, एक शेड, हुन सक्छ घरको "नियमित" भागमा एक कोठा (यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ र तपाईंको पत्नी पछि सहमत हुनुहुन्छ)। एउटा ठाउँ जहाँ तपाईं आराम गर्न सक्नुहुन्छ, मजा लिनुहोस् र सबैबाट ब्रेक लिनुहोस्। जहाँ तपाइँले यो ठाउँ खोज्नु भएको छ, तपाईंको म्यान गुफाले तपाइँलाई र तपाइँलाई माया गर्छ भनेर प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। एकपटक तपाईंले आफ्नो उत्कृष्ट लुकावट सिर्जना गरिसकेपछि, तपाईं कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्नुहुन्न - र जब तपाइँ आफ्नो साथीलाई निमन्त्रणा दिनुहुन्छ, तपाई तिनीहरूलाई सुन्दर ईर्ष्या बनाउन सक्नुहुन्छ!
यदि तपाईं क्यासिनो र गेमिंग मनपर्छ तर नजिकको कैसीनो छैन वा सानो पैसा बचत गर्न चाहानुहुन्छ भने किन घरमा आफैं बनाउँदैन? हामीसँग तपाईंको सिद्ध क्यासिनो-थिस्ड मैन गुफाको लागि केहि विचारहरू छन्!
मूलसँग सुरु गर्नुहोस्
क्यासिनो प्रायः प्रायः स्पेसहरू छन् - बेलैगियोको चिन्तामा यसको चिन्ता र टाइल र जटिल कालीन फर्श वा वेनिस मकाओले यसको चित्रित छतको साथ सिस्टिन चैपलमा फेला परेका छन्। जब तपाईं एक फेला पार्न सक्नुहुन्न Michelangelo आफ्नो छत प्वाइन्ट गर्न को लागी, त्यहाँ अझै पनि धेरै पक्षहरू तपाईं आफ्नो पसंदीदा क्यासिनो खेल फर्श को प्रतिकृति गर्न सक्नुहुन्छ।
क्लासिक रूप थप्नको लागी तातो, धनी भूरी काठको क्याबिनहरू, तालिका, कुर्सियों, र बार प्रयास गर्नुहोस्। बस कैसिनो जस्तै फर्श कालीन नबिर्सनुहोस्। आदर्श प्रकाशले न्यानो हुनेछ र निमन्त्रणा दिनेछ। तिनीहरू भित्री sconces र केही फाँटको रूपमा हुन सक्छ रोशनी आफ्नो खेल तालिकामा निश्चित गर्न तपाइँ प्रत्येक विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीको पोकरलाई दरबार प्रयास गर्न प्रयास गर्नुहोस्। एक क्षेत्र मा केहि छाला कुर्सियों को आराम र एकाधिक फ्लैट-स्क्रीन टीवी लटका लागि म्याच र दौड संग रहन को लागि। पट्टी माथि (यस क्षेत्रको बारेमा थप) पछि, किन वेगास स्ट्रिपमा पाइने जस्ता नीयन चिन्ह थप्न सक्दैन - शायद पनि अज्ञात "लास वेगासमा स्वागत छ" चिन्ह?
खेलहरू तयारी गर्नुहोस्
यदि तपाईं पक्का हुन चाहानुहुन्छ तपाइँको ठाउँ हो जहाँ साप्ताहिक क्यासिनो रातहरू आयोजित हुनेछन्, सबै खेलहरू नभई नबिर्सनुहोस्। पोकर प्रतियोगिताहरू होस्ट गर्न र अर्को विश्व शृंखलाको लागि अभ्यास गर्न उच्च-गुणस्तर पोकर तालिकाको साथ सुरू गर्नुहोस्। किन तपाईं आफ्नो एक अलमारियाँ बाहिर सार्न र प्ले गर्दा प्रविधिहरु जस्तै लुगा लगाउने केहि भिसाहरु र धूप का चश्मा टाउको छैन किन?
केहि तालिकाहरू पनि कन्वर्टिबल छन्, तपाईंलाई पनि त्यस्तो क्लासिक्स खेल्न अनुमति दिन्छ ब्लेक र रूले दाहिने घर। के तपाईं कल्पियर हुनुहुनेछ र घरको फाइदा सेट गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईका साथीहरूसँग फर्कनुहुन्छ?
तपाईं आफ्नो म्यान गुफामा किन्नु सक्नु हुन्छ वा एक DIY स्लट मिसिन पनि हुन सक्नुहुन्छ! डेल्टा ह्याकले तपाईंको आफ्नै मेकानिकल स्लट मेसिनलाई कारबोर्ड र काठको साथ बनाउन YouTube मा एक चरण-दर-चरण भिडियो प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो साथी आफ्नो स्लट मिसिनमा राख्नु भएको पैसा राख्नुहुन्छ भने, वा यदि तपाइँ तिनीहरूलाई अर्को कैसीनो खेलमा फिर्ता लिने अनुमति दिनुहुन्छ।
र जब तपाइँ कैसीनो खेलबाट ब्रेक लिन चाहानुहुन्छ भने किन पट्टीको पछाडि डर्टबोर्ड छैन? यदि तपाईंसँग कोठा छ भने, तपाईंसँग पिनबल मिसिन, बिलियर्ड्स तालिका वा फोसबटल तालिका हुन सक्दछ।
धेरै महत्त्वपूर्ण - तपाईंको मान्छे गुफाको बार! आदर्श रूप मा, तपाईंसँग कम से कम एक मिनी फ्रिज हुनेछ र यसको बियर र शैम्पेन राख्नुहोस् (जब तपाईं जित्नु भएको बोतल पप गर्नुहोस्!) ठुलो र अलैंची भन्दा माथि तपाईको मनपर्ने रक्सी संग भण्डार गर्न। नाकहरू पनि नबिर्सनुहोस्। तपाईंलाई लामो पोकर टूर्नामेंटको समयमा वा तपाईंको मनपर्ने टोलीहरू वा घोडाहरूमा जोगाउनुपर्नेछ। बस आफ्नो पोकर तालिका आफ्नो बार को नजिकै सुनिश्चित गर्न को लागि सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईं आफ्नो अर्को पेय को लागि दूर जाना छैन (किनकि दुर्भाग्य देखि एक वास्तविक क्यासिनो को विपरीत कुनै पनि ककटेल वेटर्रेस छैन)। र तपाईँका साथीहरूलाई चिप गर्न पाउनुहोस् ताकि तपाई सधैँ एक्लो हुनुहुन्न। आखिर, तपाइँले पहिले नै उत्तम लोकेल डिजाइन गर्नुभएको छ।
अनलाइन स्लट्स Autoplay सुविधा बताइएको छ
शीर्ष फलों थिस्ड स्लॉट गेमहरू
बेवर्ली हिल्स 90210 को कास्ट को केहि पनि भयो?
ब्रान्ड उत्पत्ति: फेरारी
यसका साथ NFL उत्साहका लागि तयार हुनुहोस् [इमेल सुरक्षित]
के 4K रिजोल्युशन उचित मूल्य?
शीर्ष5प्रोफेशनल पोकर खेलाडीहरू
वेगास विकसित गर्न टाइम्स संग रहन
सुरक्षित र सुरक्षित अनलाइन गेमिङ
जुन 18, 2019 Casino.com समाचार र क्यासिनो बोनस
त्यसोभए जब यो क्यासिनो खेलहरूमा आउछ, के यो लिङ्कलाई कौशल, प्रतिबद्धता, र जित्न सक्ने क्षमताको परिभाषा गर्न सम्भव छ? त्यहाँ विजेता हुने ठाउँ हो जहाँ यो जित्न सकिन्छ? र यो लिङ्गसँग सम्बन्धित छ?
सबैभन्दा ठूलो जितिएको रेकर्ड आर्ची करस को छ, जसले तीन वर्षको विजेता लकीरलाई $ 50 भन्दा बढी $ 40 मिलियन भन्दा बढी बनायो। र सबैभन्दा ठूलो वेगास क्यासिनो भुक्तानीको यो सूची अनुसार, पुरुषहरूले ठूलो ज्याकेटहरू हात हाल्छन्। छवटा शीर्ष प्रमुख विजेतामध्ये पाँच पुरुष हुन्, केवल एक महिलाको उल्लेख। हामी पक्का छौं कि उनी उनको सत्तरमा $ 8 मिलियन भन्दा बढी जित्नको लागी गुनासो गर्दैन, तर परिणाम किन असामान्य छन्? के यो पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिङको कारण हो या यो केवल कैसीनो खेल जित्ने बेला महिलाहरु पछि पछाडि पछ्याउँदै हुनुहुन्छ?
यो मस्तिष्कमा सबै छ ...
केहि मनोवैज्ञानिकहरूले विश्वास गर्छन् कि टेबलमा पुरुष र महिलाबीचको मुख्य फरक फरक आधारभूत प्रवृत्तिमा आउँछ। सबै मान्छे इच्छा को अनुभव को लागी, जुआ को इच्छा को रूप मा, र यो सामान्यतया यस विचार मा आधारित छ कि एक जोखिम को एक निश्चित इनाम प्राप्त हुनेछ। उदाहरणको लागि, केहि कुरा झूट गलत हुन सक्छ तर यसले सबै भन्दा राम्रो मित्रलाई अझ गम्भीर समस्यामा रोक लगाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ, एक नौकरी साक्षात्कार असफल हुन सक्छ तर यो सही कामको लागी हुन सक्छ - वा कम्तिमा पनि, आत्मविश्वास बढ्यो। त्यस्तै गरी, जुआ पैसा हानि ल्याउन सक्छ, तर यो पनि जीत को लागी हुन सक्छ।
जब यो क्यासिनोमा यी सिद्धान्तहरू लागू गर्न आउँछ, अनुसन्धानले देखाउँछ कि औसतमा, स्त्रीहरूसँग जोखिमको अधिक गणनात्मक दृष्टिकोण रहेको छ र थप सावधानीपूर्वक खेल्छन्। यसको मतलब तिनीहरूले कैसीनो खेलहरू फरक फरक देख्छन्। सामान्यतया, स्त्रीहरू कम रोमाञ्चमा छन् - जुवा र मनोरञ्जनको रूपमा मनोरञ्जन गर्छन्, र सामाजिक रूपमा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर। अर्कोतर्फ, निष्कर्षहरू सुझाव दिन्छन् कि पुरुषहरू आफ्नो प्रतिद्वंद्वीहरूलाई प्रयास र हावी गर्न इच्छुक छन् र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगमा उनीहरूको योग्यता प्रमाणित गर्छन् जसले बढी आक्रामक खेलको सामना गर्दछ।
त्यसैले कसले खेल्छ?
यी सबै आन्तरिक शेन्निगिन्सले खेलको प्रकारमा पुरुष र महिलाहरू खेल्न प्रभाव पार्छन्। भूमि आधारित क्यासिनो अनुसन्धानले महिलाहरूलाई स्लॉट तिर बढाउँछ र केने - सीधै अगाडी बढावा खेलहरू, साना एकाग्रता चाहिन्छ जुन घरको विरुद्धमा खेल्दछ त्यसैले सामाजिक तत्वलाई आनन्दित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, पुरुषहरूले प्रतिस्पर्धात्मक तत्व जस्ता खेलहरू मनपर्छ ब्लेक वा पोकर, ठूलो ब्रेकिंग अधिकार संलग्न भएको। त्यहाँका नियमहरू सधैँ अपवाद हुन्छन्, निस्सन्देह, तर यी औसत निष्कर्षहरू हुन्।
अर्को पक्ष डरलाग्दो छ; अध्ययनले देखाएको छ कि महिलाहरूले कैसीनोमा टेबल गेमको पुरुष-प्रभुत्वको वातावरणमा असहज महसूस गर्न सक्दछ, र यो आंशिक छ कि किन केहि महिलाहरु स्लट्स क्षेत्रहरुमा छान्न चाहन्छन्। चाखलाग्दो, पुरुष र स्त्री दुवैको आनन्द उठाउँछन् रूले, तर सारा मा, पुरुष अझै पनि उच्च दाँत लागि खेल्छन्।
तर यो फरक फरक छ ...
अनलाइन क्यासिनोहरूले क्यासिनो खेल खेल्न विभिन्न तत्व ल्याएका छन् - तिनीहरूले गुमनामताको लागि अनुमति दिन्छन्। यसको अर्थ पुरुष र महिलाहरू हेर्न को लागी बाटो परिवर्तन हुँदैछ। तथ्याङ्कले देखाउँछ कि धेरै पटक वर्ष पहिले नै धेरै महिलाहरू अनलाइन प्ले हुँदैछन्। किन? आंशिक गुमनामता, र, यो देखिन्छ, आंशिक सुविधा।
जब तपाइँ एक प्रयोगकर्तानामबाट अनलाईन खेल्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईले यो स्पष्ट नभएसम्म लिनु हुने कुन लिङ्गको कुनै संकेत छैन। कम स्टेज गेमहरू र 24-घण्टा प्रावधान अनलाइन उपलब्ध गराउन कारण महिलाहरूको मनोरञ्जनको रूपमा क्यासिनो खेलहरूमा बढि चासो राख्ने कारणको कारण हुन सक्छ।
तर यसले पुरुष खेलाडीहरूमा सुझाव गरिएको स्टेरियोटोपिटिक व्यवहार पनि प्रभावित गर्न सक्छ। अनुहार-अनुहार बिना तत्व त्यो अनुसन्धानले प्रमुख व्यवहारलाई प्रेरित गर्दछ, पुरुष खेलाडीहरू जसले अधिक प्रतिस्पर्धात्मक खेलको दिशामा अग्रतालाई गुमनाम पनि आनन्द लिन सक्दछ - त्यसैले धेरै रमाइलो, कम स्टेक गेमहरूको पनि आनन्द उठाउन सक्दछ।
त्यसो कसले जीत्यो?
दुर्भाग्यवश, हामी यस संग बास बस्न पर्छ। यो देखिन्छ कि मान्छे कहाँ खेलिन्छ लिङ्ग भन्दा भन्दा winnings र रवैया मा प्रभाव।
अधिक महिलाहरू निश्चित रूपमा प्ले गर्न सुरु हुँदैछन्, र अधिक बारम्बार, र यो उल्लेखनीय छ कि क्यासिनोहरू द्वारा अनलाईन सबैभन्दा ठूलो जीत प्रयोगकर्ता नामको रुपमा जान्छ, व्यक्तिको लिङ्ग गुमनाम रहेको छ - त्यसैले यो कसलाई जित्न सजिलो छैन नगदको सर्तमा सबैभन्दा बढी।
निस्सन्देह, हामी तल टिप्पणीहरूमा यो मा तपाईंको विचार सुन्न चाहन्छु!
कैसीनो.com बोनस कोड >>
फेसबुक स्क्यान्डलहरू पिल अप - तर के हामी हेरचाह गर्छौं?
के एक लाइभ डीलर खेलमा के गर्न हुँदैन
के तपाईं प्रयोग गर्नुभए जस्तै नाच गर्न तयार हुनुहुन्छ?
केले ब्लैकजैक यस्तो लोकप्रिय टेबल गेम बनाउँछ?
माल्टा गेमिङ प्राधिकरणमा गहिराइ हेर्नुहोस्
गणित को क्रेप्स
अमेजन मुहर यूएस $ 1 अरब रिंग डील
ब्ल्याक जैक र ग्यारह अनलाइन ब्लैक जैक खेल एनजे मा
हामी सबैका धेरै मिथकहरू र जुआ वरपरका किंवदन्तीहरू सुन्न सक्छौं। भित्तामा अलिकति रमाईलो लागेछ। उस्को अनुहारमा अनुहार झिक्यो। उस्को अनुहारमा अनुहार पस्दै गयो। यहाँ हामीले के फेला पार्यौँ ...
नेपोलियनले माया गरे ब्लेक - वास्तवमा!
जहाँसम्म हामी बुझ्न सक्छौं, यो कुख्यात (यदि थोडा छोटो) सम्राटले साँच्चै यो परम्परागत खेलको लागि मनपराएका छन - यो केवल वास्तविक फ्रांसीसी संस्करण थियो जसमा विंगट-एट-अन भनिन्छ (शाब्दिक रूपमा 'बीस वर्ष')। ब्ल्याक ज्याक नामको शुरुआती 20 शताब्दी सम्म पुगेन। (तपाइँ यहाँ ब्ल्याक ज्याकको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ।)
रूले शैतानको खेलहरू भनिन्छ किनभने अंकहरू 666 - फिक्शनमा थपिन्छन्!
रोलेले यस्तो असंतोषजनक उपनाम हासिल गर्न सफल भएको छ कि अफवाहको कारण संख्यामा 666 सम्मको संख्या - शैतानसँग सम्बद्ध संख्या। तथापि, यो वास्तवमा गलत छैन, संख्यामा वास्तवमा 720 क्लोज गर्ने। यो कुनै अफवाह छैन जहाँ यो अफवाह सुरु भयो, तर हामी अनुमान लगाउँदै छौं कि यो विनियमन संग केहि गर्न को लागी थियो र कानून द्वारा मांसपेशियों को मांसपेशिहरु को कोशिश को पुरानो पुरानो कहानी थियो।
निक्सनको चुनाव अभियान जुआ पैसामा बनाइएको थियो - तथ्य!
यो जस्तो देखिन्छ कि निक्सनले पैसा प्रयोग गरेको थियो जुन उनीहरुले पोकर खेल्न थालेका थिए। उनको डब्लुएक्सएक्सएनएमएक्समा नाविकको रूपमा उनको एक्सएनमक्सको चुनाव अभियान निधि गर्न। निस्सन्देह, उहाँ एक सुन्दर निफ्टी खेलाडी हुनुहुन्थ्यो, तर2मा खेल छोड्ने निर्णय भयो जब तिनले निर्णय गरे कि यो अब क्यारियरको लागि उपयुक्त थिएन। तर त्यो उनको आत्मकथामा कसरी ब्लेफ स्पेस गर्ने विवरण रोक्न सकेन।
एक रूसी जुआलरले एकपटक आफ्नो पत्नीलाई दावीको रूपमा ठान्थे - तथ्य!
पोकर प्लेयर अन्डेर्लो करपोभले वास्तवमा उनको कार वा हेर्नुको सट्टा 2007 खेलको समयमा आफ्नो पत्नी, तात्ते, दावी गरे। प्रतिद्वंद्वी, सेर्गेई ब्रोडोभ, शर्त बोल्नुभएन - तर अचम्मको कुरा पर्याप्त थिएन, विवाह अन्तिम थिएन। तर एउटा रोचक मोडमा टाटिटाले ब्रोडोभसित विवाह गर्न गएका थिए! यद्यपि यो विश्वास गर्न गाह्रो हुन सक्छ, यो मात्र घटना होइन - तर यो सबै भन्दा राम्रो छ।
संसारको सबैभन्दा ठूलो विजेता सुपरबाउल - तथ्यमा छन्!
Superbowl हरेक वर्ष ठूलो रकम ल्याउँछ, मजदुरहरु छ छ सम्म पुग्न र (रिपोर्ट अनुसार) सात अंक। 60 मिनेटमा एक साक्षात्कारमा, खेल बेटर बिली वाल्टरले उनको सबैभन्दा ठूलो शर्त स्वीकार गरे $ 3.5 मिलियनको लागि, सुपरबाउल XLIV मा राखिएको। र चीजहरू अझ बढी रोचक बनाउनको लागि - उनको शर्त निचोडमा थियो! (सुपरबाउल शर्तहरूको बारेमा थप पढ्नुहोस्।)
लास वेगास संसारको जुआ राजधानी हो - तथ्य र कल्पना!
जब यो नम्बर आउँछ, वेगास ह्यान्ड-डाउन विजेता हो। लास वेगासमा 140 क्यासिनो भन्दा बढी छन् र र 1000 भूमि आधारित कैसीनोहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका। छोटो समयमा, वेगासले अमेरिकामा सबै कैसीनोहरूको 15% घर बनाउँछ, हरेक वर्ष5अरब भन्दा बढी कमाईमा घृणा गर्दछ। यद्यपि, यदि तपाईं राजस्वद्वारा जान्नुहुन्छ भने, यो मकाउ ले लास वेगासमा सबै कैसीनोहरूको लगभग दुई पटक लिन्छ भनेर रिपोर्ट गरेको छ!
यदि तपाइँसँग कुनै रोचक क्यासिनो तथ्याङ्कहरू वा चित्रहरू छन् भने, कृपया तलका टिप्पणीहरूमा साझेदारी गर्नुहोस्!
अनलाइन गेम कैसीनो एक गेम गेमिंग गर्न
पामेला एन्डरसन अझै पनि क्यासिनो टेबल्समा टाउको घुमाउँछन्
व्यावसायिक शेफ गुप्त सामाग्री प्रकट
यो सबै गेमको साथ पाउनुहोस्
तपाईंको अनलाइन गेमिङ प्रदर्शन सुधार गर्नुहोस्
क्यानाडामा फलफूल निरीक्षण गरिएका सर्वश्रेष्ठ अनलाइन स्लटहरू पत्ता लगाउनुहोस्
भिडियो पोकरको इतिहास: एक टाइमलाइन
उच्च ढोका र कम ढिलो खेलहरू वर्णन गरियो
यदि तपाईं खर्च गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने केही समय एक वास्तविक संसार वा एक अनलाइन क्यासिनोमा सानो क्रियाकलापको आनन्द उठाउँदै, यो सधैं राम्रोसँग तयार हुने उत्तम हो।
यो हप्ता, हामी टोमी क्यार्मिचेल हेर्दै हुनुहुन्छ: यदि तपाईले उनलाई स्लट मिसिन खेल्नु भएको छ भने तिनको पछि प्रयास गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। यो शायद खाली छ।
यो लिन्छ तपाईंको जीवनको दिशा परिवर्तन गर्न एक मौका हो। 1980 मा, टमी ग्लेन क्यार्मिचेल ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा मा एस टिभि बिक्री र सेवा पसलमा काम गरिरहेका थिए।
एक टेलिभिजन मर्मत व्यक्तिको रूपमा उनीहरूको क्यारियर फ्लोट्लिन थियो र सम्भावनाहरू महान थिएनन्। हिँड्दा उनको पुरानो साथी रे मिंग र टोमीको जीवन सधैँ परिवर्तन हुन्छ।
रे मिंग लास वेगास मा रहन भएको थियो। आफ्नो कार को बुट मा दुई चीजहरु थिए: एक बैली स्लॉट मिसिन र 'शीर्ष-डाउन संयुक्त'।
'शीर्ष-तल-संयुक्त' इस्पातको एक घुमावदार भाग थियो जसले थोरै - 'गिटार स्ट्रिङ' - तारको टुक्रामा काम गरेको थियो - तारको टुक्रा, लास भेगास क्यासिनोहरूमा स्लट मिसिनहरू धोका दिने।
उपकरण प्रयोग गर्न, तपाईं पतली तार मिसिनको तल्लो तहमा घुसाउनुहुन्छ र मेशिनको आन्तरिक इलेक्ट्रोनिकबाट सानो शुल्क लगाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईंले सिने स्लॉटमा शीर्ष तार सम्मिलित गरेर सर्किट पूरा गर्नुहुनेछ। मेशिनले आफैलाई मद्दत पुर्याउन सकेन - यसले सिक्का भुक्तान गर्न सुरु गर्नेछ।
कार्मिचेल आफ्नो मित्रको प्रदर्शनबाट प्रभावित भए र सदाको लागि पसल पसल बन्द। केवल 30 उमेरमा, उनले सिन्न् सिटीलाई आफ्नो चौथो पत्नीको साथ छोडे। टेलिभिजन मर्मत दिनहरू इतिहास थिए - एउटा पेशेवर धोखाको रूपमा 20 वर्ष कैरियर सुरु गर्न थाल्नु भएको थियो।
निकल्स र अपराधहरू
लास वेगासमा, क्यार्मिचेलले आफ्नो पहिलो स्लट फटायो: पट्टीबाट पाँच-प्रतिशतको मेटिने। उनले £ 35 मा उपल्सहरूमा जेब गरे। "मैले देख्न सक्दिन कि यो गर्न सजिलो थियो। तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाईं याच र कारहरू जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ अमेरिकी सपना, "उनले भने।
पाँच वर्षपछि उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो।
3AM मा, क्यारिचेलले डेनीको भोजनालयमा मात्र पट्टीको पश्चिममा स्लट गर्न खोजे। प्रहरीले फट्याएको र आफ्नो जेबमा शीर्ष-तल संयुक्त फेला पारे।
कारमिचेलले केही अघिल्लो पटक नयाँ सजायलाई जेलमा पठाउन पर्याप्त थियो। उनी पाँच वर्षसम्म जेल सजाय भए, तर केवल दुईजना काम गरे।
"पेनिटिएटरीमा त्यहाँको बारेमा सोच्ने एकदम धेरै छैन" "तपाईंले के गर्नुभयो भन्ने कुरामा सोच्नुहुन्छ र गल्तीहरू र तिनीहरूलाई कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सिधै जान्नुहुन्छ वा अझ राम्रो हुनुहोस्। "
"म डायनासोर खेल्दै थिएँ," क्यारिचेले भने, माथिल्लो तल्लो संयुक्तसँग उल्लेख गर्दै। "सबैजना यसको बारेमा थाह थियो। तपाइँले जहाँसम्म खेल्न सक्नु भयो। "
उनको रिहाईमा, क्यार्मिचेलले स्लिट्स उद्योग परिवर्तन गरेको थियो। पुरानो मशीनहरू - जुन मेकेनिक्स र बिजुलीद्वारा संचालित गरिएको थियो - कम्प्यूटर सफ्टवेयर र माइक्रोप्रोसेसरहरूको प्रयोग गर्ने उच्च-टेक खेलहरू द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको थियो। मेशिन छोटो छोटो मेशिनले अब काम गर्दैन।
"मलाई एक स्लट मिसिन दिनुहोस् र म यसलाई हराउनेछु"
Undeterred, क्यार्मिचेल आफैले एक ब्रान्ड नयाँ भिडीयो पोकर मेशिन खरिद गर्यो र छ महिनामा फोहोरको रूपमा यसको सिमानाको जाँच गर्थे। उनको समाधान: स्लाइडर उर्फ ​​बन्दर पवार।
यो उपकरण स्प्रिंग स्टील र गिटार तारबाट बनाइयो र यो मेसिनमा काम गरिसकेको थियो जहाँ यसले दर्शकलाई ट्रिगर गर्यो र यसको सामग्रीलाई स्पट गर्न खोज्यो। उपकरणले यसको स्वामित्वमा प्रत्येक घण्टा $ 1,000 कमायो।
"कार्मिचेलले बताएअनुसार" कसरी एक मशीनले पैसा गणना गर्छ र त्यसपछि मेशिनमा आफ्नो बाटोमा काम गर्दछ "भन्ने चित्रण गर्छ। "क्यासिनो यति सुतिरहेका थिए। म एक सुन्दर जीवनशैलीमा बस्छु। तपाईं बन्द र अर्को मेशिनमा जानुभयो। तपाईंले पूर्ण कोठा छोड्न सक्नुहुनेछ, "उनले भने।
1991 द्वारा, स्लट्स निर्माताहरूले सुरक्षा खारेजलाई खारेज गरेका थिए। यो बंदर पवारमा अलविदा लहर गर्ने समय थियो। "क्यारिचेलले भने," तपाईंले अहिलेसम्म घोडा चढ्न सक्नुहुन्छ "।
कार्मिकेलको सबैभन्दा कुख्यात आविष्कार प्रकाश ब्यान्ड थियो। एक ग्राहकको रूपमा हराउँदै, उनले खेल निर्माता आईजीटीको शोरूममा अजीब भ्रमण गरे। एक इन्जिनियरले अयोग्य रूपमा मेशिन खोल्यो र सबै क्यार्मिचेलका प्रश्नहरूको जवाफ दिए।
लाइट वान्ड एक क्यामेरा ब्याट्री र सानो बत्ती बल्ब समावेश थियो। जब यो मेशिनमा राखिएको थियो, बल्ब भित्रको सेन्सरले 'अन्धा' भित्र र सिक्का बाहिर तिर्न सक्छ। सरल र धेरै प्रभावकारी।
कार्मिचेल एक रोलमा थियो। केवल एक दिन मिसिनहरु को बाहिर बाहिर $ 10,000 सम्म लिन को लागी थियो, उनले आफ्नो उपकरण को अन्य धोखा देती मा पनि बेच रहे थिए। उनले हरेक दिन अटलांटिक सिटी, कोलोराडो, लुइसियाना र सबै भन्दा ठुलो कैसीनोमा खेले।
उनले आफ्नो असहाय नर्तकी प्रेमिकासँग धोखाधारी यात्रा गर्थे र, 1995 मा, उनले छ महिनामा सात क्रुज लगाए, नासाऊ, अरुबाबा, सेन्ट थमसमा कैसीनो स्क्यानिङ गर्दै थिए।
उहाँले एक जगुआर JX6 चलाउनुभयो, दुई घरहरू, एक मोहरा पसल थियो, र आफ्नो कर तिर्न। उनको 'औसत' उपस्थिति र निर्दोष प्रविधिले तिनलाई वर्षौंको लागि पुलिसलाई चकित गरायो। क्रिमिचेलका 34 वर्षकी केटीले भनिन् "हाम्रो साहसिकले महासागरको ग्यारेन्टी बनाउँथ्यो।"
लक्कर रन आउट ...
अन्त्यमा, गिरफ्तारहरू, सूचकहरू, र संघीय तारकोप्याप्सको संयोजन कार्मिचेलको अभियानको अन्त भयो। "कुराकानीहरू विनाशकारी थिए," लास वेगास एफबीआई एजेन्ट जेरी डब्ल्यू हानफोर्डले भने। "हामीले तिनीहरूलाई अझ राम्रो गर्न सकेनौं।"
सेप्टेम्बर7मा, 2001, क्यार्मिचेल समय सेवामा लागी सजाय गरिएको थियो - 326 दिन - र तीन वर्षको अनुमान दिए। उ पनि हराएको उनको घर दुवै र कुनै पनि क्यासिनोबाट पान्डर्ड अर्डर प्राप्त भयो।
यी दिनहरू, उहाँले पोर्चर गेमकेपरलाई बदल्नुभयो र विरोधी-धोखाधडी यन्त्रहरू विकास गर्दछन्। उनी नेवाडा गेमिङ बोर्डद्वारा 'खेल उद्योगको लागि ठूलो खतरा' को रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ।
अनलाइन संसारमा, चीजहरू फरक छन् र अनलाईन स्लटहरू खेल्न धेरै सुरक्षित छन्। नयाँ संख्याहरू उत्पन्न गर्न अनियमित संख्या जेनरेटरहरू जटिल एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्छन्। यी नम्बरहरू 200,000 अङ्क भन्दा बढी हुन सक्छ। तैपनि क्रिमिचेलले यी कुरालाई झन्झट्याउन खोजे। यद्यपि, अनलाइन स्लॉटको मुख्य फाइदा यो हो कि औसत भुक्तान 97% अंक वरिपरि हो। भूमि-आधारित स्लॉटको साथ, औसत भुक्तानी 85% सँग नजिक छ।
निस्सन्देह, यदि यो सबैले स्लॉटमा थोडा एक्शनको लागि मूडमा राख्नु भएको छ भने कुनैपनि नतिजा हेर्नुहोस्। मजा यहाँ सुरु हुन्छ।
ज्याकपोटसिटीले 20 लाई फर्काउँछ!
ब्ल्याक जैक र बीकार्का बीच मतभेद
उच्चतम भुक्तानी महिला एथलीटहरू
एक उच्च रोलर हुनुको परिभाषा
अनलाइन जुआ विकास गर्न
2019 मा शीर्ष अनलाइन खरिद प्रवृत्तिहरू
जुलाई 4, 2019 / जैकपोट सिटी समाचार र कैसीनो बोनस
मकाउको आर्थिक पुन: प्राप्ति
'मौसमको लागि जलो हुन सक्छ र मान्छे वर्षको यस समयमा धेरै धेरै गाईन्छ, त्यसैले त्यस्ता उत्सवहरू पछ्याउँदै छन्, हामी सोचेका छौं कि हामी आफैंलाई बिस्तारै मनाउन चाहन्छौं। हामीले पहिले नै केहि शीर्ष जुआ फिलिमहरु मा एक नजर राख्नुभएको छ - त्यसैले हामीले सोचेका छौं, किन किन हाम्रो मनपर्ने गीतहरू जुन क्यासिनो वा जुआमा रहेको विषयमा केहि मन पराउँदैनन्?
त्यहाँ धेरै सोच छैन? फेरि सोच्नुहोस्! यहाँ हाम्रो मनपर्ने केहि मात्र छन् ...।
1) रोलिंग स्टोन्स द्वारा टम्बलबंद डिस (1972)
रोलिङ हड्डीहरूलाई माया गर्दैन? खासकर जब तिनीहरूका जंगली चट्टान क्यासिनो गेमको बारेमा गीत संग जोडिएको हुन्छ। यो सत्तर क्लासिक, मैक्स जागर र केइड रिचर्ड्स द्वारा लिखित, यसमा धेरै पासा र कार्ड सन्दर्भ छ, यद्यपि मुख्य विषय हो। क्रेप्स - कसले यो सोचेको थियो? क्रेप्सको बारेमा एक गीत? प्रतिभाशाली! र यदि तपाईं हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्न कि यो राम्रो छ, यसले यूएस चार्ट मा यूएस चार्ट र संख्या7मा5नम्बर बनाएको छ - र रोलिंग स्टोन्स म्यागजिनले यसलाई यसलाई आफ्नो 500 सबैभन्दा ठूलो गीतहरूको सबै समयको रूपमा सूचीबद्ध गर्दछ।
हाम्रो मनपर्ने लाइन: यो कम तल बिचिन 'मेरो ग्याँजको खुट्टा खुल्ला छ' / तपाईलाई थाहा छ तपाईं डुक पनि अझै जंगली छ।
2) स्पेस को ऐस by Motorhead (1980)
यदि स्टोन्सहरूले क्यासिनोहरूको बारेमा कुनै गीत बनाएन भने, यो हाम्रो पहिलो छनोट हुनेछ। एक को लागि ब्लेक तपाईंको बीचमा प्रशंसकहरू, यो एक चिनारी गीत हो जसको रूपमा तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। फराकिलो लेमी द्वारा गाईयो, यो तीव्र र सुपर-हाय छ, तर पुरा तरिकाले शानदार छ र हामी साँच्चै राम्रो खेल को उत्साह र वातावरण को पाउँछौं। यसले 12 हप्तामा पनि खर्च गर्यो UK चार्टहरू, पहुँच 15 नम्बर।
हाम्रो मनपर्ने लाइन: यदि तपाईं जुवा गर्न चाहनुहुन्छ / म तिमीलाई भन्छु, म तिम्रो हुँ / तपाई केहि जित्नुहुन्छ, केहि गुमाउनुहोस् / यो मेरो सबैसँग।
3) फ्रैंक सिनाट्रा (र अन्य) (LUCK BE A LADY द्वारा (1966)
तपाईं त्यहाँ कुनै क्रोनर वा दुई सँग बिना शीर्ष क्यासिनो खेल गीतहरूको सूची नहुन सक्नुहुन्न। 1950 को हिट ब्रॉडवे संगीत, दोस्तों र गुड़िया को लागि लिखित, र मूल रूप देखि रबर्ट एडा द्वारा गाया, यो एक प्रतीक धुन मा वृद्धि भयो जो जैक जोन्स (एक्सएनएमएक्सएक्स), फ्रैंक सिनाट्रा (एक्सएनएमएक्सएक्स), र क्रिसी हाइने (1964 ) - यद्यपि हामी पुरानो ब्लू आँखाको संस्करण राम्रोसँग मन पराउँछौं।
हाम्रो मनपर्ने रेखा: एक महिलाले सबै कोठामा घुमाउँदैन / र अर्को मान्छेको पासामा झुक्याउँछ / चलो यो पार्टीलाई ठोस बनाउछ।
4) ब्लैकजैक द्वारा रे चार्ल्स, (1955)
किरण चार्ल्स कि कथा अनुसार, यो गीत लेखिएको थियो जब उनले ब्ल्याकजैक सत्रमा टी-बोन वाकरलाई हराए। यो थाहा छ कि के यो सत्य छ, तर हामी विश्वास गर्दछौं जो पनि मानिसले हामीलाई बताउँछ। यो गाना ठूलो क्यासिनो गेम टर्मिनलोजी, साथै साथ खेलाडीको भावनामा अन्तर्वार्ताबाट भरिएको छ - र यसैले हामी यसलाई धेरै माया गर्छौं। यसलाई अटलांटिक लेबलमा एकल रूपमा रिलीज गरियो र अमेरिकाको आर एन्ड बी चार्टमा संख्या 8 पुग्यो।
हाम्रो मनपर्ने रेखा: म त्यहाँ दुई दशैंमा बस्छु / मैले सोधे कि म केहि मजाक / व्यापारीले सोही छ / पाँचसम्म मात्र हिसाब गर्न सक्दोरहेछ।
5) बडा लक्क को राम्रो रेंज द्वारा क्लिंट ब्लैक (1994)
एक वायुमंडलीय र आकर्षक राष्ट्र गीत लोड भयो जुआ सर्तहरु संग, Bad Run of Good Run पनि यस फिलिम मा, मावरिक मा प्रदर्शित छ, - यसैले के को रुचि छैन? र यदि तपाइँलाई थाहा भएन भने, गायक ब्ल्याकले पनि एक आइडिया उपस्थिति बनायो। यो ट्युने क्यानाडा देश ट्र्याक चार्ट र यूएस देश देश चार्टहरूमा संख्या 20 मा नम्बर एक पुग्यो। ठूलो चलचित्रमा ठूलो गीत - कस्तो संयोजन! गीतमा केही मजेदार खेलहरू जस्तै "गोली मार चाँद "र" दस कठिन बाटो। "
हाम्रो मनपर्ने रेखा: एक उच्च रोलर पनि चिप्स तल छ / उसलाई जित्नको लागि, म तालिकाहरू वरिपरि घुमाउन चाहन्छु
त्यसोभए, तपाईले अब हाम्रो चयनको बारेमा सोच्नुहुन्छ? के यी गीतहरूले तपाईंको हृदय रेसिंग पाउनुका साथै उनीहरूको हृदय-कचकित कथाहरू र चासोको भनाइमा क्यासिनो गेमहरूको साथ लिन्छन्, वा के तिनीहरूले तपाईंको हङ्कहरू पाउँछन्? हामी जान्न चाहन्छौं।
हामी चाँडै अर्को पोस्टमा धेरै ठूलो क्यासिनो गीतहरू साथ जारी रहनेछौं - र हामी सबै भन्दा धेरै समय पनि समावेश गर्दछौं। तर के तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि अरूले के ग्रेड गर्नेछ? या तपाईं फैंसी हाम्रो पूर्ण ब्लुपर पुरस्कार प्राप्त गीत कि भविष्यवाणी गर्छन?
बिंगो बनाम केनो वर्क्स नेशनल लॉटरी
इ्यान सोरहर्डर फिर्तीहरूलाई फर्काउँछ
Live Dealer र RNG Blackjack बीचको कुराकानी
5 सुरुवात मोबाइल गेमिंग गल्ती
तपाईंको नि: शुल्क स्पिन फाइदाहरू कसरी बढाउने
के डाक्टरले खोजेको छ 'हाम्रा निकायहरूमा नयाँ अङ्ग?
6) ब्रूस स्प्रिंगस्टीन (1992) द्वारा दिसको रोल
यसैले उनले बोस भनिन् - उसले कुनै पनि विषय लिन सक्दछ, केहि अचम्मको गीत र अचको प्रतिष्ठामा अचम्मको धुन र मिश्रण थप्न सक्छ, यो शानदार छ! एक गीत संग प्रेम जुआ को समीकरण, यो आफ्नो हृदय मा आकर्षित को किस्मत छ - र आश्चर्यजनक रूप देखि, यो बस स्प्रिंगस्टीन ई स्ट्रीट बैंड छोडेर पियानोवादी रय बिट्टन संग मिले पछि लेखिएको थियो। एल्बम यो थियो, मानव टच (लिकी टाउनसँग सह-रिलीज), विश्वव्यापी चार्टमा हिट, अंकमा एक स्थान पुग्न अस्ट्रिया, इटाली, र स्पेन, अरु बीच।
हाम्रो मनपर्ने लाइन: उच्च-रोलहरूले तपाईंको शर्त तल राख्छन् र म 'ऊ बढाउनेछु / म राम्रो छु भनेर थाहा पाउँछु भन्ने कुरा मेरो पक्षमा होइन।
7) एवविस (1964) द्वारा वीवा लास वेगास
यदि तपाईंले सोचेको सबै एल्विस गीतहरू हिप-स्विभलिङ पनीर थिए, फेरि सोच्नुहोस्! यस गीतलाई संसारको प्रेम पत्रको रूपमा वर्णन गरिएको छ अमेरिकी जुवा - र सुन्नु भएको छ तपाईं निश्चित रूपमा तालिका, खेलहरू, मान्छेलाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यो उत्साहित छ, उत्तेजित र जीवंत - तपाईंले मनोरञ्जन गर्ने सबै कुरा चाहानु भएको सबै कुरा। यो फिल्मको लागि लेखिएको थियो एक सभ्य बिचारको पुरानो हेरिएको दृश्य हो तर हो, हामी स्वीकार गर्छौं कि एल्विस 'हीरा-स्टड सूट धेरै थियौं - तर यो भिगास छ, बच्चा!
हाम्रो मनपर्ने लाइन: मलाई कस्तो लाग्छ कि त्यहाँ धेरै थिए / दिनमा चौध सय घण्टा भन्दा बढी / काँध पनि यदि चालीस बढी थियो / म एक मिनेट सुत्न सक्दिन
8) ग्यामरले केनी रोजर्स (1978) द्वारा
यो गीतमा सबैको भावना, मेलो, र हृदय-कथाको कथा हो। ठीक छ, यसैले यो थोडा कवितात्मक छ तर हामी मनोरञ्जन गरिरहनु भएको छौँ, गीतको प्रयोग गर्न हाम्रो संख्याको रूपमा 1 खेल रणनीति बाइबल! केही गीतका प्रशंसकहरूले तर्क गर्छन् कि 'समय सबै चीज' अन्तर्गतको जीवनको लागि एक महान रूपान्तरण हो। त्यो जस्तो हुन सक्छ, हामी सोच्दै यो एक महान, शास्त्रीय धुन हो।
हाम्रो मनपर्ने लाइन: उहाँले भन्नुभयो, "छोरा, मैले जीवन बनाएको छु / पढ्नको लागि 'मानिसहरूको अनुहार / जान्न' के कार्डहरू थिए / उनीहरूले आँखाका आँखामा
9) विजेता यो सबै द्वारा Abba (1980)
गम्भीरता - तपाईंले सोचेको थिएन कि हामी पनीर डिस्को छोडेर जाँदैछौ, के तपाइँ? केवल एक आकर्षक धुन छैन, यो एक नृत्य फ्लोर हो! मूलतः सुपर ट्रिगर एल्बममा र पछि एक एकल रूपमा रिलीज गरिएको छ जुन संसारभरका चार्टहरूमा पुग्यो जापान लाई अमेरिका, जिम्बाब्वे युरोपमा - यो गीत आयरल्याण्ड, इङ्गल्याण्ड, बेल्जियम र दक्षिण अफ्रिकामा एक नम्बर 1 स्थानमा पुग्यो। यसले 40 आवरण संस्करणहरूमा पनि आनन्द प्राप्त गरेको छ!
हाम्रो मनपर्ने रेखा: मैले मेरो सबै कार्डहरू खेलेँ / र तपाईले पनि गर्नुभयो
र अब, हाम्रो कम मनपर्दो क्यासिनो गीतको लागि यो समय हो ...
10) पोकर चेहरा लेडी गागा (2008) द्वारा
शायद यो प्लेलिस्ट वा कष्टप्रद श्रृङ्गार हो कि, शायद यो संगठन हो या कष्टप्रद श्रृङ्गार हो, वा शायद यो तथ्य यो छ कि यो गीत एक सम्भावना ब्यान्डविगनमा र रेकर्ड बेच्न प्रयास गर्न र सबै संभव पोकर स्टेरियोटाइपमा फेंकन्छ? केहि भन्छन् कि यो लेडी गागा को सबै भन्दा खुट्टा-ट्यापिंग धुन हो - र यो संख्यामा6मा जानु पर्यो UK चार्टहरू - तर हाम्रो लागि यो विश्वासयोग्यताको कमी छ। र हामी जान्दछ कि यो केवल एक गीत हो, तर निश्चित रूपमा एक गीतले तपाइँलाई क्राइक बनाउन सक्दैन।
हाम्रो कम से कम पसंदीदा लाइन: म उनलाई टेक्सास मा गर्छन चाहान्छु कृपया / Fold 'em को अनुमति दिनुहोस मलाई यो हिट बच्चा संग मेरो साथ रहयो।
भिडियो लिङ्क: गंभीरतापूर्वक? कृपया, यसलाई रोक्नुहोस्।
र अब यो तपाईंमाथि छ ... तपाईका सबै मनपर्ने क्यासिनो खेल गीतहरू के हो? तपाईं हाम्रो छनौट मन पराउनुहुन्छ वा तपाईं m'lady पोकर अनुहारको रक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ? तल टिप्पणीहरूमा आफ्नो विचारहरू थप्न महसुस गर्नुहोस् ... हामी तपाईंको सहयोगको साथमा एक नम्बर दस स्थान थप्न चाहन्छौं।
कैसीनो एप्स कसरी कार्य गर्दछ?
ह्यान्डहेल्ड उपकरणहरूको प्रगति
विश्व वाइड वेब 30 मा 18 लाई बदल्दछ March
यात्रा र रोग
शाजम! बाबेल बाइबिल सिटहरू
सर्वश्रेष्ठ पशु भिडियो स्लट खेलहरू प्ले गर्न
भोलि? तपाईं हुनेछ ... यो हप्ता, हामी हाम्रो दाँत मिठाईको शब्दावली मा फँसिरहेका छौं। खेलको साथमा राम्रो चहचहाना के हो? ब्लेक? तपाईं स्पिनको लागि कस्तो मीठो लिनु पर्छ? रूले तालिका? तपाइँ स्लट खेल्दा के गर्नु हुन्छ?
हामीले आफ्नो जेब पैसा बचत गरेका छौं र जवाफहरू अनपेक्षित गर्न टक पसलमा हाम्रो बाटो बनाउनुभएको छ। चिनियाँ भागको लागि तयार हुनुहोस्।
ब्ल्याक जैक - कालो जैक
कहिलेकाहीँ यी लेखहरू मात्र लेख्छन्। स्पष्ट रूपमा, क्लासिक मिठाईले तपाईंलाई ब्ल्याक जैक खेलिरहेको जस्तो आनन्दित छ ... errr ... एक कालो ज्याक।
यी प्रतीक एनिड स्वादयुक्त मिठाईहरू धेरैले सम्झनासाथ सम्झनेछन्। फल सलादसँगसँगै, तिनीहरू बेलायतको सबैभन्दा लोकप्रिय 'पेनी चश्मा' हुन् (यद्यपि, ती दिनहरू, उनीहरूले कम्तीमा दुई पटक मात्र खर्च गर्छन्!)।
कालो जैक मूलतः ट्रेबर्स बास्केट द्वारा निर्मित गरिएको थियो, जब सम्म यो चकलेट बेथमाथी क्याडिबरी संग विलय भयो। 1980s सम्म, कालो जेकले उनको लपेटेर एक मुस्कुराउँदै गोलोविग देखाए।
आज, कालो जैक 15 को एक प्याकेजमा आउछ - अनौपचारिक प्याकेजिङको साथ पूरा! उनीहरूको स्वादिष्ट चिन्ता स्वादले तिनीहरूलाई बलियो बनाउँछ। तथापि, उनीहरूले तपाईंको दाँतलाई कालो बनाउँछ, र हल्का उत्साहपूर्ण प्रभाव राख्दछ, यदि तपाइँ टेबलमा चिसो भागको बीचमा हुन्छन् भने जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ।
एकपटक फेरि - हामीसँग विजेता छ। के तपाईं आफ्नो चिप्स तालिकामा टाउकोमा चिसो गर्न राम्रो मीठो हुन सक्छ? रोले बजाउँदा, रूले खाओ।
हरिबोले रूले खोज्न सजिलो छन्। तपाईं उनलाई तिनीहरूलाई अनलाइन डाउन ट्रयाक गर्न सक्नुहुन्छ र उनी पन्डल्याण्डल्याण्ड जस्ता पसलमा प्रायः देखा पर्छन्। तिनीहरू सुपरमार्केटहरूमा बहु-प्याकहरूको रूपमा पनि उपलब्ध छन्।
मलाई लाग्छ कि हरिबो रूले मिठाइहरू स्वादमा गम्मीमा समान छन् गोल्ड-बिर्सन। तिनीहरू केवल भालु जस्तो आकारको होइनन्। (यहाँ प्रतिरक्षा हर्बो वेबसाइट मा जानकारी को कमी दुवै को कारण छ र वास्तव मा मेरो स्वाद कलहरु मोटी कोटिंग को द्वारा सगरी जिलेटिन मा हमला गर्छन)।
वास्तविक मिठाई कैसीनो चिप्स जस्तो देखिन्छ र रूले मेज को केहि कुञ्जी रंगहरुमा आउँछ। तिनीहरू मीठो, फलफूल र धेरै अधिक छन्। तथापि ... केवल कालो जैकजस्तै, तिनीहरू दुर्भाग्यवश साइड इफेक्ट साझेदारी गर्छन्। यहाँ हास्य टिप्पणी पढ्नुहोस्।
यदि तपाईं एक हलचल बनाउन चाहानुहुन्छ जब तपाई अर्को रूटको खेलको आनन्द लिनुहुन्छ भने, तपाईंको मिठाईले टेबलमा लैजान्छ र गाँउ दिनुहोस् "बच्चाहरू र बिरोध-अप्ठेरो माया गर्दछ, हरिबिओको खुसी संसार"। बस सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सुन्दर टुलुलेट नजिक हुनुहुन्छ।
स्लॉट - चेरी ड्रपहरू
मधुमेह कमेन्ट छिटो आउँदैछ। कुनै पनि कन्फेक्शनरी को मात्रा मा दिन को शुरुवात को सहन गर्न को लागी छैन। हामीले उच्च र कम एक प्यारा स्लॉट स्लॉटको लागि हेर्यौं र केवल मिठाईको विशेषतामा अनलाइन स्लटहरूको 100 हरू फेला पार्यो।
त्यसैले ... कुनै पनि स्लॉटमा सबै भन्दा धेरै विशेष रूपमा चिन्हित चिन्हहरू चेरी हो, हामी क्लासिक चेरी ड्रपको लागि फिसल्यौं।
चेरी ड्रपहरू अन्तिम उब्रेको मीठा हुन्: रक कडा, बटक-क्लिन्चलीको खट्टा र धेरै मीठो। तिनीहरू सधैंभरि रहन्छन् र तपाईंलाई स्थानीय दन्त चिकित्सकसँग धेरै गुणस्तरको ग्यारेन्टी दिनेछन्।
चेरी ड्रपको इतिहास खुकुरीको मीठोको इतिहास संग बाँधिएको छ। त्यहाँ चेरी ड्रपको लागि क्रेडिट को लागी केहि दावा गर्दै छन्।
हामी डिसबर्ग मा कारीगर व्यवसाय विलम मुलर छ, जर्मनी। उनले 1949 मा आफ्नो उबला मीठा व्यापार शुरू गरे र उनको 'शुद्ध, प्राकृतिक' अवयव को उछाल गर्न को लागि तांबा केटललेट को उपयोग गर्दछ।
तालाब मा, भित्र संयुक्त राज्य अमेरिका, यो Poughkeepsie देखि स्मिथ भाइहरू जो मीठे को दावा गर्छन। भाइहरूले 1852 मा एक साँप तेल विक्रेतालाई भेट्टाए र खाँटी ड्रप सिरपको लागि आफ्नो नुस्खा खरीदा। यो एक राम्रो मा परिष्कृत भयो। वर्ष पछि, एक खट्टा चेरी संस्करण सिर्जना गरिएको थियो।
तथापि, हामी सोच्न सक्छौं कि वास्तविक विजेता जर्ज बास्केट को बिरुद्ध कुनै पनि छैन - लाइसेन्स सबैसर्ट पछि। जर्जले 1842 मा आफ्नो मीठा विनिर्माण साम्राज्य शुरू गर्यो। आज, तपाईं जस्तै कि तपाईं जस्तै फलफूल पाउन सक्नुहुन्छ र क्लासिक बास्केट चरी ड्रपहरू किन्न सक्नुहुन्छ
त्यसैले ... त्यहाँ तपाईंसँग छ: सबै स्वादिष्ट सबै स्वादिष्ट अनलाइन क्रियाकलापको लागि उपयुक्त। यदि तपाईं आफ्नो खेल सुत्न चाहनुहुन्छ भने, चिसो सुरु गर्नुहोस्!
स्लॉट्स मा Radoslav Skubnik धोखा दिए
ब्लकबस्टर क्यासिनो थिम चलचित्रहरू
किन म अनलाइन गेमिङमा चल्दै छु
अनलाइन क्यासिनो उद्योगमा ब्लकचेन टेक्नोलोजी प्रभाव कसरी हुन्छ?
डिजिटल क्यासिनो खेल संस्करण रियल्टी
डार्थ वर्डको लागि गीतहरू प्रत्यक्ष रूपमा
आकर्षक कैसीनो तथ्यहरू
केयर-जुवाजस्तै व्यापार हो?
ड्रेक, ब्रूनो मंगल, टोनी बेनेट, इग्जी अजला, केल्विन हैरिस, ओलिभिया न्यूटन-जॉन र स्कोप डगगले ए-लिस्ट स्टाइलको एक मुट्ठीमा राखेका थिए जसले घुमाए, चट्टान, गाई र नयाँ वर्षमा भाग लिइन्।
लास वेगास मनोरञ्जनको लागि समर्पित गन्तव्य हो। आगोले वाह कारकको आशा गर्यो र उनीहरूले आतिशबाजी भरी बाल्टीसेटलोड गरे। 340,000 भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले पट्टीलाई हिसाब गरे र एक whopping $ 226 मिलियनलाई एकदम मनपर्ने क्यासिनो खेल खेलाडीहरूलाई पनि स्वरमा हेर्छन्।
रोलिन 'उच्च ...
माथि जानुहोस्। लास वेगास स्ट्रिप भन्दा माथि 550 फिटमा, उच्च रोलरले आफ्ना आगन्तुकहरूलाई शहरको एक लुगा लगाउने दृश्यको ग्यारेन्टी दिन्छ। सामान्यतया, 30-मिनेट सवारीले रातभरको एउटा सामान्य $ 34.95 खर्च गर्दछ।
नयाँ वर्षको हप्ताको लागि, तथापि, टिकट $ 2,500 माथि $ 5,000 सम्म सुरु भयो। प्रीमियम प्याकेजले 777 उडान, cupcakes (साँच्चै?), च्याम्पेन, र - सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण - शहरमा उत्तम दृश्य।
उर्लङ्ग झुन्ड्याउने पार्टीभरीको साथ लोकप्रिय पनि स्ट्राटोस्फायरमा टावर पार्टी बाश थियो। सलाखहरू खोल्नुहोस्, एक $ 199 मूल्य ट्याग, र एक 108 भण्डार-उच्च दृश्यको ग्यारेन्टी कि राम्रो समय - र रातो आतिथ्यको ठूलो दृश्य - सबै द्वारा थियो।
पिकर्सहरूले जानुभएको गो गोलाकार र सबैलाई पकाउन सक्थे जुन 'तपाईं सबै पेय' पट्टीमा हुन सक्थे। कट्टर पार्टीगोईरको लागि, पिन अप मोडेल साबना केलीले पार्टी पछि 5.15 सम्म एक कार्यक्रम गरे।
सायद लास वेगास नयाँ सालको हव मेनुको सबै भन्दा उत्कृष्ट छनौट क्लासिक क्रोनर टोनी बेनेट र माभरिक पप आइकन लेडी गागाको स्वादिष्ट कम्बो थियो। त्यहाँ दुई को बीच एक 60 वर्ष उमेर अंतर हुन सक्छ, तर कास्त्रोपोलियन स्वामित्व चेल्सा स्थल मा सबै हेर्न को लागि रसायन शास्त्र थियो।
ब्रह्मांडोल्युनिटनले नयाँ वर्षको हव्वाद्वारा पनि मेजर गरिएको थियो, मार्की नाइट क्लब मा ड्रेक थियो। बिक्रिको घटनाले अर्को दिन डोम पूल पार्टीमा मानार्थ प्रवेश समावेश गर्यो। त्यो ह्याण्डोभरबाट काम गर्ने एक राम्रो तरिका।
वेनिसमा ओभरमा, तिनीहरूले डीजे फाटम्यान स्कूपबाट प्रत्यक्ष प्रदर्शनको साथमा ठूलो बन्दूकहरू बाहिर ल्याए, रेड बुल मिड राईट मिक्स लाउन्जमा र स्नोप डगगमा ताओमा।
म्याद नपुगेको छ, एमजीएम ग्रान्ड निवासी डीजे र संगीत निर्माता असाधारणनायर थियो, केल्विन हैरिसले व्यवसायका लागि हल्कानानमा राखेको थियो। प्रतीक डीजे यो ठाउँ मा तोड्यो कि प्लेबय विश्वमा '#1 नाइट क्लब' जस्तो लाग्छ।
उनीहरूको मनोरञ्जन गोठालो मन पराउने व्यक्तिहरूका लागि यो ब्रिटनी स्पीयर्स वा ओलिभिया न्यूटन-ज्यानको छनौट थियो। स्प्रिर्स केहि समय सम्म पट्टीमा भएको छ जसको उनको चौंकानेश्वर 'टुकडा मेरो' ​​संग ग्रह हलीवुडमा देखाइन्छ।
लामो सम्झनाहरू भएकाहरूका लागि, यो उनको निवासी शो 'समर नाइट्स' मा ओलियिया हेर्न फ्लेमिङो लास वेगासमा थियो। प्रशंसकहरू निराश थिए समर्पित र यो एक थियो कि उनीहरु चाहन्थे ... (माफ गर्नुहोस्)
एग्जी एज्लेला: सबैको मनपर्ने 'बेबीको साथ' ब्याबेरकी प्रदर्शनको साथ लूट प्रेमीले आफ्नो भित्ताका पछाडि एक्शन चलाए। उनको हिट 'फैंसी' र 'ब्ल्याक विधवा' को लागि ज्ञात, Azalea Drai को नाइट क्लब मा क्षमता क्षमता मा प्रदर्शन गरे।
उनको प्रदर्शन एबीसीको बाइकोस्टल नयाँ वर्षको पूर्व विशेष मा चित्रित भएको थियो जसमा टेलर स्विफ्ट, फ्लोरिडा जर्जिया लाइन, बस्टिले, पेन्टाटोनिक्स र फ्रर्गे पनि समावेश गरिएको थियो।
र - केवल गोलाहरू जस्तै - लूट पनि ट्वोसमा हुन्छ। सीसर्स पैलेस मा अधिक, यो जेनिफर लोपेज थियो जसले आगो मा स्टेसन सेट गरे, उनको शो मा 25 संगीतकारहरु संग प्रदर्शन गरे: 'बेस्ट यदि अझै पनि आउछ'।
शुद्ध वर्गको लागि, यो लास वेगास मुख्य आधारमा रहेको थियो, बेलैगियो र मन्डलिया बे, जसले नयाँ वर्षको पूर्व 2014 को लागि लक्जरी लाइन अप को साथ रोक्छ।
बेलैगियोले 'पाँच डायम डायरेयर स्वाद' को मजा लिन रमाइलो गरे। सबै पाँच रेस्टुरेन्टहरूले क्यासिनोमा $ 158 बाट $ 575 प्रति व्यक्तिमा गस्ट्रोनटट ठीक भोजन प्रदान गर्यो।
बीचमा मन्डलिया खाडीमा, यो टाउको पेंट गर्ने समय थियो गोल्ड को लागि 'एक रात तपाईं सम्झना गर्ने प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ'। कुकुरको स्ट्रिटलाइन तर मजाकका लागि 8 बाहिर एक ठोस 10।
मन्डल्यालयमा म्युजिकल हाइलाइटमा घटनाक्रममा मरुन5थियो। लाइट नाइट क्लब मा, निकई रोमरो थियो, जसले 'मोजाले आफ्ना मोजाहरू' चर्काउन थाले, जस्तै सूर्य अर्को वर्षमा पहिलो दिनको लागि आयो।
निस्सन्देह, हामीमध्ये धेरै भन्दा नयाँ न्युनतम वर्षको हवको आनन्द पाउनेछौ। जब यो थोपा लास वेगास एक्शनको लागी आउँछ, जवाफ तपाईंको औंलामा छ। जुनसुकै र जहाँ पनि तपाइँले विभाजित गर्नुभयो, हामीलाई आशा छ कि तपाईं एक भाग्यशाली, समृद्ध र उत्कृष्ट 2015 छ।
ड्रैगन शर्डको लागि आफ्नो प्ले बनाउनुहोस्
Rhyming Reels Online Slots को लागि तयार हुनुहोस्
न्यूकासल 1 -3बर्नमाउथ
अनलाइन कैसीनो जम्मा बनाउन को लागी क्रेडिट कार्ड उत्तम छ?
माथि RNG र लाइभ डेलर खेलहरू
कार्य जाँदै हुनुहुन्छ!5खेलहरू यो मई हुन
स्लाट्स तपाईंको व्यक्तित्व माथि
क्यासिनो खेलहरू, चलचित्रहरू, खेलहरू; हामी सबै एक समयको मनोरञ्जन जस्तै समय समयमा। तर के बारे मा हाम्रो दुई भन्दा ठूलो प्यार गर्दछ - फिलिम र क्यासिनो - गठबन्धन? के अन्त परिणाम कुनै पनि प्रतिलिपि वा हाम्रो धेरै मनपरेको कार्ड र टेबल गेमहरूको यी स्क्रिन संस्करणहरू वास्तविक कुराको छोटो छोटो छ?
शुक्रबार, आजको अविश्वसनीय टेक्नोलोजी र सिनेम क्षमताको साथ - साथसाथै विस्तारको उल्लेखनीय ध्यान - हामी छनौट गर्नको लागि विभिन्न क्यासिनो-आधारित फिल्महरू छन्, धेरै मध्ये साँच्चै उत्कृष्ट चलचित्रहरू छन्। तिनीहरू व्यावहारिक, राम्रो काम, राम्रो अनुसन्धान, र पर्याप्त कार्य हो ब्लेक कुनै पनि खेलाडीलाई सन्तुष्ट राख्न तालिकाहरू।
त्यसोभए जब ठूलो स्क्रिनमा आउछ, कुन क्यासिनो फिल्महरूमा उत्कृष्ट क्यारेक्टरहरू छन्, सबैभन्दा राम्रो क्यासिनो खेल क्रियाकलाप, र सबैभन्दा प्रिय महिलाहरू? कुन कुराले ठूलो कथा बताउँछ तर सेटिङ ठीक हुन्छ?
यहाँ सबै समयको सर्वश्रेष्ठ क्यासिनो चलचित्रहरूको हाम्रो शीर्ष पाँच पिक छ ...
लास वेगास छोडेर
सबै भन्दा दिल-रिन्चिंग फिलिमहरु जुन तपाई सधैँ हेर्न चाहानुहुन्छ, र सायद केजको सबैभन्दा उत्तम भूमिका हो, यो वेगास जीवनको ज्वरो पक्षको कथा हो जुन यसको उज्यालो रोशनी, glitzy, अझै विनाशकारी महिमा। एक व्यक्ति को आत्म मृत्यु को लागी एक आकर्षक विषय जस्तो लाग्दैन, र यो निश्चित रूप देखि एक नहीं छ कि यदि तपाईंलाई चाहना छ कि देखो, तर माइक Figgis देखि यस स्टेलार उत्पादन, जो शीर्ष पांच मा यसको ठाँउ को योग्य छ।
फिल्म तथ्य: निकोलस केज, एलिस्बेथ शू, र जुलियन रेण्डको अभिनेता, यो फिल्मले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता र अभिनेत्रीका लागि ओस्कर जितेको छ, साथै एक थप 32 जीत र 19 नामांकनहरू
Wes Kramer द्वारा निर्देशित यो 2003 तत्काल क्लासिक एक पुरानो विद्यालय वेगास कैसीनोमा आधारित छ, र प्रेम र भाग्यको कारण रिवर्स भाग्यहरूको विचारमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। तपाईं मोबाईलहरू, एक भ्रष्ट कैसीनो निर्देशक र एक सुप्रसिद्ध नेतृत्व महिला संगै धोखाधडी, धोखा र एक राम्रो मध्ये एक छ क्रेप्स दृश्यहरू कहिल्यै गोली हान्छन्।
फिल्म तथ्य: स्टारिंग विलियम एच मेसी, एलेक बाल्डविन, मारिया बेलो, यस फिल्म को ओस्कार को लागि नामांकित भयो, साथै 12 पुरस्कार जीत (राष्ट्रीय सोसायटी फिलिम क्रिटिक्स पुरस्कार सहित) र 22 अगाडी नामांकन
अर्को चिल्लो, कठोर हिसाबले कथा, सुधारिएको जुआको यो समय जसले उच्च-पोकमा पोकर फर्काउँदोरहेछ जुन उनको परेशान मित्रलाई ऋण शर्क्सबाट जोगाउन मद्दत पुर्याउन मद्दत गर्दछ। 1998 मा बनाइएको, यो तारा-सुन्दर सुन्दरतासँग धेरै क्रियाकलाप र यसको हृदयमा वफादारी, प्रेम र हानिको एक कथा हो। यो यसको उत्कृष्ट ठूलो नाम प्रदर्शन को लागि जानिन्छ र धेरै को द्वारा Matt Damon को सबै भन्दा राम्रो भूमिका को रूप मा मानिन्छ।
तथ्य: ताराङ्घाई माट डमोन, जॉन माल्कोभिक, एडवर्ड नर्टन र गि्रेचिन मोलले राउन्डर्सलाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार (एसएफसीएएएएएए) ले जिते र वेनिस चलचित्र उत्सव नामांकन हासिल गरे।
लोभ, शक्ति, धोखा, प्रेम, र हत्या लिनुहोस्, केही गोलहरूमा फेंक, एक ट्राफी पत्नी र यसलाई फ्याक्टि जुआ घर भित्र पस्नु पर्छ Scorcese-style र तपाईं के प्राप्त गर्नुहुन्छ? तपाईं भन्दा बढि एक्शन सहित एक क्रिकिंग फिलिम एक छड़ी हिलाउन सक्छ। शेरोन स्टोन अदरक, एसकी पत्नीको रूपमा sizzles, जब क्यासिनो दृश्यहरु एक्शन पैक र वायुमंडलीय छन्।
फिल्म तथ्य: रबर्ट डी नाइरो, शेरोन स्टोन, जेम्स वुड्स र जो पेसीसी सहित ए-सूची कास्टमा राखिएको छ, यो कुनै आश्चर्य नभएको छैन कि यो 1 ओस्कर नामांकन (उत्तम अभिनेत्री),4जीत (एक सहित सुनको ग्लोब) र7थप नामांकनहरू।
यस अवैध जुत्ता निदेशक गाइ रच्चीबाट यो अवैध जुआ अपराध अपराध नाटकमा अझ बढी छ। 2005 मा बनाइयो, रिवोलभर ले पैसा पहलबाट टाढेर टाढा उड्यो, र आफैले जीवनको लागि खेलिरहेको फोकस। एक विश्वास ट्रिकरक वरपर चारैतिर केन्द्रित बदला बदला मा झुकायो, यो सुरूबाट समाप्त मनोरञ्जन समाप्त हुन्छ।
चलचित्र तथ्य: जेसन स्टेथम, रे लि लियटा, र विन्सेन्ट पेसा को तारांकित गर्दै यस फिलिम ले सर्वश्रेष्ठ विदेशी एक्शन ट्रेलर को लागि 2008 गोल्डन ट्रेलर पुरस्कार जीता।
यो हाम्रो मनपर्ने क्यासिनो फिल्महरू मात्र हुन् - तर अब यो तपाईंसँग छ। तपाईका सबै मनपर्ने क्यासिनो फिल्महरू के हो र किन?
एप र तत्काल प्ले मतभेद
अनलाइन प्ले गर्नुहोस्! न्यू यर्क मा गंगल्याण्डल्याण्ड कैसीनो विवाद - 400 शामिल छ ?!
JackpotCity मा सबैभन्दा लोकप्रिय मोबाइल गेमहरू
विश्वको सबैभन्दा लक्जरी क्रिसिनस हेर्नुहोस्!
वर्षा मानव र जुवा विनाश - मार्क आर्मस्ट्रांग द्वारा
भित्र र बाहिर रूले बेट्स को व्याख्या
यदि तपाइँ अनलाइन क्यासिनो खेल खेल्न मनपर्छ भने, तपाइँ पहिले नै मजा, उत्साह र मनोरञ्जन संग परिचित हुनुहुनेछ जुन उनी आफ्नो घरको आराममा प्रदान गर्दछन। तर यस्तो मनोरञ्जन कहाँ बाट आयो? र कैसीनो खेलहरू कसरी सुविधाजनक रूपमा विकसित भए हामी आजको आनन्द उठाउन सक्छौं?
तपाईं पूर्वजों संग बहस नहीं गर्न सक्छन्
विश्वास गर्नुहोस् वा होइन, जुआ खेलका प्रमाणहरू गुफा चित्रकारीहरू - सबैभन्दा पुरातन स्रोतबाट पुरातत्वविज्ञान खोजहरूमा देखाइएको छ! चीन, रोम, मिश्र - यिनी प्राचीन संस्कृतहरु मध्ये प्रत्येक को जुआ खेल को एक रूप थियो जुन एक दाँत को लागि खेलन शामिल थियो। पुरातन रोमनको मनाई जुआको समयमा शनिर्नलिया पर्वको दौडान, र 530BC नजिकैको भेटिकन वेटिकनमा रहेको ठाउँ हो जुन अलिज र अज्याक्स हेडलाई टाउकोमा देखाउँछ, युद्धमा होइन तर बोर्ड खेलमा।
धेरै गेमहरूमा दुई छैट छैट फ्याँक्दै भाग्यशाली विचार गरिनेछ, तर के तपाईंले थाहा पाउनुभयो कि यो प्राचीन युनानमा फर्किन्छ, जब संयोजन 'एफ्रोडाइट फेंक' को रूपमा चिनिन्छ? र सोच्नुहोस् कि यी सबै खेलहरू धेरै पुरातन छन् जुन तिनीहरू पूर्णतया हराएको छ - keno चीन 2000 वर्ष अघि उत्पन्न भएको छ, र त्यस समयमा धेरै सानो परिवर्तन भएको छ।
उमेर भर लोकप्रियता
विश्वभरका क्यासिनो खेलहरू लोकप्रियता, विशेषगरी यात्राको सजिलो र अधिक किफायती हुन्छ, र उनीहरूले नयाँ स्थानहरू र दर्शकहरूलाई भेट्टाउन स्थानीय खेलाडीहरू अनुरूप बनाउन, धेरै गेम भेरियन्टहरू र विशेष नियमहरू सिर्जना गरेका थिए। नयाँ र अधिक उदार भुक्तानीहरू।
जहाँ सम्म हामी जान्दछौं, त्यहाँ कहिल्यै त्यस्तो संस्कृति छैन जुन कुनै प्रकारको जुआ खेलको आनन्द उठाउन सकेन। नेपोलियन मूलको ठूलो प्रशंसक थियो ब्लेक खेल, 'विंग्ट-एट-ए', जबकि द्वितीय विश्वयुद्धले सिपाहीहरू पराजित गरे क्रेप्स खरानीमा छनोटको खेलको रूपमा, र हामीले अघिल्लो पोष्टमा छलफल गरे जस्तै, निक्सन वास्तवमा उनीहरूको पोकर जित्नबाट पैसा प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिको अभियानको लागि भुक्तानी गरे।
जुआ गेमको निरन्तर लोकप्रियताको बावजूद, एक्सएनएनक्सक्स सम्म कुनै औपचारिक क्यासिनो भवन थिएन, जब भेनिसका पदाधिकारीहरूले जुवा समयको दौडान गैरकानुनी जुवा खेल्न थाले र निर्णय गरे। यो 1600 मा बन्द गरिएको थियो, तर त्यस समयमा, अवधारणा पहिले नै पकडिएको थियो - विशेष रूपमा मा अमेरिका.
यूएस न्यू ऑरलियन्स, सेन्ट लुइस र प्रमुख शहरहरु संग कैसीनो को विकास मा एक अभिन्न अंग खेलायो शिकागो कैसीनो खेल प्रावधान, नवाचार र विकास को अगाडी मा। केसिनो विकसित भएमा, उनीहरूले आफ्ना फर्शहरूलाई आफ्नो ग्राहकलाई सट्टा राख्न, सम्पूर्ण क्षेत्रहरू स्लट्स र भिडीयो पोकरमा नामित भएका छन्, टेबल गेमहरूको लागि अलग क्षेत्र जस्तै रूले, Baccarat, र क्रेप्स।
खेलाडिहरूसँग निःशुल्क इनामहरू पाईयो जस्तै निःशुल्क खाना र पेय जस्तै तिनीहरूले खेले - र नि: शुल्क सुइटहरू र 'उपहारहरू' को रूपमा उच्च रोलर्स र व्हेलको लागि कारको रूपमा महँगो रूपमा। तर ईंटहरू र मोर्टार क्यासिनोको रसदले गर्दा मानिसले उनीहरूलाई खेल खेल्न सकेन किनभने उनीहरूले खेल खेल्न सकेनन्, क्यासिनोले यो संस्करण उपलब्ध गराएन, वा टेबलहरू पूर्ण भएनन् वा भौगोलिक स्थानले मानिसलाई प्राप्त गर्न कठिन भयो। त्यहाँ पहिलो स्थानमा।
यो सबै अनलाइन जान्छ ...
जब इन्टरनेट सिर्जना भयो, यसले नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्दछ। जब यो एक मानक घरको सुविधा भए, अनलाइन क्यासिनोहरूको लागि अवसर बढ्यो, र क्यासिनो गेमहरूको नयाँ युग विकसित भयो। खेलाडीहरू अब उनीहरूको मनपर्ने खेलहरू आफ्नै घरको सुविधाबाट पहुँच गर्न सक्थे, बिना यात्रा समय वा खर्च बिना खेल र घडी वरिपरि उपलब्ध भए, सबै भिन्नताहरू उपलब्ध छन्।
अब कुनै पनि फ्रान्स र पेयको लागि कुनै पनि आवश्यकता थिएन, तर अनलाइन क्यासिनोले वैकल्पिक इनामहरू प्रदान गरे जस्तै स्वागत बोनसहरू र पुनः लोड बोनसहरू, सम्पूर्ण अनलाइन अनलाइन क्यासिनो अनुभव बढाउन डिजाइन गरिएको थियो। हालै, आईप्याडहरू, आईफोनहरू, ट्याब्लेट्स र एन्ड्रोइडहरू - र कला कार्यक्षमता र डिजाइनको प्रत्येक घमण्ड राज्य सहित मोबाइल उपकरणहरूमा उपलब्ध उपलब्ध श्रेणीको साथ क्यासिनोहरू मोबाइलमा गएका छन्।
हामी लामो बाटो आइपुगेको छ - तर यो सिर्फ धेरै सुरुवात जस्तै धेरै तरिकामा लाग्छ। भविष्यमा क्यासिनो गेमहरूबाट तपाईँ के हेर्न चाहनुहुन्छ?
केन्डल जेनर र किम कार्डाशियनसँग ब्ल्याकजेक खेल्नुहोस्
रोबोट बर्टिन्डर भविष्यको हो?
ब्ल्याक ज्याक शब्दावली
द गेमिंग विश्व मा एटारी को भूमिका
खेल बेट सल्लाह सल्लाह मा राख्न को लागी
किन अनलाइन क्यासिनो बोनस उत्तम हो
एक पटक फेरि, चलचित्र उद्योगले क्लासिक चलचित्र लिन र यसलाई समकालीन रिमेकमा बदल्न छनोट गरेको छ। अल्फी, एनी, र द इमिटिभिले डरावनीको पालनामा पछ्याउँदै, जुआङको एक आधुनिक परिवर्तनको लागि सबैभन्दा सुन्दर प्रतिमा हो। अब तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि मूर्खको अनुहार यस्तो प्रतीक स्थितिको क्लासिकमा लिन र यसलाई एक मोटो मोडिदिनुहोस् - र हामी तपाईंको साथ सहमत हुन इच्छुक छौं - तर जब उनीहरूको आँखामा फिल्म उद्योग डलर चिन्ह छ भने, तिनीहरूलाई रोक्न कुनै पनि छैन।
अनलाइन कैसीनो खेलहरु को लोकप्रियता मा वृद्धि - विशेष रूप देखि मोबाइल क्यासिनो एप्स को आगमन संग जो खेलहरु को र अधिक मजा र कभी पनि सुलभ बनाइए - निस्सन्देही यस कैसीनो आधारित नाटक को पुन: देखने को लागि हलिवुड को निर्णय मा एक विशाल प्रभाव थियो। तर आधुनिक रीमेक कसरी पुरानो टाइमर सम्म खडा हुन्छ? के यो उद्योगले ठूला काम गर्यो वा पत्थरको बोटीको रूपमा सिंक गर्यो?
1974 मा बनाइएको, मूल फिल्मले जेम्स क्यानले जिम बेनेटको रूपमा अभिनय गरेका छन् - दिनको एक स्व-ढोका साहित्य प्राध्यापक र रातो द्वारा उच्च स्टेज जुआ। यो बेनेटको जुत्ता र चार्टहरूसँग सम्बन्धित सर्तहरू लेख्ने कथालाई पछ्याउन पछि लाग्दछ, जुन उनको कडा पृष्ठभूमिको बावजूद, एक कोरियाई क्यासिनो प्रबन्धकलाई र त्यसपछि डुबकी ऋण शार्कमा - र उनको प्रयास गर्दछ। उनको वरिपरि आफ्ना प्रियजनहरू प्रयोग गरेर परिस्थितिलाई सही गर्न। यो बेशक, आत्म-इनकार र क्राइक-योग्य खराब निर्णयहरूको भावुक रोरोक्रोस्टर हो - र क्यासिनो दृश्यहरू tantalizingly प्रामाणिक हो।
क्रिसमस 2014, मार्क Wahlberg मुख्य मानिस जिम को जूता मा कदम, ब्री लार्सन संग एक सम्बन्धित चिन्तित छात्रहरु र जेसिका लैंज संग एक बेनेट को अमीर आमा को रूप मा एक निर्णायक भूमिका निभाई। यो Rupert Wyatt संस्करणले निश्चित रूपले यसको पैसाको लागि मूल रन प्रदान गर्दछ, त्यसै प्लानको पछि लाग्न सम्भव हुन्छ तर Wahlberg को हस्ताक्षर pouting संग आत्म-loathing तत्व ल्याउन। जब यो कार्य आउँछ, ब्लेक क्षणहरू निश्चित रूपमा केही अत्यन्त वायुमंडलीय दृश्यहरूसँग वास्तविक प्रतिद्वंद्विता गर्छन् जुन तपाईंको सीटको किनारामा छ।
तपाइँ यहाँ आधिकारिक ट्रेलर हेर्न सक्नुहुन्छ ...
केहि चलचित्र तथ्यहरू
हाम्रो मनपर्ने लाइन (2014 संस्करण) - 'तपाईं के साथ गलत छ? तपाईले मस्तिष्कको क्षति पाउनुभयो? '
(फ्रैंक सम्बोधन फ्रिक: फ्रान्कको राम्रा गुणहरू जस्तै आकर्षण, हेर्दा, विशेषाधिकार र शिक्षाको सूची पछि बिस्तारै बिस्तबत्तीहरू)।
त्यसैले - कुन राम्रो छ?
कुनै पनि क्लासिक पंथ फिलिमलाई रिम्याक एक जोखिमपूर्ण कदम हो, र आलोचकहरू निश्चित रूपमा सक्रिय छन्। हामी आधुनिक संस्करण को मुख्य प्लान Wahlberg को प्रदर्शन हो, एक (विशेष रूप देखि गंदा) जॉन गुडमेन को एक मजबूत मान्छे संग फ्रैंक।
यद्यपि, यो देखिन्छ कि सबैलाई सम्झौतामा छैन - वहालबर्गको अभिनयको रूपमा 'डिनोइट' भनिन्छ UKगार्जियन अखबार, भित्रीले आफ्नो डिलीवरीलाई 'अल्टिटेक्चर बज्जिल' भनिन्, इंग्ल्याण्डले भने कि उनको बिरोधले कहिलेकाहीँ पनि अचम्म लाग्छ। हामी यो एकदम ठिक्क छ जस्तो लाग्छ। यद्यपि केयनलाई एक नामका लागि नामाकरण गरिएको थियो सुनको उनको हत्यारे प्रदर्शनको लागि ग्लोब - र निश्चित रूपले अझ सहमत हुन्थ्यो - र यद्यपि यो जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ कि वाहल्बर्गले त्यस्तो ध्यान पाउँदैन, तिनको उल्लेखनीय प्रयास थियो, विशेषगरी जब तपाईं विचार गर्नुहोला कि त्यस्ता कठिन कार्यहरू पालन गर्न थाल्छ।
प्रमुख महिलाहरु को लागि, मिस लार्सन निश्चित रूप देखि आकर्षण छ, तर लरेन हटन को अधिक smoldering छ। तपाईं यहाँ दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ र आफैलाई निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ!
आईएमडीबी वेबसाइटले हालको संस्करणलाई 6.9 को रूपमा मूल्याङ्कन गर्दछ, तर यो 7.2 मा मूल pips - र हामी कसलाई बहस गर्दैछौं? एक राम्रो मान्छे को कोशिश करो - र क्रिसमस संग महान समय, हामीलाई सामान्य त्रास देखि एक ब्रेक दिन को लागि - तर कहिलेकाहीँ, मूल सिर्फ ... राम्रो छ।
के प्रत्यक्ष बिक्रेता क्यासिनो सुरक्षित छन्?
2018 को शीर्ष यात्रा स्पॉट
Beginners for Better Blackjack Betting
एक कैसीनो पसंदीदा मा एक नयाँ न्यू लिको
सुरक्षित वातावरणमा क्यानाडामा तपाइँको अनलाइन स्लट्स कसरी प्ले गर्ने
रेट्रो क्यासिनो खेलहरू पछाडि शैलीमा छन्
सबट उष्णकटिबंधीय जलवायुको विजेता मिश्रण, र आँखा जुन टाढासम्म देख्न सकिने समुद्र तटहरूले देख्न सक्छ, मार्टलि बीचले मजा र सन मायालु दर्शकहरूलाई विजेता बनाउँछ। वास्तवमा, यो अनुमान गरिएको छ कि 14 लाख भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले दक्षिणमा यात्रा प्रत्येक वर्ष बनाउँछन्।
त्यहाँ एक र अर्को कारण हो कि Myrtle Beach यति धेरै मनोरञ्जन हो। केवल तीन माइल अपतटीय, क्यासिनो क्रूज व्यवसायको लागि खुला छ। अन्तिम शताब्दीमा समुद्र तटमा तीन माइल सीमा संयुक्त राज्यको सीमाको रूपमा सेट गरिएको थियो। यो दूरीमा आधारित थियो किनकि किनारमा आधारित तोप आगो लगाउन सक्थ्यो।
इन्टरप्राइभर्सरहरूले यस तथ्यलाई पक्राउ गरे कि यदि तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय जलमा डुङ्गा गर्नुभयो - अमेरिकी कानुन लागू हुँदैन। सरल: तपाईंको डुङ्गालाई एकदम क्यासिनो चाहिन्छ, उत्सुक पिकरहरूसँग उठाउनुहोस् र तीन माइलको दूरीको लागि समुन्द्रमा जान्छ।
'कहीं पनि क्रूर' को रूपमा ज्ञात, क्यासिनो चाँडो ठूलो व्यापार भयो। शुभकामनालयका लागि शुभकामनाहरूले मौका पाउने मौका पाएका थिए र राज्यका राजनीतिक नेताहरूले चाँडै नै महसुस गरे कि त्यहाँ राजस्व बेल्ट बूमको साथमा राजस्व बढ्दै गयो।
यस वर्षको सुरुमा, मार्टल बीच बीच र साउथ क्यारोलिनाका बासिन्दाहरूलाई एक साधारण प्रश्न सोधिएको थियो: के तपाइँ पेट्रोल वा जुआमा करको माध्यमबाट आधारभूत धनराशि बढाउनुहुन्छ?
तथापि, यी भूमिहरू क्यासिनोसँग सम्बन्धित छन्। यो क्यासिनो क्रूज कारोबारको लागि विपक्षी हुनेछ जुन पहिले नै कानूनी रूपमा सञ्चालन हुन्छ। अन्तिम कुरा यो चाहन्छ कि भूमि आधारित क्यासिनोको परिचय हो।
नीलो मा शर्त
Myrtle Beach कैसीनो क्रूज मुख्य रूप देखि लिटिल रिज वाटरफ्रान्स देखि काम गर्दछ जो वार्षिक ब्लू केकब त्योहार को घर पनि हो
सनक्रूज Aquasino र बिग एम जुआ नाच समेत थुप्रै जुआ डुङ्गाहरू छन्।
SunCruz Aquasino एक 220 पैदल लामो डुङ्गा हो जुन 600 यात्रुहरू समायोजन गर्न सक्छ। ट्रिप्स सामान्यतया पाँच घण्टाको लागि अन्तिम र क्लासिक क्यासिनो गेमहरूको एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तावमा छन् ब्लेक, Craps, र सजिलो लोकप्रिय स्लट।
तपाईं सबै कार्य खाई सक्नुहुनेछ
बिग एम एक सानो सानो डुङ्गा हो जुन दक्षिण क्यारोलिना मा कुनै अन्य क्यासिनो भन्दा बढी खरिदहरू बाहिर निस्कने को दावा गर्दछ। बोर्डमा खेलहरू समावेश गर्नुहोस् यो सवारी,3कार्ड पोकर, र 'ढीलो' स्लॉट। सबै एक पाँच घण्टा यात्राको मजा लिने को लागी लागत $ 25 छ र त्यहाँ सबै एक बोर्डमा बुफे खाउन सक्नुहुन्छ।
प्रायः Myrtle Beach आगन्तुक र क्यासिनो क्रूज प्रशंसनीय Todd जोन्स बिग एम जुआ नाव मा नियमित दिनको तयारी हो।
"मलाई र मेरो परिवार मेरो लामो समय सम्मको लागि आउँदै गरेको छु जबसम्म मैले सम्झन सक्छु। हामी कोलम्बियामा बस्छौं र समुद्र तटमा पुग्न यो तीन घण्टा भन्दा कम लाग्छ। "
"बच्चाहरू अहिले बढ्दै छन् त्यसैले अब मेरो श्रीमती र म जुनसुकै चाहानु सक्दछु। बिग एम तेस्रो डुङ्गा हो जुन डायमण्ड व्यवस्थापनको स्वामित्व छ। पहिलो पटक हामीले क्यासिनो क्रूज गर्ने प्रयास गऱ्यौं, हामी दक्षिणी सुरुवातमा पुग्यौं। त्यो अन्ततः हीरा केटी दुई र अब बिग एम द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको थियो।
"हामी आफैलाई वास्तविक क्रूजको आनन्द उठाउँछौं जुन हामी कैसीनोमा खेल्न मन पराउँछौं। यो धेरै रमाइलो छ र स्टाफ धेरै धैर्य छ। तिनीहरू अनुकूल र मदतकारी छन् किनभने त्यहाँ नयाँ विचार गर्ने खेलाडिहरू छन्।
"मलाई एक पटक याद छ जब सर्ज निकै बलियो थियो र रूले चिप्स सबै तालिकामा उड्यो। यो निश्चित रूपमा खेलमा अर्को आयाम थप्छ, "उनले भने।
शुभ थन्ग गाओ
त्यहाँ छ - निश्चित - कैसीनो क्रूज व्यवसाय भन्दा मा Myrtle Beach को धेरै अधिक छ।
अपराध लेखक मिकी स्पिलनले 1950s मा Myrtle Beach मा मिस साउथ क्यारोलिना प्यान्टलाई न्याय गर्न प्रयोग गर्थे। यी दिनहरु, यदि तपाई धेरै छाला छोड्नु भयो भने तपाईले राम्रो वा पनि पक्राउ गर्न सक्नुहुनेछ। थन्गहरू प्रतिबन्धित छन् र बटको कुनै पनि भागलाई खुलासा गर्न अनुमति छैन।
देश संगीत प्रेमीहरू पनि Myrtle Beach मा राम्रोसँग छन्। केरोन गिलिमोम द्वारा 1986 मा केरोलिना ओप्री खोलियो र नेशभिले बाहिरको सबैभन्दा राम्रो देश र पश्चिमी संगीत गन्तब्यको रुपमा प्रतिष्ठा कमाएको छ।
2015 को लागि छुट्टै गन्तव्य छनौट गर्न संघर्ष? Myrtle Beach मा 14 मिलियन वार्षिक आगामी, केवल 100,000 अमेरिका भन्दा बाहिर हो। यसैले, यदि तपाईं केहि गहिरो दक्षिण आतिथ्य, नीला केकडा, र एक प्रसिद्ध क्रूज अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ कहाँ आउनु हुन्छ।
स्टीव वाइनको चार्जेड कैसीनो क्यारियर
ब्ल्याक ज्याकमा कार्ड गणना
यो कंकरियरको रूपमा काम गर्न के हो?
तपाईंको बारेमा के तपाईंलाई मनपर्ने क्यासिनो गेम भन्छ
सबैका लागि लाइभ डेलर खेलहरू छन्?
उच्च रोलर क्यासिनो अनलाइन
जुलाई 26, 2018 / समाचार
बस कल्पना: यो आइतबार, नोभेम्बर 30, 2014, तपाईं लस भेगासमा बस्नुहुन्छ र तपाईंको पुरानो मित्रले शहरबाट बाहिर निस्कनु भएको छ तपाइँलाई भ्रमण तिर्न निर्णय गरेको छ। तपाईं गुनगुनी जुत्ता हुनुहुन्न तर उहाँ वास्तवमा पट्टीमा कार्यलाई प्यार गर्नुहुन्छ। ऊ एक राम्रो समयको लागि छ र तपाईं एक विश्वसनीय विन्मान हुनुहुन्छ।
तपाईं दुवै 221 उत्तरी रैंम्पार्ट बोलिभर्डमा जानुहुन्छ, जहाँ जेड मार्टीनको स्वामित्वमा राम्पार्ट क्यासिनो व्यवसायको लागि खुला छ। Rampart बिल आफैले 'स्थान जहाँ सुप्रभात ग्यामरहरू खेल्न चाहन्छन्' को रूपमा।
वास्तविकता मा, राम्पार्ट कैसीनो एक मामूली कैसीनो छ - एक पुराना र अधिक स्थानीय भीड संग लोकप्रिय। यसले Bellagio घंटीहरू र सीइस्टल्सको कमी छ। यसमा स्टीभ वाइन अज्ञात कारक छैन। यो अनलाइन विकल्प होइन।
Stake र Steak
तथापि यो ठूलो स्लॉट, मित्रवत कर्मचारी, एक बॉलिंग गली, सिनेमा चलचित्र थिएटर र बिंगो पार्लर हुन्। बिर्सने छैन, एक उच्च मूल्याङ्कन गरिएको स्टेकहाउस र मेक्सिकन र इटालिया रेस्टुरेन्टहरू।
हाम्रो अज्ञात नायक एक 'मायालु gamer' होइन, तर उसले स्लॉटमा कहिलेकाहीँ फ्लाटर पाउँछ। आफ्नो उत्साहित मित्र कैसीनो फ्लोर वरिपरि आफ्नो बाटोको रूपमा काम गर्दछ, उसले अनौपचारिक मेगबाक प्रगतिशील स्लॉटमा सानो $ 20 जुवा गर्ने निर्णय गर्दछ - केवल 1,000 मिसिनहरु भन्दा बढी मध्ये एक मात्र।
अचानक, the रोशनी फ्लैश, घंटी रङ। मानिसहरूले आफ्नो टाउको उठाएर के कुराको कारण देख्यो। एक मुस्कुराउने फ्लोर प्रबन्धक तपाईलाई तिरस्कार गर्छ। तपाईंले भर्खरै एक खजाना जित्नुभएको छ - यो ठूलो छ - यो ठूलो छ - यो शक्तिशाली छ - यो एक आर्थिक रुपैयाँ हो। यो व्यापारले के 'जीवन परिवर्तन गर्ने' भन्छ।
यस बिन्दुमा, यो मेगाबक्स प्रोग्रेसिव स्लट मिसिनको बारेमा एक सानो इतिहास दिन लायक छ। पहिलो कुराहरू पहिलो: यदि तपाईं मेगाबाक प्ले गर्न चाहानुहुन्छ, यो वेगास, बच्चा हुनु पर्छ।
खेल लस भेगास मा सबैभन्दा लोकप्रिय स्लॉट मध्ये एक छ र यसको 20 सालको इतिहासमा लाखौंको क्लच सिर्जना गरेको छ। खरगोश जित्न को लागी, खेलाडीहरूले मात्र तीन सिक्का जुत्ता गर्न आवश्यक छ - $ 3। प्राथमिक खजाना 750 खेल सञ्जाल द्वारा उत्पन्न गरिएको छ, 136 फरक Nevada कैसीनोहरूमा।
(वास्तवमा, क्यालिफोर्निया, न्यू जर्सी र मिसिसिपीमा मेगबाक स्लट्सहरू छन् तर उनीहरूले नेभाडा पोटबाट साझेदारी लिँदैनन्। तिनीहरूको प्रगतिशील खैरोहरू धेरै सानो हुन्छन्)।
मेगाबक्स ज्याकपट्टि जित्ने बाधाहरू धेरै लामो हुन्छन् - 1 मा 17 बाट 1 मिलियनमा 50 लाई भिन्नता हुन्छ। जुनसुकै तरिकाले तपाईलाई छाला बनाउनुहुन्छ, हाम्रो भाग्यशाली लास भेगास स्थानीयको लागि यो एकदम राम्रो रात थियो।
प्लेट कर्मा संग्रह गर्नुहोस्
कथामा फर्कनुहोस्। अब 14 डलर भन्दा बढी भन्दा बढी अमीर छ, हाम्रो नायकले स्पष्ट रूपमा सोच राख्नुभएको छ ईश्वरीय हस्तक्षेप उनको खगोलीय जीत को पछि एक कारक थियो। खट्टे मारेर केही दिन पछि, उहाँले आफ्नो सबै जीत दान दान गर्न आफ्नो इरादा घोषणा।
उहाँ आफ्नो पहिचान गोप्य राख्नुहुन्छ तर आफ्नो चर्चको लागि नयाँ पूजाको निर्माण गर्ने योजनाहरू, जुन वर्तमानमा स्थानीय हाईस्कूल जिमिनायममा सेवाहरू राख्छ। चलो आशा छ कि उनीहरूको लागि अगाडि पङ्क्ति पाउनु आरक्षित छ र आशा गरौं कि परमेश्वरले छिटो उसलाई ट्रयाक गर्नुहुन्छ।
नयाँ मण्डलीको निर्माण पछि बायाँ कुनै पनि पैसा लास वेगास भर मा विभिन्न कारणहरु लाई दान गर्न सकिन्छ। सिने शहरमा बस्ने व्यक्तिको सार्थक व्यवहार।
हाम्रो नायक उनको कंधे श्रुग गर्न पहिलो खजाना विजेता होइन किनकी कंधेले पैसालाई राम्रो कारणले हात पारेको छ।
क्रिस्ट थाहा छ ...
2013 मा क्यानाडा टिम क्रिस्टले कैलगरी लोटटो म्याक्समा $ 40 मिल्यो। पाम स्प्रिंग्सको यात्राको भ्रमण गर्दा क्रीले समाचार सुने। 33 वर्षको उनको श्रीमती दुई वर्षअघि क्यान्सरको मृत्यु भएको थियो। क्रिस्टले तुरुन्तै निर्णय गर्यो कि उनी सबै क्यान्सर धर्मार्थहरूलाई रोगलाई हराउन बिस्तारै दिन सक्थे।
उत्तरी आयरल्याण्डमा यूरोयिलियन खजाना विजेता मार्गरेट लौटेले स्थानीय नौकरी केन्द्रबाट घरको बाटोमा 26 मिलियन पाउनुभयो। ल्टेरी एक हप्ता मात्र £ 58 मा बस्दै गर्दा उनले पैसा कमाए
"मैले मेरो वयस्क जीवनको बेरोजगारको आधा खर्च गरे र न्यूनतम वेतनमा अर्को आधा खर्च गरें, त्यसैले मलाई थाहा छ कि चीजहरू कत्तिको कडा परिश्रम हुन सक्छ"। उनको शब्दको लागि सही छ, ल्टेरीले पहिले नै उनको भाग्य को भन्दा अधिक भन्दा बढी दिए।
अन्तमा, हामी टाउकोमा पुग्यौं जर्मनी एन्जेला माईरको बिट्टरनेलिटीको लागि। माईन 63 थियो जब उनले पाउन्ड 330,000 ले जर्मन राष्ट्रीय लटरी खेल्छन्।
एकपटक उनको जीतको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको पतिको मृत्यु भएको हेरचाहले उनलाई एक पत्र लेख्यो कि उनी आफ्नो मेडिकल खर्चको लागी तिर्न चाहान्छन। बिल भुक्तान गर्नुको सट्टा माईले5वटा बोतल चैंपेनलाई पकाए र उनको € 800 नोटहरूको सबै 500 पकाए र तिनीहरूलाई शौचालयमा फ्याँक्यो।
ब्रान्ड मूल: Puma
ग्लोबल जुआ रिलिज
शीर्ष5पोकर पुस्तकहरू पढ्नु पर्छ
2018 मा हेर्नको लागि क्यासिनो ट्रेन्डहरू
अप्रिल 15, 2019 / समाचार
शीर्ष5सबै भन्दा ठूलो युरोपेसी क्यासिनो
जीवन शैली कसरी परिवर्तन हुने भविष्यको सम्पत्ति बजार परिवर्तन हुनेछ?
फरोको बारे सबै
यदि तपाइँ क्यासिनो खेल खेल्न मनपर्छ भने, तपाईलाई थाहा छ कि सेटिङ, वातावरण, छनौट र मूल्य महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, तपाइँ कसरी खेल्न छनौट गर्नुहुन्छ? हामीले तपाईंको लागि अनुसन्धान गरेका छौं र विश्वभरका शहरहरूमा गेमिङ क्रियाकलापको प्रस्ताव, प्रस्तावका छनौटहरू, खेलहरूको गुणस्तर, स्टेक र सीमा र दायरा र दायराहरू (पाठ्यक्रमका) र तिनीहरू कसरी तुलना गर्नका लागि हेर्नको लागि विचार गर्दछ। यहाँ हाम्रो निर्णय हो ...
5: जुआ क्रूज
उच्च समुद्रहरूमा कैसीनो खेल खेल्न कहिल्यै सोचेनन्? त्यसपछि तपाइँ एक उपचारको लागि हुनुहुन्छ। बसमा कैसीनो संग सुसज्जित छैन, जुआ क्रूर ले तपाईंलाई एक एकल यात्रा मा धेरै गर्म स्थान गन्तव्य गर्न सक्छ, त्यसैले तपाईं माथीथ यात्रा यात्रा कार्यक्रम को व्यवस्थित गर्न को लागी विभिन्न स्थलों को जा सकते हो। बस एक क्रूज छान्नुहोस् र यो सबै तपाईंको लागि गरिनेछ। उदाहरणका लागि, तपाईं फरेन्सी क्रिरेबियन द्वीपहरू - अरुबा, क्युराओ र डोमिनिकन रिपब्लिकमा कार्यरत हुनुहुन्छ - अथवा तपाईले केहि दक्षिणपूर्व एशियाई शहरहरू प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ एक क्रूज छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँका आवश्यकताहरुसँग उपयुक्त छ। तपाईं क्यासिनो, उनीहरूको आतिथ्य र उनीहरूको कम्पोज नमूना गर्ने फाइदा पाउनुहुन्छ, यो एक जुत्ता छुट्टै छुट्टाछुट्टै छुट्ट्याउन चाहनेहरूका लागि एक राम्रो छनौट गर्दै!
एक जीवंत शहर जो भव्य स्तर मा कला र संस्कृति को मान्यता प्राप्त गर्दछ, मेलबोर्न केहि गंभीर कैसीनो खेल मजा को लागि एकदम सही स्थान हो। क्रिस कैसीनो र मनोरञ्जन परिसर मा हरेक वर्ष खेलाडी (पुरस्कार विजेता होटल, स्पा, विवाह, रेस्टुरेन्ट र कैसीनो गेम सबै एक छत अन्तर्गत खेलाडी) मा खेलाएको छ, यस शानदार ओस्ट्रेलियन शहरमा क्यासिनोहरू व्यापारको अर्थ हो। तपाईं पोकर खोज्दै हुनुहुन्छ, ब्लेक, रूले, Baccarat वा pokies, तपाईं Melbourne मा एक खेल पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछ - र शानदार सेटिंग्स मा पनि। यद्यपि कम्पाइको असाधारण रवैया यसको समकक्षको रूपमा उदार रूपमा होइन अमेरिका र मकाउ, यो केहि उत्कृष्ट काम र एक पेशेवर भावना को लागी उनका लागि एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो।
3: भिवा लास वेगास!
यस तथ्यबाट टाढा नपुगेको छ कि वेगास जुआ एक जुवा राजधानी हो जुन यहाँ रहन छ - र यो कुनै पनि सूचीको शीर्ष पाँचमा हुन योग्य छ। तपाईले आशा गरेको हुन सक्छ कि वेगागाको संख्या नम्बर एक स्थानमा रहन सक्दछ, तर जुआको संसार बढ्दै जाँदा, जुन उपलब्ध छ को गुणवत्ता गर्दछ, र यसैले यो शीर्ष तीन रिक्त स्थानका लागि एक कठिन (र नजिकको) कल थियो। यदि तपाईं ग्लैमर चाहनुहुन्छ भने, glitz र धेरै कम्पोज्स, त्यसपछि वेगास तपाईंको लागि ठाउँ हो। शोहरू बेपत्ता भएका छन् र चौथो-चार घण्टाका खेलहरू क्रियाकलापबाट पूरा हुन्छन्। तथापि, केहि क्यासिनो थोरै थियौं र ग्राहकहरू कैसीनो खेल उत्साही भन्दा धेरै अवकाश निर्माता हुन्, यसको प्रसिद्धिको लागि धन्यवाद। तर यो वेगास हो, बच्चा - त्यसैले हामी वास्तवमा शिकायत गर्न सक्दैनौँ।
शायद तपाईं मध्ये केहि मा हामी लास भेगास मा मकाउ चुनिएको तथ्यबाट भ्रमित हुनेछ, तर धेरै कारणहरू छन्। पहिलो, मकाउ आफ्नो पुरानो दाइको तुलनामा कम व्यस्त भएको महसुस गर्दछ, र दोस्रोमा, यो संसारमा सबैभन्दा ठूलो क्यासिनोको घर हो - जसको अर्थ अपरिचित लक्जरी। जीवन शैली मकाउमा सस्ता छ, र यद्यपि यो कदम चाँडो र रोमाञ्चक छ, समग्र वातावरण वागागा भन्दा बढी रमाइलो छ। अझै विचलित भयो? अब उत्कृष्ट जुआ छुट्टीको गन्तव्यको रूपमा देखा पर्यो, हामी सिफारिस गर्दछौँ कि तपाइँ खेल वा दुईका लागि ठाउँ भ्रमण गर्नु अघि यो छुट्टी-निर्माताहरू र वातावरण परिवर्तनहरूसँग बढ्न सक्नु अघि।
र अंक एक स्थानमा ...
1: तपाईंको आफ्नै घर
शीर्ष स्थानमा अनलाइन क्यासिनो राख्नु भएको कारण सुविधा, छनौट, मूल्य र पहुँचको कारण हो। अनलाईन खेलको सुन्दरता यो हो कि तपाई आफ्नो मनपर्ने गेमहरू आफ्नो घरको सान्त्वनामा दिन-चार घण्टा सम्म यात्रा खर्चको थप लागत बिना। तपाईं $ 1 बाट बेक र तालिका सीमाको एक विस्तृत दायराको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ0.01 प्रति शर्त - यति कम खेलाडीहरू र उच्च रोलर्सहरू बीचको बीचमा सबैले आफ्नो बैंक्रोल सूट गर्न खोज्न सक्छन्। खेलहरूको दायरा असामान्य रूपहरू प्रदान गर्दछ, र प्रगतिशील खेलहरू केही सबभन्दा अमीरतम खरगोशहरू प्रस्ताव गर्दछ - र किनभने अनलाइन क्यासिनोहरू शारीरिक ठाउँको आवश्यकता पर्दैन, तपाईंलाई कहिल्यै खेलको लागि पर्खन सक्नेछैन। त्यहाँ कुनै नि: शुल्क पेयहरू छैनन्, तर तपाईं कम्पोन्टिसको लागि स्वैप गर्न कम् अंकहरू कमाउन सक्नुहुन्छ, र प्रचारको दायरा प्रभावशाली छ। यो धेरै प्रस्ताव संग, यो हाम्रो No1 हुनु पर्छ।
तिम्रो के बिचार छ? के हामीले यो अधिकार पाउ्यौं वा हामी पुरा तरिकाले चिन्ह छुटेको छौँ? हामी तपाईंको विचार जान्न चाहन्छौं।
क्यानाडामा अनलाइन क्यासिनो: UX किन महत्त्वपूर्ण छ?
शीर्ष जुक्तिहरू जिम्मेवार जुआको लागि
अफ्रीकामा सबैभन्दा ठूलो क्यासिनो अन्वेषण गर्दै
7 घातक (जुआ) सिङ्क
क्यासिनो एस एस र सी एस संग गिप्स गर्न को लागी
सामाजिक मीडिया मा वृद्धि मा आपराधिक गतिविधि
क्रिसमसले बुक अफ ओजको साथ स्पिन प्यालेसमा सुरु हुन्छ
दुई खेलको साथ विनलाई स्पिन गर्नुहोस्
कपडामा टेक - सबैभन्दा वास्तविक भावनामा पहिरन
यो 1891 छ संयुक्त राज्य अमेरिका of अमेरिका। Wrigley कम्पनी मा स्थापित छ शिकागो साबुन र बेकिंग पाउडर बेच्न। यो चिन्ग गम आउनुअघि यो 12 महिना हुनेछ। न्यू यर्कमा कार्र्नी हॉलसँग पीटर आइलीच ताचीकोभस्कीले आफ्नो भव्य उद्घाटन गरेको छ।
मार्क ट्वेन एक गिल्ड्ड युगको लेख: आर्थिक वृद्धि र उच्च वेतन अवधि। रेल्रोडहरू उद्योगको रिबन हो, ईरेग्रेसनले पश्चिमी राज्यहरूमा छिटो वृद्धिलाई इन्धन प्रदान गर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक दिमाग हो, युरोप छाया मा छोड दिए।
स्किस्केपर्स उच्च चढ्यो। आविष्कारक 500,000 र 1860 को बीच 1890 प्याट भन्दा बढीका लागी आवेदन गर्दछ। यो समृद्धि, शहरीकरण र आविष्कारको उमेर हो। यो स्लट मिसिनको जन्मको लागि उत्तम वातावरण हो।
1891 मा, Sittman र पिट कम्पनीले संसारको पहिलो मेकानिकल बेल्टिंग मिसिन सिर्जना गर्यो। ब्रुकलिन आधारित व्यापारले पाँच ड्रम / रिल पोकर मिसिन उत्पादन गर्यो।
प्रत्येक रील दस विभिन्न खेलकुदहरूको रेखाचित्र थियो। यो कुल मिलाएको 50 कार्डहरू जुन दुई कार्डहरू हटाइयो। यसैले मशीनहरु 'ड्रॉप-कार्ड' मिसिनहरु लाई उपनाम दिए गए थिए।
छोडिएका कार्डहरू सामान्यतया दसवटा बहादुरहरू र हृदयका जैक थिए। खेलाडीहरूले खरगोश रयल फ्लश हिट गर्न यो धेरै गाह्रो बनायो। मशीनहरु एक निकल एक स्पिन लागत। नयाँ कार्डहरू आकर्षित गर्न कुनै तरिका थिएन। जब रिल्स रोकियो - त्यो तपाईको हात थियो।
पुरस्कार पट्टीको विवेकमा थिए। कुनै पनि मेनु बाहिर आएन। तपाईले बारमैनलाई थाहा छ कि तपाईंले एक जोडीलाई मारेको छ र तपाईंको नि: शुल्क पेय, सिगार, वा जुन प्रस्तावमा थियो।
पोकर खेल धेरै लोकप्रिय थियो, न्यूयोर्क शहरमा लगभग हरेक पट्टी कम्तीमा एक मेशिन थियो र यो लामो समयसम्म उनीहरूले संसारको अनौपचारिक जुत्ता राजधानीको 3,000 माइल यात्रा गरेनन्: सैन फ्रान्सिस्को।
यो जंगली पश्चिम यसको नाममा रह्यो। सैन फ्रान्सिस्कोमा, त्यहाँ 3,117 इजाजतपत्र पट्टी भन्दा बढी थिए - हरेक 96 नागरिकहरूको लागि एक पट्टी। यो प्रसारले शहरलाई जूमिंग मशीन हट स्पेस बनायो।
अगस्टिनस (चार्ली) फाई प्रविष्ट गर्नुहोस्। फेई भाउरिंगन, बवेरिया मा फेरीस 2, 1862 मा जन्मिएको थियो। उहाँ 16 बच्चाहरूको सबैभन्दा सानो हुनुहुन्थ्यो र ब्रिटिश जहाजको किनारमा एक उपकरण निर्माताको रूपमा अपरिपक्व हुनुहुन्थ्यो।
एफई 1885 मा सैन फ्रान्सिस्कोमा आइपुग्यो र क्यानाडा क्यालिफोर्निया इलेक्ट्रिक वर्क्स संग एक नौकरी मिल्यो। काम पछि, उहाँले एक पेयको लागि टाउको उठाउनुहुनेछ र पूर्वमा पुग्ने नयाँ मेकानिकल पोकर मिसिनहरु द्वारा मोहित भयो। उहाँले आफ्नै बनाउन निर्णय गर्नुभयो।
1895 मा, उहाँले आफ्नो पहिलो मेशिन पूरा गर्नुभयो: सुरुमा फाई 4-11-44 नाम। मेशिन एक दादा घडी जस्तो देखिन्छ र लोकप्रिय लटरी खेल 'नीति' मा आधारित थियो।
नीति एक साधारण संख्या खेल हो जुन 1530 वरिपरि इटालियन लटरीमा मितिहरू। खेलाडीहरूले तीनवटा संख्या रोज्नेछन् - 'gig' को रूपमा चिनिन्छ - र 4-11- 44 धेरै व्यक्तिको मनपर्ने थियो। यी तीनवटा संख्या 'वॉशरमन गीग' को रूपमा चिनिन्थ्यो।
फेईको भाग्य शैली मेशिनको नयाँ पहलले अन्धविश्वासमा खरिद गर्यो, 4-11-44 $5खजाना संयोजन हुनु। खेल एक द्रुत हिट थियो। त्यहाँ नेभडामा फेल सङ्कलनमा राखिएको मेमोरीको एक मात्र जीवित उदाहरण हो।
सफलताबाट प्राप्त भएमा, फेले आफ्नो जागिर छोडेर पसल स्थापना गरे। 1896 र 1899 बीच, फाई उनको खेल विकास गर्न जारी राख्यो। जीत अझै पनि एक अभिनेता द्वारा भुक्तानी गरिएको थियो किनकी यो मिसिनहरु लाई बाहिर जाने को लागि (अझै सम्म) मकोनिकल संभव थिएन।
1896 मा, फाई तीन स्पिन्डलले5बाट 25 उपल्सबाट सम्मानित इनामहरू। भुक्तानी गरेपछि तीन कताई तीर समान संख्यामा उड्यो। एक वर्ष पछि, फाई एक्सएनएमएक्सएक्सले खेलाडीलाई आफ्नो दाई बढाउन अनुमति दिए - एक ठूलो प्लेआउटमा एक खेलमा छ छ उपेलहरू पक्कै उठाउँदै।
1897 मा फेल क्लोडोइकले स्लट्स जुआको अर्को पक्षलाई परिचय गरे, खेलाडिहरूलाई मनपर्ने रङमा दावी गर्न अनुमति दिए। दायाँ रङ खानुहोस् र तपाईले जित्नुहुन्छ। अन्तमा, पहेलीको अन्तिम टुक्रा साथ राखिएको थियो आगमन को 1898 फी लिबर्टी बेल कार्ड प्रतीकहरु संग।
यो मेशिन पहिलो स्लॉट मिसिन थियो जसले स्वचालित रूपमा पुरस्कार भुक्तानी गर्न सक्छ। यो हुनको लागि, फेले दुईवटा रिल्स हटाउनुभयो। नयाँ तीन रील मिसिनले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउनेछ।
अस्तित्वमा मात्र एक 1898 कार्ड लिबर्टी बेल मिसिन हो। फाई यो 1906 सैन फ्रान्सिस्को भूकम्पबाट सुरक्षित गरियो। अर्को वर्ष, फाईले कार्ड चिन्हहरू सट्टा चिन्हहरू, घोडाशोरहरू र रेजिमेन्ट लिबर्टी बेललाई बदल्नेछ।
नयाँ मेसिनले मानक सेट साढे वर्षको लागि स्वचालित स्लॉटको लागि सेट गर्दछ र पछि हरेक स्लॉट मिसिनको लागि आधार प्रदान गर्दछ। यो अर्को पटक ... थप।
फेरि जारी राखौंला…
मृत मानिसको हातको कथा
शीर्ष 10 पशु थीम्स स्लॉट खेलहरु
अनलाइन स्लॉट हामी खेल्न मन पराउछौँ
आभासी रियल्टी कैसीनो गेमिंग अन्वेषण
कैसीनो बाधाहरु को वर्णन
हामीले क्यासिनो चलचित्रहरू र क्यासिनो गीतहरू देख्नुभयो, तर टिभीको बारेमा के? धेरै लाख मानिसहरू विश्वभरि दैनिक रूपमा हेर्छन्, र लाखौं मानिसहरू हरेक दिन अनलाइन अनलाइन क्यासिनोमा गर्छन् - त्यसैले तपाईं त्यहाँ कुनै किसिमको क्रसर हुन चाहानुहुन्छ। हामीले जाँच गर्ने निर्णय गरेका छौं कि त्यहाँ कुनै पनि टिभी कार्यक्रमहरू जुआ र क्यासिनो खेलहरू हेर्न लायक छन्।
तपाईं धेरै खुसी हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ - वास्तविक टिभि कार्यक्रमहरू, उच्च स्टेक पोकर वा वेगास आधारित वास्तविकता देखाउने होइन - र धन्यवाद, गुणवत्ता उच्च छ र हँसिलो धेरै छन्। हामीले एक मनपराएका केही दिनहरू हाम्रो मनपर्ने शो कि सुविधा पोकर, घोडा रेसिंग, र हेर्दै गरेका छौं ब्लेक आदि (हामी जान्दछौ, यो एक कठिन जीवन हो !!) र हामीले यसलाई 10 को सूचीमा बिर्सेको छौँ। यी हाम्रो पहिलो पिक को पहिलो पाँच हो जुन हामी तपाईंलाई चाँडै सकेसम्म हेर्न सक्दछौं ...
10) सिम्प्सन - मैनेट्स को बहाव (2005)
डेन ग्री्याने द्वारा लिखित र मार्क किर्कल्याण्ड द्वारा निर्देशित
प्रकरण 357, सीजन 7
यो एपिसोड हो कि प्रोफेसर सुँगस्किन - एक काल्पनिक बेल्टिंग प्रणाली छ कि क्यारेक्टर को परिणाम को पूर्वानुमान को उपयोग को उपयोग गर्दछ अमेरिकी फुटबल खेलहरू। गृहमन्त्रीले, अवधारणा हुक, रेखा र सिंकको लागि पतन गर्छ, तर प्रोफेसर सुँगस्किने प्रणालीको सुझावहरूको एक धन्यवाद माफिया माफियामा एक सानो भाग्य हराउन समाप्त हुन्छ। ऋण फिर्ता गर्न, होमर स्प्रिंगफील्ड माफियालाई अनुमति दिनुपर्छ गोली मार उनको घर मा एक वयस्क फिलिम। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, मार्जको प्रतिक्रिया एक्लो हेर्नको लागि हो।
9) द अफिस (यूएस) - सुरक्षा प्रशिक्षण (2007)
बीजे नोवक द्वारा लिखित र हरिल्ड रमिस द्वारा निर्देशित
सीजन 20 को प्रकरण 3
हिट यूएस कार्यक्रमको तेस्रो सिजनमा देखाइयो, माइकलले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई साबित गर्न निर्णय गर्छ कि कार्यालयमा काम गर्दै एक गोदाममा काम गर्ने रूपमा खतरनाक छ। र पृष्ठभूमिमा, एक पक्षीय कथाको रूपमा, तपाईंले अफिस जीवनको साक्षी गर्नुहुँदा कार्यालयका कामदारहरू सबै कुरा र सबै कुरामा दावी गर्छन् - तपाईलाई दु: खी चालाक जुवा कथा ल्याउनुहुने छ जुन कार्यालयको जीवनको आजादीलाई पनि हाइलाइट गर्दछ र चीज मानिसहरू प्रयास गर्ने शर्तमा हुनेछ। र जित्नुहोला। साँच्चै उल्लङ्घन।
यहाँ एक टस्टर छ:
8) Derren ब्राउन - यस प्रणाली (2008)
च्यानल4मा देखाइयो, UK
यो जादू र भ्रम शो को लागि एक असामान्य एपिसोड हो, र डेरेन ब्राउन को एक न्यान हारने वाला घोडा बेटिंग प्रणाली बनाउन को लागी त्यो जनता, खडिया को दावा गर्दछ कि यो बुकिडीहरुलाई हरा सकते हो। खयाशा प्रणाली पछ्याउँदै, हामी उसलाई देख्छौं भाग्यशाली लकीर पाँचवटा सफल जीत। उनको छठे शर्त बाणको होस्टबाट केही कडा कारणले ठूलो हुन्छ - र घोडा हराउँछ। तर, निस्सन्देह, डेरेन आफैलाई साबित गर्दछ - सधैं! - पहिले नै हस्तक्षेप गरी, विजेता घोडामा भविष्यवाणी र बेटिंग। एक डबल व्हाइटको रूपमा, समग्र विचार तोड्न र धोखाधुरी पिरामिड योजना पछि सोच प्रकट गर्नु हो।
तपाइँ एपिसोड यहाँ YouTube मा हेर्न सक्नुहुन्छ।
7) मित्रहरु - द द टप नाइट (1999)
स्कट Silveri द्वारा लिखित र डेविड Schwimmer द्वारा निर्देशित
प्रकरण 127, सिजन 6
तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहोस् वा उनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ, यो एपिसोड कमेड लिखितमा उत्कृष्ट कृति हो भनेर इन्कार नगरेको छैन - र अभिनय। कार्ड गेम कप तारा हो आकर्षण, चंदलर द्वारा आविष्कार गरेको एक हास्यास्पद खेल को लागि ताकि उनी आफ्नो मित्र जोई केहि नगद संग मदद गर्न सक्छन्, बिना जोई एक दान मामला को रूप मा महसूस गर्न सक्छन्। तपाइँ नियमहरू प्राप्त गर्नुहुन्न, र ठीक छ, यो वास्तविक खेल होइन - तर अवधारणा शानदार छ र यो पूर्ण रूपमा क्रियान्वित छ। यो हास्य टिभी प्रतिभा हो।
6) कालो पुस्तकहरु - एक सानो फ्लुटर (2004)
डिलन मोरन, केविन सिसिल र एन्डी रिल द्वारा लिखित
सीजन4को प्रकरण 3
पंथ अंग्रेजी कमेडी को यस उल्लङ्घन प्रकरण मा, प्यार योग्य रोमन ब्राउन ब्लैक परम अंग्रेजी घोडा दौड मा एक सानो जीत को पछि रेसिंग को लागि आदी हो जाता है: द ग्रैंड नेशनल। एपिसोड एक उल्लङ्घन उच्च स्ट्याक पोकर गेमको साथ समाप्त हुन्छ, पनीर ग्याङ्गस्टर शैली डिभिजनको साथ पूरा हुन्छ, जसमा फ्रान्सेली ब्याड बर्नार्ड फेरि एकपटक बाहिर जान्छ - अत्यधिक सिफारिस हेर्न। यो एपिसोड यहाँ हेर्नुहोस् - तर हामी तपाईंलाई चेतावनी दिन्छौं, तपाईं पूर्ण श्रृंखला हेर्न समाप्त हुनेछौं!
त्यसोभए, तपाईं अहिलेसम्म के सोच्नुहुन्छ? के यसले तपाईंको आँखामा ठूलो हिट वा मिस देखाउँछ? कुनै पनि नयाँ तपाईँ निश्चित हुनुहुन्न? हाम्रो शीर्ष पाँच चाँडै पछ्याउनेछ ...
बैंक कार्डबाट बिटकोइनमा
एलसीन्स अनलाइन अनलाइन क्यासिनो को जोखिम
प्रसिद्ध हस्तियाँ र उनीहरूको मनपर्ने कैसीनो खेलहरू
कैसीनो समीक्षा लेखन को अप्रत्याशित लाभ
अंकहरू बगाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि: यदि तपाईंले कागज 45 समयको टुक्रा टुक्रा गर्न सक्नुहुन्छ भने, यो चन्द्रमा पुग्नेछ। क्यासिनो सबै संख्याहरू हुन्: ठूला संख्याहरू, साना संख्याहरू, जित्ने संख्याहरू। जुम्लर र घर दुवैको लागि प्रत्येक तालिका वा कार्ड गेमको सांख्यिकीय जोखिम छ।
त्यसोभए, जब न्यु जर्सीको दादी पट्रीकिया डेमोरोले पासा पकडे क्रेप्स मई 23 मा बोर्जटा होटल कैसीनो र स्पा को टेबल को तालिका, 2009, त्यो शायद शायद धेरै कम विचार थियो कि उनि को बाधाओं को हरा देंगे ... यसको लागि इंतजार ... 3.5 अरब मा एक।
केवल त्यो परिप्रेक्ष्यमा राख्न। राष्ट्रपति को बिरुद्ध को बाधाहरु संयुक्त राज्य अमेरिका 10,000,000 मा एक हो बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिहे गरें।
यस तथ्यले कि श्रीमती डेमोरोको पासामा अचम्मलाग्दो चार घण्टा र 18 मिनेटको लागि पकड्न सफल भए र उनलाई अविश्वसनीय 154 पटक लुकाएर सात हप्तामा रोक्न ... सही तरिकाले एक शब्दको लागि शब्द प्रयोग गर्न ... अविश्वसनीय।
सात घामको साथमा दुईवटा रोल गर्ने बाधाहरू छ। सिद्धान्तमा, कम्तीमा एक चोटि सातवटा पासाको सातवटा रोल साथ। यो पासाको जोडीको लागि सबैभन्दा सामान्य संख्या संयोजन हो (1 + 6,2+ 5,3+ 4,4+ 3,5+ 2,6+ 1)।
बाधाहरू आफैलाई परीक्षण गर्नुहोस्। दुई पासा र रोल गर्नुहोस्। संभावनाहरू छन्, तपाईंले सात चाँडै छिटो हिँड्नु हुनेछ। यो सरल व्यायामले तपाईंलाई कसरी उल्लेखनीय डेमोरोको प्रदर्शन प्रदर्शन गर्न सक्छ।
रोलिन, रोलिन ', रोलिन' ...
र यो डेमोरो पनि एक पेशेवर क्यासिनो खेलाडी थिएन जस्तो छैन। त्यो अटलांटिक सिटीमा, बोर्जता होटल कैसीनो और स्पा, अपने दोस्त जॉन कैप्रा के साथ यात्रा की थी क्योंकि उन्होंने दोनों तालिकाओं में थोड़ी सी कार्रवाई की।
डेमोरावले चीज सुरक्षित खेल्न र आफूलाई बोर्जताको धेरै पैसाको स्लॉट्स मध्ये एक माथि राखे। त्यसोभए, उनको साथी जॉनले आफ्नो भाग्य तीनवटा कार्ड पोकरको केहि हात खेल्न प्रयास गर्ने निर्णय गरे।
केही घन्टा पछि, 8pm मा, डेमोरो ऊब थियो र उनको मित्र भेट्न गए। उनी पोकर कोठामा थिए - सीधा तालिकाको विपरीत। डेमोरालोले पहिले नै एक पटक क्रेप्स खेलेका थिए र उनको खेलमा सुधार गर्न चाहन्थे। तिनीहरूले आफ्नो भाग्य रोल र परीक्षण गर्ने निर्णय गरे।
बोर्जटा में 14 तालिका हैं। 8.13pm मा, डेमोरोले खेलमा $ 100 को लागि खरीद गर्यो र सुन्तला रंगको पासालाई सौंपयो। यो उनको शूटर शत्रु थियो। उनले रोल सुरु गरे।
सांप आँखा र स्टिकम्यान
क्रेप्स शुरुवातको लागि भ्रामक खेल हुन सक्छ। आओ बेल्ट, हार्डवे, भित्र संयुक्त संयोजन। यो सबै र सांप आँखा, एक स्टिकमैन, पास लाइनहरू, बक्सम्यान र शूटर। यदि तपाईंले पहिले अक्षरहरू खेल्नुभएको छैन भने, तपाईंले समय लिन र सिक्न सक्नुहुन्छ।
क्रेप्सको खेल प्रारम्भिक रोलबाट सुरु हुन्छ - 'आओ आउट' रोल भनिन्छ। यो या त चार, पाँच, छ, आठ, नौ, वा दस हो। डेमोरोले आठ वटा रोल गरे। यस बिन्दुमा खेलाडीहरू तालिकामा पर्छन्।
डेमोरो रोलियो ... र लुकायो ... र लुकायो। त्यतिबेला उनी लम्किए र सातमा हिउँथे, यो अर्को दिन थियो। चार घण्टा र 18 मिनेट बितिसकेको थियो र पासाहरू 154 पटक लुकाइएको थियो।
डेमोरालोको लकीरबाट पहिले, क्रेप्स सिंहासनमा केही दावी थिए। लास वेगास मा, एक 'पुरुष' कप्तान को रूप मा जाना 147 मा 2005 रोल को रूप मा प्रबंधित। लास वेगासमा पनि स्टेनली फ्युजेकले कैलिफोर्निया होटेलमा तीन घण्टा छैट मिनेट लिककलाई प्रबन्ध गरे। डेमोरोले दुवैलाई पराजित गर्यो। (बीटीवा - सात मारेर पहिले रोल को औसत रकम)।
डेमोरोले यसो भने: "म रोल गरें र केवल चार घण्टा आउँदो रहेछ र म खेलिरहेको थिएँ जब म संग गए। अधिकांश मानिसहरू त्यहाँ त्यहाँ साँच्चै उत्साहित थिए किनभने मैले उनलाई राम्रो किस्मत ल्याएको थिएँ।
"त्यहाँ एक महिला थियो र हामी एकअर्काको आँखा समात्न थाले। उनले मलाई मुस्कुराए, र म मुस्कुराए र भने, 'मलाई थाहा छैन कि खेल खेल कसरी जान्छ।'
डेमोरोले कहिल्यै थाहा पाएको छैन कि त्यो त्यो शुभ रात्रीमा जित्यो तर उनको जीत उच्च $ 100,000s मा अनुमान गरिएको छ।
"यो वास्तव मा एक महान तालिका थियो, सबै देखि महान भेब्स," उनले भन्यो। "मेरो इतिहासको अंश बन्न उत्साह थियो। मैले धेरै समय बोर्जटा भ्रमण गरेको छु र म सधै धेरै रमाइलो छ। "
उनको विजेता लकीर पछि, होटल डेमोरो र उनको मित्र डोम पेरिग्नन, रात्रिभोज र एक मानार्थ सुइट को उपचार गरे। राम्रो काम, प्याट्रिकिया ...
अनलाइन क्यासिनो खेलहरू चलाउन उत्तम गेमिङ फोनहरू
प्रत्येक स्टार वार्स फिलिम सर्वश्रेष्ठ भन्दा फरक हुन्छ
चिप्सहरू लिनुहोस्: 10 हिस्ट फिलिमहरू जुन घरबाट हिँड्छन्
ईएसपोर्ट्स अर्को ठूलो कुरा हुनेछ?
केआर क्याचर जुआ लत छ?
Brinner को लागि spelautomater: मलाई लाग््छ
क्याल्विन अय्रे स्टोरी
हाम्रो नायक, बेरोजगार आप्रवासी र पागल आविष्कारक चार्ल्स फेईले लगभग पाँच वर्षको लागि मेकानिकल बेटिंग मशीन बनाउँदै गरेको छ। उहाँले आफ्नो जागिर छोड्नु भएको छ र व्यापार बढ्दै गएको छ। प्रत्येक उत्परिवर्तन संग, उनको उत्पादन मा सुधार जारी छ।
खेलाडीहरूले अझ बढी जित्न अधिक शर्त लिन सक्छन्, उनीहरूले 'शर्त छनौट' र विशिष्ट रंगहरू चलाउन सक्छन्। उनको अन्तिम वृद्धि: यो यन्त्रले अब स्वचालित रूपमा यसको winnings को भुक्तान गर्न सक्छ। त्यहाँ एक परिचालक को रोजगार गर्न वा आफ्नो काम बाट एक व्यस्त बर्मन विचलित गर्न को आवश्यकता छैन।
दुई कम्पनी, तीन सही छ
मेकानिकल भुक्तानी सक्षम गर्न विजेता संयोजनहरूको संख्या घटाउन आवश्यक छ। यो गर्न को लागि, उनले पोकर जीत तालिका तालिका प्रारूप को उपेक्षा गरे, जो पांच रील को आवश्यकता हो, र यसको बजाय तीन रील को उपयोग गरे। यो उत्पन्न कम विजेता संयोजनहरू तर स्वचालन व्यवस्थित बनाइयो।
अब फाईले अब पोकर हातहरू विजेता संयोजनको रूपमा प्रयोग गरिरहेको थिएन, खेलकुद आइकन इमेजोग्राफी को विशेष रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक थिएन। कार्ड सूटमा, फेलले घोडाशोरहरू, ताराहरू, र टुक्रा लिबर्टी बेलहरू थप्यो। छान्न सकिने संयोजनहरूसँग कुलमा 20 प्रतीकहरू।
यो कम्पैक्ट कम्पैक्ट र बलियो थियो: एक पीतल फ्रेम द्वारा प्रबलित पानामा धातु, रित्तो र एक साथ मिलाएर चार बलियो खुट्टामा उभिए। यो 1899 थियो। अर्को 50 वर्षमा आधी भन्दा बढी एक लाख 'बेल' मिसिनहरू निर्माण गरिनेछ।
अहिलेसम्म, फाईले साना वा कुनै प्रतियोगिता गरेका थिए। बार्स र जुआ ठाउँहरू जसले खेलाडीलाई नयाँ लिबर्टी बेल स्लट खेल्ने मौका प्रदान गर्न चाहन्थे त्यो फाई ए 50% कमीशन दर तिर्न थियो। फाईले सबैसँग वितरण वा निर्माण अधिकार साझा गर्नबाट निस्केको।
एक व्यापार जैकपोट
तथापि, फाई मागसँग राख्न सकेन र - 1907 मा - उनले मिल्स नोभेलीटी कम्पनीसँग मिलेर।
मिल्स नोलालिटी कम्पनी एक थियो शिकागो-बस व्यवसाय, निर्माण सिक्का संचालित वेंडिंग मिसिनहरु। यसले एमबीएम सिगार विन्डिङ कम्पनीको रूपमा व्यापार गर्न थाल्यो। 1897 मा, नयाँ गेमिंग मिसिनहरु को लोकप्रियता मा पकडने, कम्पनी ने मिल्स ओल - एक ईश्वरीय कैबिनेट स्लट मिसिन र एक व्यावसायिक सफलता को उत्पादन गरे।
1898 मा, संस्थापक मोर्टिमर मिल्सले व्यापारको नियन्त्रण गर्ने चासो बेचेको उनको छोरा हर्बर्टमा जसले व्यापारलाई मिल्स नोभेलिटी कम्पनीलाई नामकरण गर्यो। 1907 मा फेईसँग हेरबर्टको सहयोग मिल्स लिबरटी बेलको परिणाम हो। मिसिनको आधारभूत डिजाइन अझै पनि स्लटहरूमा प्रयोग गरिएको छ।
1909 मा, सैन फ्रान्सिस्कोले स्लॉटलाई प्रतिबन्ध लगायो। त्यहाँ शहरमा 3,300 मिसिनहरू थिए। कानूनको वरिपरिका लागि, फाई र तिनका प्रतियोगीहरूले ब्याक टाइम गरे र - एक पटक फेरि उत्पादित मिसिनहरू पेय र सिगारमा भुक्तान गर्ने सिक्का स्लॉटहरूसँग। अधिकांश निर्माताहरूले पनि अधिक उदार शिकागोमा स्थानान्तरण गरे।
नैतिक अल्पसंख्यक कोष को लागी अर्को प्रविधी, मिसिनहरु को चीइंग गम डिस्पेंसरहरु को नामकरण र सूट प्रतीकहरु देखि फलहरु को पहियों मा प्रतीकहरुलाई बदलन को रूप मा बदलन गरियो।
यिनले गममा साँच्चै भुक्तान गरे र गमको स्वाद अक्सर जीत रेखा द्वारा निर्धारण गरिएको थियो। यो चेरी र तरबूज को प्रतीक कहाँ देखि आयो। चाइंग गमको प्याकको छवि क्लासिक BAR प्रतीकको उत्पत्ति हो।
1910 मा, मिल्स नोभेलीटी कम्पनीले यसको सबैभन्दा सुव्यवस्थित मिसिनको उत्पादन गरेको थियो, जसमा एक gooseneck सिक्का जमा स्लॉट र रिल्समा फल चिन्हहरू समावेश भए तापनि प्रत्येक मिसिनले 100 पाउण्ड भन्दा बढि बढ्यो, एक्सएनएमएक्सक्स निर्मित भयो र व्यवसाय अब अन्तर्राष्ट्रिय बिक्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री भएको थियो। युरोप।
1916 मा, मिल्सले स्लट मिसिनमा यसको अन्तिम मुख्य योगदान दिए: 'खरगोश'। खेलाडीहरूले अब मेशिनलाई पूर्ण रूपमा खाली गर्न सक्दथे, यदि तिनीहरूले प्रतीकहरूको सही संयोजनलाई हिर्काउँछ भने।
1919 मा निषेध संग, शराब को खपत र आपूर्ति अवैध बनाइएको थियो संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध 1933 सम्म जारी भयो। स्लॉट मिसिनहरू स्पाइकेसीहरूमा समाप्त भए र फिर्ता नगद भुक्तानीहरू फिर्ता गरियो। प्रबन्धकहरूले सोचेका थिए कि तिनीहरूले पहिले नै शराबको बिक्रीको साथ कानुनी तोडफोड गरेका थिए किनकि नगद भुक्तानी फिर्ता नगर्दा किन।
मशीनहरु लाई पनि शान्त र हल्का बनाइयो, काठ मा निर्मित घंटीहरु संग निर्मित। नेवाडामा, 1931 मा, जुआलाई कानुनीकरण गरिएको थियो। Bugsy Siegel पहिलो कैसीनो मालिकहरु मध्ये एक खेल खेल्न को लागी थियो, र पौष्टिक लस भेगास फ्लेमिङो हिल्टन को कैसीनो फ्लोर मा रोमांचक नयाँ मिसिनहरु लाई जोड दिए।
जसको लागि यो सबै शुरू भयो। जनवरीमा, 1944, चार्ल्स फेले आफ्नो कम्पनीलाई उनको लामो समयका प्रान्तमा बेचे। उनले 50 वर्षको व्यापारमा बिताएका थिए। त्यस समयमा, उहाँले कहिल्यै सुधार, विकास र आफ्नो मशीनहरू विकास गर्न रोक्नुभएन। उसले नौ महिना पछि 82 को उमेरमा मर्यो।
1950s को अन्त सम्म, यांत्रिक युग लगभग एक अन्त मा थियो र बिग बर्था उनको इलेक्ट्र्रो मैकेनिकल पहिलो पल्ट को बारे मा थियो। आठ रील्स, 20 प्रतीक प्रति रिल, र $ 150,000 यदि तपाईं उसलाई स्वामित्व चाहानुहुन्छ।
उच्च खरिदहरू, बहु सिक्का खेल, बाली ... पैसा हनी ... तल नदेख्ने आशा, र 500 सिक्का अनावश्यक वेतन बाहिर। तेस्रो भागमा अर्को चोटि विद्युतीय उत्पादनमा राख्नुहोस्।
वेगासको फ्रेग्रेन्ट बोलिँदै
अनलाइन बैंकिंग विधिहरूको विकास
ब्रान्ड मूल: Budweiser
लल्किन कफी ग्लोबल क्याफे संस्कृतिमा सबैभन्दा ठूलो ब्रान्ड हुन जाँदैछ?
हामी वेगास र अनलाईन मा धेरै ठूलो खजाना वेदना धेरै कथाहरु बारे सुन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ ज्याकपोट जीतहरु बीच एक लोकप्रिय आवर्ती संख्या जस्तो देखिन्छ, जसको आंकडा $ 2.4 मिलियन नियमित रूपमा पपअप भएको छ। यो आवर्ती संख्या जेबमा निफ्टी रकम छ, र धेरैको जीवन परिवर्तन भएको छ। सम्भवतः सबैभन्दा प्रसिद्ध मामला जेनिफर लोपेज मा छ - यद्यपि कि यो उनको जीवन परिवर्तन भयो, हामी धेरै शंका गर्दछौं। यहाँ केही केहि बारेमा जानकारी छ जसले यो राम्रो सानो कमाई जेब गरेको छ ...
J-lo को माम (अधिक?) लाखौं हुन्छ
सर्वोत्कृष्ट ज्ञात मामलाको साथ सुरू गरौं ... जे-लो हालै यो रातको कार्यक्रममा यो कथा रिलीय भयो, व्याख्या गर्ने कि उनको माम बर्गाटा कैसीनोमा अटलांटिक शहरमा खेलिरहेको थियो कि कसरी उनीहरुले प्रगतिशील ख्याति हासिल गरे। कथा यो हो कि उनले आफ्नी छोरीलाई उनको खबर बताउन फोन गरे, सुरुमा शांत र त्यसपछि विवरणहरु लाई उनको फेफड़ों को माथि मा चिल्ला दिए (मलाई लाग््छ कि हामी पनि चिल्ला रहयो!)। शो को मेजबान, जिमी फलोन ले $ 200 को आफ्नो पिता संग अटलांटिक सिटी मा त्यहि राती संग जीत को आफ्नो कहानी को साझा गरेको छ कि त्यहि राति त्यहि रात को भाग्य स्लट्स मिसिन को व्हील खेलिन्छ। उनीहरूले उनीहरूको जित जितेर जितेपछि खुसी भएका थिए जब उनी न्यूयर्क पोस्टमा अगाडिको पृष्ठ हेडलाइनमा उभिएका थिए, भन्छन् कि जे-लो म्यामले फर्च्यून स्लॉटको व्हीलमा ठूलो हावा दुर्घटना पारेको थियो - तिनीहरू एउटै मेसिन थियो। खेलिरहेको! यहाँ जेनिफर लोपेजसँग द टुइट शोमा सबै कुरा बताइएको छ।
हजुरबुबाले एक खजानालाई बिर्सेका छन् जसले 20 वर्षको लागि भुक्तानी नगरेको छैन
एक $ 2.4 मिलियन क्यासिनो खरिद जीत को अर्को उदाहरण न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमरीका, लिंडा एन्ड वाल्टर मिस्को, जो गत वर्ष (2014) मा एमजीएम ग्रैंड, वेगास मा खेले को मध्य युगल युगल हो। उनीहरूले कैसीनोको मूल प्रगतिशील स्लटमा शेरको साझेदारीमा आफ्नो हात प्रयास गर्ने निर्णय गरे, जसले 20 वर्ष भन्दा बढीको लागि यसको खजाना तिर्न सक्दैन। यो एमजीएम क्यासिनोमा सबैभन्दा प्रसिद्ध स्लट मिसिन हो, र हरेक दिन प्रत्येक दिन पाँच मिनेटमा प्ले गरिएको छ। वाल्टर र लिंडाले $ 100 लाई कुल मिलाएर आफ्नो ठूलो भुक्तान बगेको छ। एक साक्षात्कार पछि, तिनीहरूले यसो भने कि उनीहरूले उनीहरूको शिक्षाको माध्यमबाट आफ्ना पाँच जना पोर्चुगल राख्न सक्दछन्।
एक युवकले $ 314 मिलियनलाई हराउछ तर अझै लाखौं बन्छ
लटरी गेमहरूमा जाने, एक 32 वर्षीय व्यक्ति ट्रिक ह्वा नाम भएको व्यक्तिले 2.4 $ लोटरको पावरबेल सेक्शनमा $ 2013 लाख जित्यो - जसले केवल $ 314 मिलियन को खजाना सम्झ्यो। तथापि, जब तपाईका पाँचवटा संख्याहरु - 1, 17, 25, 37, र 44 ले तपाईलाई साँच्चै माफी मार्न सक्नुहुन्न भने, उनीहरुलाई तत्काल एक लाख डलर बनायो। ह्वा दक्षिण पेसेनाको एक ग्याँस स्टेशनमा 'द्रुत पिक' प्रणाली प्रयोग गरेर आफ्नो टिकट खरीद गरेपछि ठूलो जीतले हल्लायो, ​​र यद्यपि उनले उनीहरूको सबै भन्दा ठूलो हावाको बिचमा छुटेको थियो, उनी उनी नयाँ युवतीको स्थितिमा खुसी थिए र यसो भनिन्- " र उनको श्रीमती घर किन्न। एक राम्रो घर हो, हामी थप्न सक्छ! तपाईं यहाँ एक प्रेस विज्ञप्ति मा उनको जीत को बारे मा अधिक पढ्न सक्नुहुन्छ।
खेलहरू जो $ 2.4 मिलियन खपत (र माथि) अनलाइन प्रस्ताव गर्दछ
यदि तपाइँ खेल खेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि एक विशाल ज्याकपोट जित्नको लागि प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ त्यहाँ धेरै एक्सन स्लट मिसिनहरू छन् जुन प्रगतिशील ख्यातिहरू छन्, जुन $ 2.4 मिलियन खरिद राशि (र बिच्छेदन) सम्म पुगेको छ। समुद्र तट जीवन (हालको समयमा $ 3.3 मिलियन भन्दा बढी) र सुनको रैली, उनीहरूको सहर-आरोही खरिद रकमको कारणले गर्दा दुईवटा लोकप्रिय अनलाइन स्लट खेलहरू हुन्। गोल्ड रैली बाट उच्चतम भुक्तानी अनलाइन स्लॉट मिसिन हो Playtech, कुल मिलाएर $ 9.1 मिलियन संग भुक्तानी बाहिर, मार्वल अल्ट्रा पावर र नजिकको पछि लागे जादू स्लॉट, प्रत्येक $6मिलियन भन्दा बढी भुक्तानीका साथ खेलाडीहरूको लागि।
मोबाइल गेमिङ अर्को ठूलो कुरा हो
मोबाइल र अनलाइन क्यासिनोको अवधारणा
एआर र वीआर बीचको भिन्नता
कसरी नकारात्मक प्रगति प्रक्रिया प्रणाली काम गर्दछ
लाइभ डेलर कैसीनो प्रगति
एन्ड्रोइड प्रभाव पर गेम
यो आधुनिक समय हो। संसार बढ्दै छ। लस भेगासमा क्यासिनो व्यवसाय फस्टाउँदैछ र शहरले 'विश्वको मनोरञ्जन राजधानी' को रूपमा यसको मुकुट कमाउन व्यस्त छ।
चूना पैक सिनाट्रा, डीन मार्टिन, र स्यामी डेभिस जुनियरको अदालत समातेर र ग्लैमरलाई पट्टीमा पुर्‍याउँदै जोसिलो छ। क्यासिनो भुइँमा, यो बिजुली हो - शाब्दिक रूपमा। मेकानिकल मेसिनहरू गइसकेका छन् र इलेक्ट्रोमेकानिकल मोटर टाढा जाँदै छ।
स्लट मेसिनको लागि, 'एक सशस्त्र डाकु' को 'एक हात' अब पूर्ण रूपमा सजावटको लागि हो। ती दिनहरूका लागि यो पुरानो सहारा हो जब भारी रीलहरू स्पिन गर्न शारीरिक प्रयास आवश्यक थियो। अब तपाईंले गर्नुपर्ने सबै बटन थिच्नु हो।
1960s मा ठूलो खेलाडी Bally गेमि G छ। 1932 मा स्थापित, शिकागो आधारित व्यवसाय, संस्थापक रेमंड मोलोनीको नेतृत्वमा, चाँडै बजार नेता बन्यो, मेकानिकल स्लट, भेन्डि,, र पिनबल मेशिनहरू निर्माण गर्दै।
मोलोनी 1958 मा मरे र व्यापार डगमगायो। एक्सएनयूएमएक्समा, यसलाई लगानीकर्ताहरूको समूहले किनेको थियो र एक्सएनयूएमएक्समा यसले मनी हनी भनिने विश्वको पहिलो इलेक्ट्रोमेकानिकल स्लट मेसिनको सुरुवात गर्‍यो।
तीन रील मेशीन पूर्ण स्वचालित थियो र एक इलेक्ट्रिक हप्पर थियो। यसको मतलब यो सिक्काको धेरै ठूलो मात्रामा पकड गर्न सक्दछ जसले पछि जीतलाई बढी शानदार बनाउँदछ। 200 सिक्काको ज्याकपट ट्रिगर भयो जब तपाईं तीन इमिनामिनिस 'मनी हनीज' लाई लाइनमा राख्नुहुन्छ।
यो 'मसिनले लास भेगास परिवर्तन गरेको' थियो। स्लटमा अब ध्वनि प्रभावहरू थिए। तिनीहरू एक बटनको साधारण पुशको साथ अपरेट गर्न सकिन्छ र ज्याकपोटहरू गम्भीर हुन थाले। लास भेगास ज्याकपॉटमा हिर्काउने सपना - र केवल एक स्पिनको साथ तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्ने - अब वास्तविक थियो। पनि Drifters मनी हनी ब्यान्डगागन मा मिल्यो।
1960s को अन्त्य सम्म, स्लीट बजारको बल्लीको प्रभुत्व लगभग पूरा भयो, नेभाडामा सबै स्लटहरूको एक 90% सेयरको साथ। कम्पनी सार्वजनिक भयो र यसको सानो प्रतिस्पर्धीहरु निगल गर्न शुरू भयो। एक्सएनयूएमएक्समा, बली न्यू योर्क स्टक एक्सचेन्जमा व्यापार हुने पहिलो खेल कम्पनी थियो।
क्यासिनो तल्लामा, कार्य विकसित र तातो गर्न जारी रह्यो। स्लटमा अतिरिक्त रीलको अर्थ ठूलो ज्याकपट्स, साथै प्रत्येक रिलमा प्रतीकहरूको संख्या बढेको (अधिकतम सेट 25)। दांव पनि बढाइयो। खेलाडीहरू अब रीलहरूको एकल स्पिनमा $ 100 सम्म जुवा खेल्न सक्दछन्। जोखिम बढी थियो तर इनाम थियो।
बल्लीमा कार्यरत नर्वेली गणितज्ञ ईन्ग टेलनेसलाई साँच्चै खाल्डा पचाउन र स्लटहरूलाई जीवन परिवर्तन गर्ने ज्याकपट्स भुक्तान गर्न सक्षम पार्न। उसले विजयी लाइनहरू उत्पन्न गर्न एक अनियमित संख्या जनरेटर प्रयोग गरेर यो गर्नुभयो।
नम्बर क्रन्च गर्दै
यहाँ वर्णन गरिएको छ: तीन रील स्लट मेसिनको कल्पना गर्नुहोस्, प्रत्येक रीलमा 12 प्रतीकहरूको साथ। सांख्यिकीय रूपमा, एक प row्क्तिमा तीन चेरीमा हिर्काउने अनौठो 1 मा 1,728 हो। कुनै घर लाभको साथ, एक N 1 शर्तले तपाईंलाई $ 1,728 को ज्याकपॉट जित्न सक्दछ (ज्याकपट सायद घरको बिगको साथ $ 1,700 हुन सक्छ)।
यस ज्याकपॉटलाई बढाउने एक मात्र तरीका थप समस्याहरू बढाउनु हो, थप रिल थपेर (ज्याकपोट अब लगभग $ 20,000 हो) र थप प्रतीकहरू। यो मानिन्छ कि मेशिनको केवल एक जीत लाइन छ। वास्तविकतामा, त्यहाँ धेरै छन् जसले jackpot लाई थप कम गर्दछ।
समस्या यो हो: खेलाडीहरूलाई ठूलो ज्याकपॉटको प्रस्ताव गर्न, तपाईंलाई प्रत्येक रिलमा दर्जन रिल र 100 प्रतीकहरूको साथ एउटा मेशिन चाहिन्छ।
Telnaes को प्रतिभा एक अनियमित संख्या जनरेटर प्राप्त गर्न जीत निर्धारण गर्न र रीलहरू मात्र प्रतिनिधित्व गर्न को लागी थियो। अब विजयी बाधा क्यासिनो द्वारा सेट गर्न सकिन्छ। अपरेटरले निर्णय गर्न सक्दछ कि तीन चेरी केवल एक लाख मिलियनमा एक पटक हिट हुनेछ। यो एक मिलियन डलर ज्याकपट सक्षम गर्दछ र मेशीन अधिक आकर्षक बनाउँछ।
यसले काम गर्यो। 1990 द्वारा, स्लट मेसिनहरूले लास भेगासमा खेल राजस्वको दुई तिहाई हिस्सा लिए। यो एक आकृति हो जुन आज पनि उस्तै छ। सबै क्यासिनो फ्लोर स्पेसको लगभग तीन क्वार्टर स्लटहरूको आवाजको आवाजले भरिएको छ।
अर्को हप्ता, हामी हाम्रो स्लटको बारेमा हेरौं र क्यासिनो फ्लोरमा के भइरहेको छ र भविष्यमा एक सशस्त्र डाकुका प्रेमीहरूको लागि के हुन सक्छ भनेर हाम्रो इतिहास समाप्त हुन्छ।
जुन 25, 2019 / जैकपोट सिटी समाचार र कैसीनो बोनस
संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय संग्रहालय
क्यासिनो अनुप्रयोगहरू सुरक्षित गर्न सुरक्षित छन्?
मार्च 7, 2019 / समाचार
के तपाईं एक कैसीनो रोब गर्न सक्नुहुन्छ?
पालतू मित्रतालय कार्यालयहरू?
एक पल्ट एक पल्ट, हलिवुड ए-लिस्ट सितार जो केहि गंभीर येन वा युआन कमाने को चाहान चाहते थियो उनको गोपनीय रूप देखि उनको निजी विमानहरु र एशिया को टाउको मा हॉप गर्नेछन्। ज्ञानमा सुरक्षित राख्नुहोस् कि उनीहरूको गोप्य सुरक्षित थियो, तिनीहरूले गर्थे गोली मार एक जापानी वा चिनियाँ कम्पनीको लागि एक विचित्र व्यापार, जेभले ठूलो शुल्क जेब, र चुपचाप घरको टाउको।
आज, हामीसँग इन्टरनेट छ। यसको मतलब यो संसार टोक्यो - वा मकाउ मा रह्यो अब धेरै सानो ठाउँ हो र टोकियोमा के हुन्छ। यो YouTube मा समाप्त हुन्छ।
मकाउ विश्वको सबैभन्दा जुवा गन्तव्य हो र लेस वेगास र अटलांटिक सिटी दुवै भित्तामा - व्यक्तिगत र संयुक्त। वास्तवमा, मकाउ काउन्टीहरूले 44.1 मा $ 2014 बिलियन को राजस्व उत्पन्न गरे। त्यो लास वेगासमा सिर्जना गरिएको पैसा भन्दा बढी भन्दा बढी पटक हो। मकाउ शक्तिशाली छ। यसले कुनै पनि र सबै प्रतिस्पर्धालाई पराजित गर्दछ।
र यो यो शिकारी हो जसले मकाउ - विशेष गरी चाँडै नै खोलिएको स्टुडियो सिटी रिजर्ट र क्यासिनो सक्षम पार्छ - यो सुरूवात को लागी प्रवर्द्धन गर्न विश्वको सबैभन्दा उल्लेखनीय चलचित्र निर्देशक भर्ती भर्ती गर्न।
जनवरीमा, एक 60 दोस्रो ट्रेलर, मार्टिन स्कोरसेन्स द्वारा निर्देशित र अभिनेत्री रबर्ट डी नेरो, लियोनार्डो डि क्यापियोरी, र ब्राड पिट पूर्वावलोकन गरिएको थियो। विगनेट पूर्ण नौ मिनेट 'चलचित्र' को लागि केवल एक टस्टर छ पछि यस वर्ष रिलीजको कारण - सम्भवतः जब क्यासिनो खुल्छ।
अङ्क शीर्षक, अलि फिल्म, वुल्फ स्ट्रीट स्क्रिप्ट लेखक Terence Winter द्वारा लिखित थियो र यो कैप्रिओ र डी Niro मा एक नै फिलिम को भाग को लागि प्रतिस्पर्धा छ। ब्राड पिट पृष्ठभूमिमा पप अप गर्दछ। उहाँको सही भूमिका अझै पनि रहस्य छ।
स्कोरसेन्स संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट निर्देशक मध्ये एक हो, रेजिङ बुल, ट्याक्सी चालक, गुडफेलस, दीभोल्फ वाल स्ट्रीट, र क्यासिनो जस्ता उनको चलचित्रमा। टीजर केहि ट्रेडमार्क सिनेटिक चालहरु संग पैक गरिएको छ: द्रुत जूम, व्यापक दृश्यहरु, तेजी देखि कटौती, र एक राम्रो रेट्रो ध्वनि।
Scorsese विज्ञापन डलर लिन को लागी अधिक भन्दा बढी छ, जसलाई च्यानल, डोल्से र गबबानाको लागि बनाइएका र निर्देशन दिईएको छ, अमेरिकी एक्सप्रेस, र एटी एन्ड टी।
यसले यो विज्ञापनलाई कसरी बनाउँछ र असाधारण असाधारण समर्थन गरिएको हो। न केवल स्कर्ससेन्सी पुरानो विद्यालय मनपर्ने डे नाइरो खेलमा मात्र होइन, तर यो उनको नयाँ 'जाने' अभिनेता लियोनार्डो डे क्यापिलो पनि हुन्। यी दुई हलिवुड भारी वजन र ब्राड पिटले चलचित्र खोल्न सक्छ।
स्टुडियो सिटी रिजर्ट र क्यासिनो मार्केटिंग टीम ले स्पष्ट रूप देखि निर्णय गरेको छ कि बजेट मा कुनै पंच नहीं खींचो। कलाकारहरूले सबै $ 13 मिलियन pocketing प्रत्येक र उत्पादनको कुल लागत $ 70 मिलियन छ।
यद्यपि, वास्तविकतामा, यो सानो परिवर्तन हो। स्टुडियो सिटी रिजर्टले अचम्मको $ 3.2 बिलियन खर्च गरेको छ। ग्वाटेम सिटी मा मोडेल, र दुवै एक Batman र नारी आश्चर्य आभासी वास्तविकता सवारी, यो मध्य 2015 खोल्न अपेक्षा गरिएको छ।
रिसोर्टको केन्द्रीय स्किस्क्राउपर दुई 'एस्टरराइड होल' छ जसले यसको कोरमा एक्सएनएमएक्स मीटर उच्च फेरिस व्हील समावेश गर्दछ। यो एशियामा उच्चतम हुनेछ। त्यहाँ 130 रेस्टुरेन्टहरू, एक ठूलो लक्जरी खरीदारी मल, एक 30 सीट स्टेडियम, र बेशक - एक राज्य को कला 5,000 वर्ग फुट कैसीनो छन्।
परियोजना Melco क्राउन मनोरञ्जन समूह, एक विशाल क्यासिनोहरूको संग्रह संग एक प्रमुख कैसीनो अपरेटरको काम हो। यो दुई सह-अध्यक्षहरू लरेन्स हो र जेम्स प्याकरले व्यावसायिक किंवदंतियों स्टेनली हो र केरी प्याकरका छोरा हुन्। तिनीहरूसँग भर्न ठूला जूताहरू छन्।
यद्यपि मकाउको क्यासिनो राजस्व निकै ठूलो छ, एक्सएनमक्समा चिनियाँ सरकार द्वारा एक दबाबले शेयर मूल्यहरू उचाल्दै पठायो। यो सबै स्टुडियो सिटी को सुरूवात गर्न दबाव जोड्दछ। यो सफल भएको छ। सायद यसैले उनीहरूले मफिन्समा ब्ल्याबेरीको मात्रा जाँच गर्न रबर्ट डी नेरोमा भेट्टाएका छन्।
केही सल्लाह: यदि तपाईं मकोऊको भ्रमणलाई डे नेरो र स्कोरसेन्सको पछाडिमा राख्नुभयो र स्टुडियो सिटीको रोमांचको मजा लिनुहुन्छ भने, तपाईंको ब्रश अप गर्नुहोस् Baccarat.
बाकोक्राट टाढा छ र टाढाको सबैभन्दा मकाऊमा खेल हुन्छ र सुपरस्टाइटिङ चिनियाँ जुआहरू मात्र यो पर्याप्त पाउन सक्दैनन्। मकाउको क्यासिनो राजस्वको दुई तिहाई वीआईपी ब्याकरका खेलाडीहरूबाट आउँछ।
सायद स्कोरसेजको मिनी-उत्कृष्ट टुक्राको अर्को किस्तले यस प्रतिमाको खेललाई प्रदर्शन गर्नेछ। टेबलमा डे निरो विरुद्ध पिट पिट, वाल स्ट्रीटको वुल्फले क्वालालियसहरू पप र पेनी शेयर बेच्न पाउँछन्। यो स्पेस हेर्नुहोस्। हामी हुनेछौं!
पुरुषहरूको टेस्टोस्टेरोन स्तर लक्जरी सामानसँग लिङ्क गरिएको छ
बिट ब्ल्याक ज्याक र रूले यी 10 नियमका साथ
महिला फुटबलहरूले पुरुषभन्दा ठूलो हुन्छ
रक र रोल पासा:3कैसीनो किंवदंतियों (भाग 1)
फिटनेस तथ्य र फरास
बैंकिङ विधिहरू तपाईं क्यानेडियन अनलाइन क्यासिनोमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
5 असामान्य कुराहरू लास वेगासमा गर्न
5 शीर्ष जुआ चलचित्रहरू
शीर्ष 10 रूफो बारहरू
क्यासिनो घर आउँदछ: अनलाइन स्लट र भविष्य
जीवन चकलेटहरूको बक्स जस्तो छ। 1994, फोरिस गम्प, लायन राजा, मित्रहरू र सोनी प्लेस्टेशनले सबैले आफ्नो डेबिट बनाउनुभयो। चार्ट मा, ओएसिस र ब्लर ले यो लडाइयो। कर्ट कोबिनले आत्महत्या गरे, च्यानल सुरंग खोलियो र चार्ल्स र डियानाले यसलाई फोन गरे।
बीचमा ... दक्षिण अफ्रिकीमा ... प्रोग्रामरहरू, विकासकर्ताहरू, र चिन्ता व्यापारीहरूको सानो समूह जुआको भविष्यलाई पुनःलेखन गर्ने बारे थियो। कैसीनो घर आउँदैछ र अनलाइन स्लटले चार्ज गर्नेछ।
क्यासिनो फ्लोरमा, चीजहरू निरन्तर प्रगति हुँदैछन्। मेकानिकल मशीनहरू अब संग्रहालय टुक्राहरू थिए र भिडियो पोकर र भिडियो स्लॉट दुवै यन्त्रहरू सर्वसाधारण थिए।
भिडियोले रेडियो स्टारलाई मार्यो
यो सधैं जस्तै थिएन। आविष्कार वाल्ट फ्राडी र फॉर्च्यून सिक्का कम्पनीले 1975 मा एक क्लासिक 'बेल स्लट मिसिन' को एक भिडियो संस्करण रिलीज गरेको थियो। मिसिन राम्रो तरिकाले प्राप्त भएको थिएन।
त्यहाँ विश्वासका समस्याहरू थिए। संरक्षकले उनीहरूलाई रिल्स कताई देख्न सकेनन्। उनीहरूले नयाँ भिडियो गेमको बारेमा असहज थिए, तथ्याङ्कको बावजुद भिडियो स्लट नेभिडा गेमिङ बोर्डले कडा रूपमा परीक्षण गरेको थियो।
भिडियो स्लॉट को लुकेस्टर रिसेप्शन द्वारा Undredred, SIRCOMA - जो सी सी रेड को सिक्का मिसिनहरु को लागि रहयो - फॉर्च्यून सिक्का कम्पनी किनयो र विकास जारी राखयो। ड्रन पोकरको एक भिडियो संस्करण 1979 मा रिलीज गरिएको थियो र यो तत्काल मुटुमा हिट थियो।
लाइभ खेल्न मन लाग्ने शर्मी खेलाडीहरू अब पोकरको खेलको आनन्द उठाउँछन्, जुनसुकै ठाउँमा भीडबाट टाढा हुन सक्छ। मानिसहरू भिडियो स्क्रिनको विचारमा प्रयोग भए, पैसा जीता थियो, र भिडियो गेमिङको भविष्यको लागि स्थापनाहरू राखिएको थियो।
SIRCOMA ले आफ्नो नाम आईजीटी (अन्तर्राष्ट्रिय गेमिंग टेक्नोलोजी) मा परिवर्तन गर्यो र 1980s र 1990s मा बढेको दुवै भिडियो स्लट र पोकर लोकप्रियता।
त्यहाँ कुनै भौतिक वा मेकानिकल बाधा थिएनन्। खेलहरूमा अब दोस्रो स्क्रिन बोनस राउन्डको लाभांश हुन सक्दछ: अष्ट्रेलियामा विकसित गरिएको एक विशेषता र पहिलो खेल X बक्समा शुरु भयो, खेल तीन ब्याग पूर्णसँग।
बहु-लाइन भुक्तानी पनि सम्भव थियो। खेलाडीहरूले आफ्नो दायाँ बढाउन र धेरै जित्ने रेखाहरूमा शर्त बढाउन सक्थे - 1024 सम्म। खेलहरू चलचित्र, संगीत वा लोकप्रिय मनोरञ्जनमा पनि खेलहरू थिए। ग्राफिक्स र एनिमेसन अब प्याकेजको अंश थिए, समग्र अनुभव थप्दै।
मुख्य आकर्षण नयाँ भिडीयो गेमहरूको अभाव सिर्जना गर्न र अनियमित प्रतीक हुनको लागी ज्याकपोट को रूप मा धेरै रिभोल्युशन प्रतीक हुन को लागी एक अनियमित नम्बर जनरेटर को उपयोग गरेर, प्लेबैक को विशाल खजाना प्रस्तुत गर्ने क्षमता थियो।
प्रत्येक रिेलमा 256 प्रतीकहरूको साथ, एक भर्चुअल तीन-रील खेलमा, 16,777,216 सम्भावना संयोजन हुनेछ। यसले निर्माताले $ 1 शर्तमा लाखौं डलर खरिद प्रस्ताव गर्न अनुमति दिएको छ, ज्ञानमा सुरक्षित यो सबै 16.8 लाख स्पिनहरूमा मात्र एक पटक हुनेछ।
प्रविधिको पनि सक्षम गरिएको स्लॉट जोडिएको छ। कैसीनोमा मात्र होइन तर राष्ट्रभर। विश्वव्यापी प्रगतिशील खेल राम्रो इन्टरनेट जडानमा निर्भर छ।
अब ... फिर्ता दक्षिण अफ्रिकामा। 1994 द्वारा, इन्टरनेटमा 25 मिलियन प्रयोगकर्ताहरू छन् र ईब्यापोरेशन नयाँ व्यापार हो। स्प्याम भर्खरै सुरू गर्न शुरु भएको छ, याहू सुरूवात भएको छ, र मानिसहरू सोधिरहेका छन् 'इन्टरनेट के हो? वैसे पनि?'
Microgaming एक राम्रो विचार संग एक सानो शुरुवात व्यापार हो। अप्रिल 1994 मा, यो संसारको पहिलो अनलाइन क्यासिनोको सुरुवात गर्दछ। इन्टरनेट फेरि कहिल्यै पनि हुनेछैन।
अर्को तीन वर्षमा माइक्रोगिमिङले खेलाडी र क्यासिनो व्यवस्थापनको साथ आफ्नो उत्पादनलाई बढावा दिन जारी राख्छ। यसले व्यापारिक अनलाइन अनलाइन क्यासिनोको रूपमा राख्छ र खेल विकासमा पूर्ण रूपमा फोकस गर्दछ। यो आइल्यान्ड अफ म्यान पनि छ।
बीचमा, थप खेलाडिहरूले खेलकुद सफ्टवेयर विकास बजारमा प्रवेश गर्छन्। Playtech, Cryptologic, रीयल टाइम गेमिंग, Wagerworks, मालिक मीडिया, आईजीटी, र धेरै अन्य सबै दावी अनलाइन कैसीनो पाई को टुक्रा को लागी उनको दावी छ।
र के पाइ छ यो। हाल, अनलाइन क्यासिनो बजार बढ्दै गयो। 2018 मा, यो अनुमान गर्दछ कि ईयू एक्सएनमक्स देशहरु € 28 अरब को बजार उत्पन्न हुनेछ।
र खेलहरू? आज, केहि पनि सम्भव छ। सुरुमा, अनलाइन विकासकहरूले आफ्नो वास्तविक संसार क्यासिनहरूको क्यासिनो खेलहरू पराजित गरे। सबै क्लासिक खेलहरूको सही संस्करणहरू जस्तै नोट गर्नुहोस् ब्लेक, रूले, Craps, र Baccarat चाँडै देखा पर्यो।
स्लट्स क्लोनको रूपमा बन्द भयो तर चाँडो धेरै अधिक भयो, कम्प्यूटर प्रविधिमा फर्काउने हरेक पट्टिको फायदा लिदै। हाम्रो ल्याप्टप, ट्याब्लेट्स, र पीसीहरू अझ शक्तिशाली भएजस्तै खेलहरू राम्रो भए।
अब तपाईं आफ्नो फोनमा स्लट खेल्न सक्नुहुन्छ वा हलिवुड-स्टाइल एनिमेशनमा अचम्म लाग्न सक्नुहुन्छ, खेलहरूसँग एक कथा छ जसले दोहोरो खेल र वफादारीलाई प्रोत्साहन दिन्छ। अनलाइन स्लटहरू अब मात्र तीन कताईने पाङ्ग्राहरू छैनन्। तिनीहरू जटिल र आकर्षक मनोरञ्जन हुन सक्छन्।
चार्ल्स फेले 100 भन्दा बढी वर्ष भन्दा बढी कताई क्यान्सर सुरु गर्यो। अब, तपाईं साथीहरूसँग 3D मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ विश्व भरि, वा एउटा खजानाको लागि जुन तपाईंको जीवनको लागि कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्छ।
इतिहास भरिएको छ - अर्को पटक - हामी भविष्यलाई हेर्छौं र स्लटमा निर्दिष्ट गर्दछौं। अर्को शताब्दी कताई रिल्सको लागि के हो?
सिंहासन अनलाइन स्लॉट को खेल - यो क्यासिनो खेल संग Westeros अनुभव!
लाइभ डेलर र आरएनजी खेलहरू फरक फरक